(No. 60 , September 25, 2020)
၁။ ရှမ်းမြောက် Howa Bum တောင်ပေါ် မြန်မာ စစ်တပ် နှင့် KIA တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွား
၂။ အစိုးရနှင့် မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ အွန်လိုင်းဆွေးနွေးရန် လမ်းကြောင်းရှာမရဖြစ်နေ
၃။ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ရာသက်ပန် ရပ်ဆိုင်းဖို့ ကျနော်တို့ ကြိုးစားမယ်
၄။ သျှမ်း/မြောက် လားရှိုးမြို့နယ် အတွင်း စစ်ကြောင်းလှုပ်ရှားမှု ပိုများလာ
၅။ ကယားပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအား အဂတိကော်မရှင်သို့ တိုင်ကြားထားသော်လည်း အကြောင်းပြန်ခြင်း မရှိသေးဟုဆို
၆။ ကျေးရွာနယ်နမိတ်ထိ ရွှေတူးဖော်လာမည်ကို ဆွမ်ပရာဘွမ်ဒေသခံများစိုးရိမ်
၇။ တောင်ကြီးတွင် SNLD ပါတီ အောင်နိုင်ရေးဆိုင်းဘုတ်ကို လူငယ်တစ်စုက ဖျက်ဆီးလိုက်သည့်အပေါ် ခွင့်လွှတ်ပေးရန် လာရောက်တောင်းပန်သဖြင့် ပါတီက ကျေအေး
၈။ ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့် ယခုနှစ် ကယား ‘အဲ့ဒိုပေါ်မီ’ ပွဲတော်ကို အကျဉ်းချုံး ကျင်းပမည်
၉။ ပအိုဝ်းရေးရာမဲစာရင်းတွင် ကျန်ခဲ့သူများကို ပြန်လည်ထည့်သွင်းထား
၁၁။ ဖားကန့်တွင် မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုများ ရပ်နားထား
၁၂။ ကွန်ဟိန်းမြို့နယ်တွင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ SNDP ပါတီ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး စတင်
၁၃။ ပါတီစည်းရုံးရေးသွားခဲ့သည့် ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၃ ဦး Quarantine ဝင်ရ
၁၄။ ချင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (CNLD) ဥက္ကဋ္ဌ၏ Facebook Page ခေတ္တပိတ်ပင်ကန့်သတ်ခံရ
၁၅။ မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီကို ထောက်ခံသူများ မျှော်လင့်ချက်ကြီးမား
၁၆။ ဖမ်းဆီးသွားတဲ့ ကျောက်တော် အရပ်သား ၁၀ ဦး တပ်မတော် ပြန်လွှတ်
၁၇။ တိုင်းလိုင် (ရှမ်းနီ) အမျိုးသားများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီက မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်တွင် မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုအဖြစ် စက်လှေ အစင်း ၅၀ ကျော်ဖြင့် ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက် လှည့်လည်
၁၈။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် စစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုများ အမြန်အဆုံးသတ်ရန် ကုလ လူ့အခွင့်အရေး ကျွမ်းကျင်သူ တောင်းဆို
၁၉။ နားဟိုင်းလုံ ကျေးရွာ နေအိမ်ထဲ ရေဝင်ပြီး ဒေသခံများအခက်ကြုံနေ
၂၀။ မွန်ပါတီက ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုသာ မဲပေးကြဖို့ မွန်လူငယ်ဆုံရပ် တိုက်တွန်း
၂၁။ ရခိုင်ပါတီများ၏ ရုပ်မြင်သံကြားမဲဆွယ်မိန့်ခွန်းများ ပြင်ဆင်ဖြတ်တောက်ခံရ
၂၂။ UNESCO တင်မည့် ဒုံးအက ပြင်ဆင်စရိတ် ဘတ်ဂျက် မလောက်ငှသေးဘဲဖြစ်နေ
၂၃။ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ စွမ်းအင်ကဏ္ဍကို ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာ ထည့်သွင်းဆွေးနွေးရန်လိုဟုဆို
၂၄။ ထိုင်းမြန်မာ ဘုရားသုံးဆူဒေသ၌ ကုန်ပစ္စည်းများဖြတ်သန်းနေမှုကို အောက်တိုဘာ ၅ ရက်နေ့အထိ ပိတ်ထား မည်
၂၅။ ပိုးတွေ့လူနာတည်းခိုခဲ့သော မြစ်ကြီးနား အေးချမ်းသာတည်းခိုခန်း နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သူ ၂၀ ဦးကို Quarantine ထားရှိ
၂၆။ UDP ဥက္ကဋ္ဌ ၏နောက်ကြောင်းရာဇဝင်ကို ချမပြပါက ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းနုတ်ထွက်မည်
၂၇။ ကယားပြည်နယ်ရှိ ကွာရန်တင်းစင်တာများမှ ရက်မပြည့်ပဲထွက်ပြေးပါက သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဥပဒေနှင့် အရေးယူ မည်ဟု ဆို
၂၈။ ချင်းပြည်နယ်တွင်လွှတ်တော်နေရာစုစုပေါင်း ၃၈ နေရာဝင်ပြိုင်မည့် ညီညွှတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(UDP)အနေဖြင့် ၇၅% အနိုင်ရရှိရန်ယုံကြည်မှုရှိဟုဆို
၂၉။ ထိုင်းပြန် အလုပ်သမားများကို လက်ခံချိန် ကန့်သတ်မည်
၃၀။ ရခိုင်တောင်ပိုင်းမှာ NLD ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေး ဆိုင်းဘုတ်တချို့ ဖျက်ဆီးခံရ
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်ခရိုင် Howa Bum တောင်ပေါ် မြန်မာစစ်တပ် တပ်မ (၈၈) စစ်ကြောင်း နှင့် ကချင်လွတ်လပ် ရေးတပ်မတော် KIA တပ်ရင်း (၃၆) တပ်ဖွဲ့များကြား စက်တင်ဘာ ၂၄ ကြာသပတေးနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းမှ တိုက်ပွဲပြန်လည် ဖြစ်ပွားလာကြောင်း ဒေသခံများဆိုပါသည်။ တပ်မ (၈၈) စစ်ကြောင်းများ KIA တပ်ရင်း (၃၆) စခန်းရှိရာ Howa Bum တောင်ပေါ်ကို “နယ်မြေရှင်းလင်းရေး” စစ်ဆင်သောကြောင့် ည ၈ နာရီချိန်ထိ နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားပြီး မြန်မာစစ်တပ်၏ လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ်သံများ ကြားနေရသည်ဟု ဒေသခံများ ပြောပါသည်။
“မွန်းလွဲပိုင်း ၄နာရီ မိနစ် ၂၀ ခန့် ကနေ KIA တပ်ရင်း (၃၆) စခန်း Howa Bum တောင်မှာ အခုထပ်မံ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား နေပါတယ်။ တပ်မ (၈၈) ဖက်က သွား တိုက်ခိုက်လို့ တိုက်ပွဲ ဖြစ်တာပါ။ အခုချိန်ထိ လက်နက်ကြီးတွေ ပစ်ခတ်နေပါတယ်”ဟု အမည်မဖော်လိုသူ ဒေသခံတစ်ဦး ကချင်သတင်းဌာန KNG ကို ကြာသပတေးနေ့ည ၈ နာရီခန့်မှာ ပြောပါသည်။ KIA တပ်မဟာ (၆) လက်အောက် တပ်ရင်း (၃၆) နယ်မြေ မူဆယ်ခရိုင် ကြူကုတ် (ပန်ဆိုင်း)မြို့နယ်ခွဲ ဧရိယာအတွင်း တပ်မတော် တပ်မ (၈၈) နှင့် တပ်မ (၉၉) စစ်ကြောင်းများ “နယ်မြေရှင်းလင်းရေး”စစ်ဆင်နေသောကြောင့် ယခုလ စက်တင်ဘာ (၁၀)မှ ပြန်လည် တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများ ဆိုပါသည်။
၎င်း တိုက်ပွဲပြန်စခဲ့သည့်နေ့တွင် လူဦးရေ ၃၀၀ ခန့်ရှိ Man Kawng (မန်ကောင်း)ရွာသား အားလုံးသည် နီးစပ်ရာ Man Pying (မန်ပိန်း) ရွာသို့ စစ်ရှောင် ခိုလှုံနေရသည်ဟု Man Kawng ရွာလူကြီးက အစောပိုင်းက ကချင်သတင်းဌာန KNG ကို ပြောပါသည်။ တပ်မတော်၏တစ်ဖက်သတ် ထိုးစစ် ရပ်ထားမှုကို စက်တင်ဘာ (၃၀) ထိ ရက်တိုး ထားသော်လည်း တပ်မ (၈၈)၊ တပ်မ (၉၉) နှင့် တပ်မ (၂၂) တပ်ဖွဲ့များက “နေမြေရှင်းလင်းရေး စစ်ဆင်လှုရှားမှု” ကို ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း အထူး သဖြင့် မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ် ၄ဖွဲ့ KIA၊ ကိုးကန့် MNDAA၊ ရခိုင် AA နှင့် တအာင်း TNLA စခန်းများရှိရာ မူဆယ်ခရိုင်အတွင်း ပြုလုပ်နေခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ https://burmese.kachinnews.com/2020/09/25/%e1%80%9b%e1%80%be%e1 %80%99%e1%80%ba%e1
အစိုးရနှင့် မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ အွန်လိုင်း ဆွေးနွေးပွဲ လုပ်နိုင်ရန် လမ်းကြောင်းရှာမရဖြစ်နေသည်ဟု ကချင်လွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူက ပြောသည်။“အွန်လိုင်းမီတင်လုပ်ဖို့ လမ်းကြောင်း ရှာနေတဲ့ အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ ဘယ်တော့လုပ်မယ်ဆိုတာ လုပ်မယ်ဆိုတာ အတိအကျ သတ်မှတ်တာ မရှိဘူး။
ကျွန်တော်တို့လည်း အွန်လိုင်းမီတင်လုပ်ဖို့ ကတော့ လိုင်းကိစ္စရော အင်တာနက်ကိစ္စရော လောလောဆယ်တော့ အဆင် မပြေဘူးလေ။ အဲတာတွေ ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာ ညှိနှိုင်းပြီးတော့ လမ်းကြောင်းရှာနေ တာဖြစ်တယ်”ဟု ဗိုလ်မှူးကြီး နော်ဘူက ပြောသည်။ အစိုးရနှင့် မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ အွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပမည်ဆိုပါက မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ် လေးဖွဲ့လုံး ပါဝင်ရမှာ ဖြစ်ပြီး လေးဖွဲ့လုံး အင်တာနက်အဆင်ပြေမှာသာ ဆွေးနွေးလို့ရမည်ဟုဆိုသည်။“KIO တစ်ဖွဲ့ချင်းနဲ့ လုပ်မှာလည်း မဟုတ်ဘူး ကျွန်တော်တို့ မြောက်ပိုင်းအားလုံးနဲ့ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ အဆင်ပြေရင်လည်း အခြားသော ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေ အဆင်မပြေရင်လည်း အဟန့်အတားဖြစ်သွားနိုင်တယ်လေ တစ်ခြားသော အဖွဲ့အစည်း မှာ အဆင်ပြေရင်လည်း ကျွန်တော်တို့မှာ လုပ်လို့မရလို့ ဖြစ်နေတယ်လေအဲတာကြောင့် လမ်းကြောင်းရှာနေတဲ့ အချိန်ကာလ ဖြစ်နေတာ” ဟု ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူက ပြောသည်။
မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သည့် KIO သည် လိုင်ဇာတွင် ရှိနေပြီး ကျန်သည့် ပလောင်(တအန်း)ပြည်နယ် လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး (PSLF/TNLA)၊ ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်(ULA/AA)၊ မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရေ စီမဟာမိတ်တပ် ဖွဲ့(MNDAA) တို့ မည်သည့်နေရာတွင်ရှိနေပြီး မည်သို့ ပါဝင်ဆွေးနွေးမည်ကို မသိရှိသေးကြောင်း ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူက ဆိုသည်။ အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေး အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ဦးလှမောင်ရွှေက အစိုးရနှင့် မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တို့ အွန်လိုင်း ဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်မည်ကို တရားဝင် မသိရှိသေးဘဲ ဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်မည်ဆိုသည်ကိုတော့ ကြားသိထားသည်ဟု ဆိုသည်။ မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ် လေးဖွဲ့တွင် ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်ဖွဲ့(KIA)၊ ပလောင်(တအန်း)ပြည်နယ် လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး (PSLF/TNLA)၊ ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်(ULA/AA)၊ မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရေ စီမဟာမိတ်တပ် ဖွဲ့(MNDAA) တို့ ဖြစ်သည်။ http://burmese.monnews.org/2020/09/24/%e1 %80%a1 %e1%80%85%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80
၂၀၂၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန် ရက်ပေါင်း ၄၀ ကျော်သာ လိုတော့သော်လည်း တဖက်တွင် COVID -19 ရောဂါကူးစက်မှုနှုန်း မြင့်တက်နေဆဲ ဖြစ်သဖြင့် မဲဆွယ် စည်းရုံးရမည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများမှာ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကြားမှ မဲဆွယ်မှုကို ဆောင်ရွက်နေကြရသည်။ ကချင်ပြည်နယ်တွင် အင်အားကြီး ပါတီများဖြစ်သည့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (NLD)၊ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင် ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (USDP) တို့ကို အနိုင်ယှဉ်ပြိုင်ရန် ကချင်ပြည်နယ် ပြည်သူ့ပါတီ (KSPP) ကလည်း မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုများ လုပ်ဆောင်နေသည်။ KSPP သည် ကချင်ပါတီ ၄ ပါတီ ပူးပေါင်းလိုက်သည့် ပါတီကြီးဖြစ်ပြီး ကချင်လူထု ထောက်ခံမှုလည်း ရှိသည့်အပြင် ကချင် ပြည်နယ်တွင်း ကိုယ်စားလှယ် လောင်း နေရာ ၆၇ နေရာ၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားရေးရာ ဝန်ကြီးနှင့် ဗမာတိုင်းရင်းသားရေးရာ ဝန်ကြီး ၂ နေရာတို့ကို ဝင်ပြိုင်မည် ဖြစ်ကာ ပြည်နယ် အစိုးရသစ် ဖွဲ့ရာတွင် ပါဝင်နိုင်ရေး အထိ မျှော်မှန်းထားသည်။
မေး။ ။ KSPP ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကတိကဝတ်ထဲမှာ မြစ်ဆုံစီမံကိန်း လုံးဝ ရပ်ဆိုင်းရေးလည်း ပါတယ်ဆိုတော့ အန်ကယ် တို့ ကိုယ်စားလှယ်တွေ အနိုင်ရခဲ့ရင် မြစ်ဆုံအရေးရော ဘာတွေ လုပ်ပေးမှာလဲ။
ဖြေ။ ။ မြစ်ဆုံက လူ့အသက်နဲ့ ဆိုင်တယ်။ ပြည်သူလူထု၊ အထူးသဖြင့် ကချင်ပြည်နယ်သားတွေ အသက်အန္တရာယ်အများ ကြီး ရှိပါတယ်။ နောက်တနိုင်ငံလုံး ဧရာဝတီမြစ်တကြောလုံးမှာနေကြတဲ့ ပြည်သူတွေလည်း ဒုက္ခရောက်ကြမှာပါ။ ဒါကြောင့် မြစ်ဆုံက ပြည်သူလူထု လုံးဝ မထောက်ခံတာ ပြည်နယ်သားတွေအပြင် အားလုံး မထောက်ခံတာကို ကျနော်တို့ ပါတီက မထောက်ခံနိုင်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ပါတီကတော့ ပြည်သူ လူထုရဲ့ သဘောဆန္ဒကို အဓိက ထားပါတယ်။ ပြည်သူ့သဘောထား အတိုင်းပဲ ကျနော်တို့ သွားချင်တယ်။ မြစ်ဆုံက ပြည်သူလူထုက ဘယ်တော့မှလည်း ထောက်ခံနိုင်မှာ မဟုတ်လို့ ကျနော်တို့
KSPP က အမြဲတမ်း မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ကန့်ကွက်သွားပါမယ်။ မြစ်ဆုံနဲ့ ပတ်သက်ရင် ကျနော်တို့က ရွေးကောက်ပွဲ နိုင်သည် ဖြစ်စေ၊ မနိုင်သည်ဖြစ်စေ ကျနော်တို့ ပါတီက အမြဲကန့်ကွက်သွားမှာပါ။ မူဝါဒ ချမှတ်ထားပါတယ်။
ဒေါက်တာ မနမ်တူးဂျာသည် KSPP ၏ ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် တာဝန်ယူထားသည့်အပြင် အင်ဂျန်းယန်မြို့နယ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) မှ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တဦး ဖြစ်သည်။ https://burma.irrawaddy.c om/opinion/interview/2020/09/25/230486.html
သျှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း လားရှိုးမြို့နယ် မိုင်းယော် ကျေးရွာအတွင်း အစိုးရတပ်မတော် စစ်ကြောင်းများ လှုပ်ရှားမှုပိုများလာ ကြောင်း စုံစမ်းသိရသည်။ အစိုးရတပ်မတော် စစ်ကြောင်းသည် သြဂုတ်လကုန်၊ စက်တင်ဘာလဆန်းပိုင်းမှ စတင်ကာ သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း လားရှိုး၊ကွတ်ခိုင်၊မူဆယ်၊နမ့်ခမ်းနှင့်မန်တုံဘက် စစ်အင်အားဖြည့်ဆည်းမှုများရှိခဲ့ကြောင်းသျှမ်းမြောက် လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်အဖွဲ့၏ အသိုင်းအဝန်းက ပြောပြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၂၀ ပါတီစုံ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန် ရက်ပေါင်း ၅၀ ကျော်သာလိုတော့သည့်အချိန် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မြန် ရောဂါလည်း တနေ့ထက်တနေ့ ကူးစက်မှုနှုန်း၊ သေဆုံးမှုနှုန်းမြင့်တက်လာသည်။
တခြားပြည်နယ် ဒေသများတွင် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပါတီအသီးသီးမှ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးများပြုလုပ်နေသကဲ့သို့ သျှမ်းမြောက်ပိုင်းတွင်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ အန္တရာယ်နှင့် စစ်ရေးအန္တရာယ်ကြား စိုးရိမ်စိတ်ဖြင့် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဆင်း နေကြ ကြောင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အသိုင်းအဝန်း က ပြောသည်။ လက်ရှိမှာ သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း လားရှိုးမြို့နယ်အတွင်း တိုက်ပွဲ ထိတွေ့မှုများရှိပြီး၊ စည်းရုံးရေး ဆင်းချိန် စစ်ကြောင်းများ သွားလာလှုပ်ရှားမှုကိုလည်း မြင်တွေ့နေရကြောင်း လားရှိုး အမျိုးသား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် စိုင်းဝမ်းလျန်းခမ်း က သျှမ်းသံတော်ဆင့် ကိုပြောသည်။ စိုင်းဝမ်းလျန်းခမ်းသည် ၂၀၂၀ ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရှမ်းအမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်(SNLD) လားရှိုးမြို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အဖြစ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည် ဖြစ်သည်။
လက်ရှိကာလတွင် တိုက်ပွဲများမဖြစ်စေချင်ကြောင်း၊ အစိုးရတပ်မတော် အနေဖြင့် စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုကို ရပ်တန့်ပေးစေလိုပြီး၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များအနေဖြင့် သွားလာလှုပ်ရှားမှုကို ရပ်တန့်စေချင်ကြာင်းလည်း သျှမ်းပြည်တွင် လှုပ်ရှားနေ သည့် နိုင်ငံရေးပါတီများက ပြောသည်။“တိုက်ပွဲက ကျနော်တို့မဖြစ်စေချင်ဘူး။ ဘယ်အဖွဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် တိုက်ပွဲဖြစ်မယ့် အရိပ်အယောင် ရှိရင် ရှောင်ကြဉ်ဖို့လိုပါတယ်။ တပ်မတော် စစ်ကြောင်းကလည်း ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေ ရပ်တန့်ဖို့လိုပါတယ်” ဟု စိုင်းဝမ်းလျန်းခမ်း က ပြောသည်။
လားရှိုးမြို့နယ်အတွင်း အစိုးရတပ်မတော် နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များသည် အချိန်မရွေးပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားနိုင် သည့် အနေအထားဖြစ်နေကြောင်း၊ လက်ရှိမှာ စစ်ရေးနှင့် ကိုဗစ်-၁၉ အရေးကို စိုးရိမ်မှုကြောင်း မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး မဆင်းနိုင်သေးကြောင်း လားရှိုးမြို့ တအာင်း (ပလောင်)အမျိုးသား ပါတီ (TNP) ဥက္ကဌ ဦးအောင်မင်း က သျှမ်းသံတော်ဆင့် ကိုပြောသည်။ သည်။ https://burmese.shannews.org/archives/18641
ကယားပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှို ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်က ငွေကြေး သုံးစွဲမှုများ နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးရန် အဂတိ လိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်ထံ စက်တင် ဘာလ ၈ ရက်နေ့က တိုင်ကြားစာ ပေးပို့ထားပြီဖြစ်သော်လည်း စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်အထိ အကြောင်းပြန်ခြင်းမရှိသေးကြောင်း ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသဲရယ်က ကပြောသည်။ ဦးသဲရယ်သည် ကယားပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် အပေါ်စွပ်စွဲပြစ်တင်မှု ၌ ကယားပြည်နယ် လွှတ်တော်မှ ဖွဲ့စည်းပေးထားသည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့တွင် ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သူလည်း ဖြစ် သည်။
ဦးသဲရယ်က “ လက်ရှိကျနော်တို့ သိတာကတော့ သိန်း ပေါင်း ၅၀၀၀ ဝန်းကျင် လောက် တွေ့ရ ပါတယ်။ ဒီလောက်များတဲ့ ငွေကြေးကို ဒီတိုင်း လွှတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း ဒီလိုကိစ္စ မျိုးကို လွှတ်ထားတဲ့ လူတွေ လည်း သူတို့မှာ အဂတိလိုက်စား၊ အဂတိ မြောက်တယ်လို့ ကျနော်တို့ စွပ်စွဲလို့ ရတယ်” ဟု ပြောသည်။ အဂတိ လိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်မှ ပြော ရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးကျော်စိုးက “ စုံစမ်း စစ် ဆေးရေးကိစ္စရပ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်း တိုင်ကြားစာတွေကို လျှို့ဝှက်ထားတယ် စုံစမ်းစစ် ဆေးရေးစာတွေကို လျှို့ဝှက်ထားရပါတယ် ပြီးမှသာ ကျနော်က လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့ အချိန်မှာ ပြည်သူ လူထုကို အသိ ပေးတဲ့ ကိစ္စကို ထုတ်ပြန် ပေးတယ် တချို့ကိစ္စ တွေကျတော့ တိုင်ကြား သူကို အကြောင်းပြန် ကြားစာလေးတွေ ပို့ပေးပါ တယ်”ဟု မဇ္ဈိမ သတင်း ဌာနကို ပြောသည်။
ကယားပြည်နယ် စာရင်းစစ်ချုပ်၏ အစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အား လွှတ်တော်တွင် စွပ်စွဲပြစ်တင် ကြောင်း အဆိုတင်သွင်း မဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ရာ ထောက်ခံမဲ ၁၆ မဲ၊ ကန့်ကွက်မဲ ၄ မဲ ဖြင့် လွှတ်တော်က အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ သည့် အတွက် တာဝန်မှ ရပ်နားခံခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။ http:// www.mizzi maburmese.com/article/73767
ကချင်ပြည်နယ် ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့နယ် ဖုန်အိန်ယာန် (Hpung Ing Yang) ကျေးရွာတွင် အစိုးရတရားဝင်ခွင့်ပြုထားသည့် ရွှေတူးဖော်လုပ်ကွက်မြေနေရာထက်ကျော်လွန်ပြီး ကျေးရွာ၏ နယ်နမိတ်အတွင်းထိ ဝင်ရောက်တူးဖော်လာမည်ကို ဒေသခံ များက စိုးရိမ်နေကြသည်။
ပြည်နယ်အစိုးရက တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသော အသေးစားသတ္တုတူးဖော်ခွင့် လုပ်ကွက်မြေနေရာထက်ကျော်လွန်ပြီး ကျေးရွာ၏ နယ်နမိတ်အတွင်းထိ ရွှေတူးဖော်ခွင့်ရရှိရေး လုပ်ဆောင်နေသောလုပ်ငန်းရှင်များရှိနေသောကြောင့် လုံးဝ ကန့်ကွက်ကြောင်း ဒေသခံဖြစ်သော ဦး Lajaw La Htoi က ယခုလို ပြောဆိုသည်။“တစ်ချို့လုပ်ငန်းရှင်များက အစိုးရက ချထားပေးတဲ့ မြေနေရာတွေမှာ မဟုတ်ဘဲ ကျေးရွားရဲ့ နယ်နမိတ်အတွင်းမှာ ရွှေတူးဖော်ဖို့ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်
ရှိနေတာတွေကို ကြားသိနေရတယ်။ ပြောချင်တာက လုပ်ငန်းရှင်တွေ အနေနဲ့ အစိုးရနဲ့ တရားဝင်လုပ်နေရင်လည်း ကျနော်တို့ ဒေသခံတွေနဲ့က တရားဝင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ မြေကွက်တိုင်းတာ တာတွေလုပ်လာရင် ဒေသခံ တွေနဲ့ ကြီးမားတဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာမှာဘဲ။ စီမံကိန်း မဝင်အောင်လည်း ဒေသခံတွေအားလုံးက ဆက်လက် ကန့်ကွက် သွားမယ်” ဟု ပြောဆိုသည်။
ဆွမ်ပရာဘွမ် မြို့နယ်အတွင်း အစိုးရက တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသည့် လုပ်ကွက် ၁၃နေရာချထားပြီး အင်ဇာဇွပ်အထက်ဖက် ရှိ ဂဖရန့်ခူး(ဒေသခေါ်)အနီးတဝိုက်၊ အင်ဘန်ခ အနီးရှိ ဆင်လီဇွပ်ခူး၊ ဖုန်အိန်ခအနီးတဝိုက်၊ လက်ပံချောင်းဆုံ (ဖုန်ငိုင်ခ)နှင့် ဖုန်ကျန်းခ အထက်ဘက်တွင်ရှိသော ရှင်ဒန့်ခူးတွင် ၂ နေရာ၊ အင်ဘန်ဇွပ်ဘက်ရှိ ဝါးတောမှော် စသောနေရာများတွင် ချထား ကြောင်းသိရသည်။ ဖုန်အိန်ခနှင့် ဖုန်ကျန်ခ မြစ်ဆုံ ၂ ခု၏ အောက်ဘက်ခြမ်းတွင် ကျေးရွာနယ်နမိတ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထား ပြီး ရွှေတူးဖော်နေသောနေရာနှင့် လက်ရှိကျေးရွာတည်နေရာသည် အထက်ဘက်တွင် ၃ မိုင်ခန့်နှင့် အောက်ဘက်တွင် ၂ မိုင်ကျော်ခန့်သာ နီးကပ်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများပြောဆိုချက်မှ သိရပါသည်။
ရွှေတူးဖော်မှုကြောင့် ဒေသခံများ ဆုံးရှုံးရသောလယ်ယာမြေများအတွက် လုပ်ငန်းရှင်များဘက်မှ နစ်နာကြေးအဖြစ် အများဆုံး သိန်း ၂၀ ခန့် ပြန်လည်း ပေးခဲ့သည်ဟုလည်း သိရသည်။ အဆိုပါ မြို့နယ်များတွင် ရွှေတူးဖော်ခွင့်ကို တရားဝင်ချ ထားပေးခြင်းမှာ တရားမဝင်လုပ်ကိုင်နေသူများကိုတရားဝင် လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးပြီး နိုင်ငံတော်အခွန်ပိုမိုရရှိလာအောင် လုပ်ထုံး လုပ်နည်းအရ ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်ဟု ရွှေလုပ်ကွက်ချထားပေးမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြည်နယ် သဘာဝသယံဇာတဝန်ကြီး ဦးဒါရှီလဆိုင်းက ကချင်သတင်းဌာန KNG ကို ယခင်က ဖြေဆိုခဲ့ဖူးသည်။ https://burmese .kachinnews.co m/2020/09/23/%e1%80%80%e1%80%bb%e1%80%b1%e1%80%b8%e1
တောင်ကြီးမြို့နယ် ရွှေညောင်မြို့ သံတဲတိုက်နယ်တွင် SNLD ပါတီ အောင်နိုင်ရေးဆိုင်းဘုတ်ကို လူငယ်တစ်စုက ဖျက်ဆီး လိုက်သည့်အပေါ်ခွင့်လွှတ်ပေးရန်လာရောက်တောင်းပန်သဖြင့် ကျေအေးပေးခဲ့ရကြောင်းတောင်ကြီးမြို့နယ် ရှမ်းတိုင်းရင်း သားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ပါတီထံမှ သတင်းရရှိသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ တောင်ကြီးမြို့နယ် ရွှေညောင်မြို့ အနောက်မြောက်ဘက် သံတဲတိုက်နယ်အဝင်ရှိ SNLD ပါတီ အောင်နိုင်ရေး ဆိုင်းဘုတ်ကို စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက် ညပိုင်းတွင် လူငယ်တစ်စုက ဖျက်ဆီးခဲ့ခြင်းကြောင့် တာဝန်ရှိသူများက လိုက်လံစုံစမ်း ကြည့်ရာ လူငယ်ငါးဦးက ကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း တောင်ကြီးမြို့နယ် SNLD ပါတီတွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဦးစိုင်းခမ်းတီက ပြော ကြားသည်။“လူငယ်က ငါးယောက်ဗျ။ ကျွန်တော်အပေါ်ကို လှမ်းအကြောင်းကြားလိုက်တော့ လက်မှတ်ထိုးပေးမှာပေ့ါ။ မထိုးရသေးဘူးဆိုတာ အပြင်ရောက်နေလို့၊ မနက်က ဒီတိုင်းထိုးလိုက်တယ်။ အခု သူတို့ရွာရဲ့ ရာအိမ်မှူးတွေနဲ့ ထပ်ပြီးလုပ်ရ မှာပေ့ါ။ သံတဲတိုက် နယ်အုပ်စု ကျေးရွာပေါင်း ၁၁ ရွာ ရှိတယ်။ ရွာအဝင် လမ်းဆုံမှာပေ့ါ။ အရက်သောက်တာ ညတိုင်းတော့ မတွေ့ဘူးဗျ။ အရင်တုန်းက မရှိခဲ့ဘူး။ ဒါပထမဆုံးပေ့ါ။ ဒါကို ဝိုင်းဝန်းပြီး တားဆီးဖို့လိုမယ်လို့ ထင်ပါတယ်” ဟု ဦးစိုင်းခမ်းတီ က ဆိုသည်။
အဆိုပါ လူငယ်အဖွဲ့သည် နောက်တစ်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် တောင်ကြီးမြို့နယ် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဦးစိုင်းခမ်းတီထံ လာရောက်တောင်းပန်ခဲ့သဖြင့် ဦးစိုင်းခမ်းတီမှတဆင့် မြို့နယ်အလုပ်အမှု ဆောင်အဖွဲ့ထံသို့ ဆက်လက်တင်ပြခဲ့ရာ တောင်းပန်မှုကို လက်ခံခဲ့ပြီး ကျေအေးပေးခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ လူငယ်ငါးဦးတွင် မောင်တင်ကိုထွေးသည် ဆိုင်းဘုတ်ကို ခဲဖြင့်ပေါက်သူဖြစ်ပြီး နောက်နောင် ကျူးလွန်မှုမရှိစေရေး ရပ်ကွက်ရာအိမ်မှူးများ ရှေ့မှောက်တွင် ကတိခံဝန်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း ထပ်မံပြုလုပ်သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ https://news-eleven.co m/article/193 656
ကိုဗစ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ကယားတိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စုများ နှစ်စဉ် ရိုးရာမပျက် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပလေ့ ရှိသည့် (၈) ကြိမ်မြောက် စုပေါင်း အဲ့ဒိုပေါ်မီ (ခေါ်) ဒီးကူ ပွဲတော်ကို ယခုနှစ်တွင် အကျဉ်းချုံးသာ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပွဲတော်ကျင်းပရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ခူးဖဲသူးက ပြောသည်။“ဒီလမှာပေါ့နော်၊ ခါတိုင်းနှစ်လိုမျိုး ကျွန်တော်တို့ စည်စည်ကားကား သိုက်သိုက်မြိုက်မြိုက် ကျင်းပနိုင်ခြင်းတော့ မရှိတော့ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ COVID-19 ရောဂါကြောင့်ပေါ့လေ၊ အကျဉ်းချုံးလောက်ပဲ ကျင်းပဖို့ ရှိပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
အဲ့ဒိုပေါ်မီ ပွဲတော်ကို ယခု စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ၃၀ ရက်နေ့အထိ ဖရူဆိုမြို့နယ် တောင်ဘက် လောပလျားလဲ ကျေးရွာတွင် ကျင်းပရန် စီစဉ်ထားပြီး ပွဲကျင်းပရေး ကော်မတီနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ရပ်မိရပ်ဖ အပါအဝင် ကျေးရွာများမှ လာရောက်မည့် ဒေသခံများကို လူဦးရေ အကန့်အသတ်ဖြင့် ဖိတ်ကြားသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထို့အပြင် ယခင်နှစ်ကကဲ့သို့ ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း၊ ဖယ်ခုံမြို့နယ်၊ နောင်လိုင် ကျေးရွာတွင် (၇) ကြိမ်မြောက် ကျင်းပခဲ့ သည့် စုပေါင်း အဲဒိုပေါ်မီ ပွဲတော်ကဲ့သို့ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဆိုင်သော ရိုးရာပြခန်းများ ပါဝင်တော့မည် မဟုတ်ကြောင်း ခူးဖဲသူးက ပြောသည်။
အဆိုပါ (၇) ကြိမ်မြောက် ကျင်းပခဲ့သည့် စုပေါင်း အဲ့ဒိုပေါ်မီ ပွဲတော်ကို ကယားပြည်နယ် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှထွေးနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကရင်နီအမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ (KNPP) မှ ဦးရွှေမျိုးသန့်တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ တချိန်က ကယား (ကရင်နီ) လူမျိုးများ၏ “ဖိုဒီးကရီး” အရှင်သခင်ကို ရိုင်းပျစွာ ဆက်ဆံခဲ့သော ယွန်းလူမျိုးများသည် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါ ဖြစ်ခဲ့ကြပြီး ထိုအခြေအနေတွင် ကရင်နီ လူမျိုး တို့က “ဒီးကူ” ခေါ် ကိုင်းပင် တစ်မျိုး၏ အရွက်ဖြင့် ကောက်ညှင်းကို ထုပ်ကာ ချည်နှောင် ချက်ပြုတ်ထားပြီး မပုပ်မသိုးဘဲ ကြာရှည် အထားခံနိုင်အောင် ရိက္ခာအဖြစ် အသုံးပြုကာ ယွန်းလူမျိုးများကို နေ့ရောညပါ အဆက်မပြတ် တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ သည်။ ယင်းအတွက် “ဖိနှိပ်မူမှ လွတ်မြောက်သည့် အထိမ်းအမှတ်” အနေဖြင့် ဒီးကူပွဲကို နှစ်စဉ် ကျေးရွာတိုင်း ကျင်းပခဲ့ကြ ခြင်း ဖြစ်သည်။ http://www.mizzimaburmese.com/article/73782
ကရင်ပြည်နယ်၊ ဖားအံမြို့နယ်၊ အောက်ကော့ရင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မရင်းကုန်းကျေးရွာတွင်နေထိုင်သည့် ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသား များအနေဖြင့် ပအိုဝ်းရေးရာ မဲစာရင်းတွင် ကျန်ခဲ့သူများကို စိစစ်ပြီးနောက် ပြန်လည်ထည့်သွင်း ထားပြီးဖြစ်သည်ဟု ဖားအံမြို့နယ်၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသောင်းထွန်းက ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
အဆိုပါ အောက်ကော့ရင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မရင်းကုန်းကျေးရွာတွင် နေထိုင်သည့် ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားများသည် ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၀ နှင့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်နယ်၊ ပအိုဝ်းရေးရာမဲကို ပေးခွင့်ရသည်ကိုတွေ့ရ သော်လည်း ယခု ၂၀၂၀ မဲစာရင်းတွင် မပါသည့်အတွက် မြို့နယ်ကော်မရှင်ထံ တင်ပြခဲ့သည်ဟု ပြည်နယ်၊ ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာ၊ တစ်သီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ခွန်မင်းအောင်(ခ) မောင်မောင်က ပြောသည်။“ကျနော် အရင်ရွေးကောက်ပွဲတွေ တုန်းက ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရဲ့ ကိုယ်စားလှယ် လုပ်ပေးခဲ့ဖူးတယ်။ အဲ့တုန်းက မရင်းရွာက ပအိုဝ်းတွေ ရေးရာမဲပေးခဲ့ရဖူး တယ်။ ဒီတကြိမ်မှာ အဲ့ရွာကို စည်းရုံးရေး ဆင်းတော့မပါလို့ စိစစ်ဖို့ တင်ပြခဲ့တာပါ”ဟု ခွန်မင်းအောင်က ပြောသည်။
မရင်းကုန်းကျေးရွာတွင် ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားရေးရာမဲစာရင်းတွင် မဲဆန္ဒရှင် ၅၀ ဦးကျော်ရှိသည်ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။ ပြီးခဲ့သည် ၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ကရင်ပြည်နယ်၊ ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာ မဲဆန္ဒနယ်တွင် မဲပေး ခွင့်ရှိသူ ၄၅, ၀၁၁ ဦးရှိသည်ဟု ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ http://kic news.org/2020/09/%e1%80%95%e1%80%a1%e1%80%ad%e1 %80%af%e1%80%9 d%e1%80
ချင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (CNLD) ပါတီကို ထောက်ခံအားပေးပြီး ဝန်းရံသူများသည်ကျန်းမာရေးဌာနမှ ထုတ်ပြန် သည့် စည်းကမ်းများကို မလိုက်နာကြောင်း ဒေသအချို့တွင်ဝေဖန်မှုများကို ကျန်းမာရေးဌာနမှထုတ်ပြန်သည့်စည်းကမ်း မချိုးဖောက်ဟု (CNLD) ဥက္ကဌမှ ဆိုသည်။ စက်တင်ဘာ(၁၉)ရက်က စစ်ကိုင်းတိုင်း ကလေးမြို့မှာ ချင်းအမျိုးသား ဒီမိုကရေ အဖွဲ့ချုပ်(CNLD) ကို ထောက်ခံသည့် ချင်းတိုင်းရင်းသားလူဦးရေ သုံးရာကျော်ခန့်ဖြင့်မြို့တွင်း လှည့်မဲဆွယ်မှုမှာ ကျန်းမာ ရေးဌာန ထုတ်ပြန်သည့် စည်းကမ်းအတိုင်းမဲမဆွယ်ဟု ကလေးမြို့ ဒေသခံပြည်သူအချို့ကဝေဖန်ခြင်းအပေါ် (CNLD) မှ ဥက္ကဌ ဦးငိုင်ဆောခ့်က စည်းကမ်းမချိုးဖောက်ကြောင်းပြောသည်။
ချင်းအမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (CNLD) မှ ဥက္ကဌ ဦးငိုင်ဆောခ့်က “ပါတီတိုင်းက စည်းရုံးရေး လုပ်နေကြတာလေ ကော်မရှင်ကလည်း ခွင့်ပြုထားတာဘဲ ကန်ပက်လက်လိုမျိုး မင်းတပ်မြို့လိုမျိုးမှာကြတော့ ထူးခြားတဲ့ အခြေနေကြောင့် ရပ်နားထားတယ်လေ စည်းကမ်းအတိုင်းပဲလုပ်နေတာပဲလေ။ ထူးခြားမှုလည်း မရှိတဲ့နေရာမှာ ပါတီတိုင်းကလည်း လုပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ CNLD ချင်းပါတီကို ကွက်ပြီးဝေဖန်နေရင်လည်း မလိုလားတဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါမယ်။ တခြားပါတီ စည်းရုံးရေးဆင်းနေ တာကိုလည်း ကျတော်တို့ ဝေဖန်မနေဘူးလေ”ဟုပြောသည်။ ချင်းအမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ဥက္ကဌ ဦးငိုင်ဆောခ့် သည် လာမည့် နိုဝင်ဘာလတွင် ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်နယ်လွှတ်တော် အမှတ်(၁) မှ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင် မည်ဖြစ်သည်။
ချင်းအမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (CNLD)မှ ဥက္ကဌ ဦးငိုင်ဆောခ့်က “မင်းတပ်မြို့နဲ့ ကန်ပက်လက်မြို့ကိုတော့ ရောဂါ အခြေနေကြောင့် စည်းရုံးရေးကိုယာယီရပ်နားထားတယ် မတူပီမြို့ကတော့ထူးထူးခြားခြားမရှိတော့ ပါတီအားလုံးတော့သူ့ ဟာနဲ့သူ သွားနေကြတယ် ရပ်နားထားတာတော့မရှိဘူး”ဟုပြောသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-75754
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ထုတ်ပြန်ထားသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (SOP) အရ Stay Home သတ်မှတ်ထား သည့် နေရာများတွင် နိုင်ငံရေးပါတီများအနေဖြင့် မဲဆွယ်ခွင့်မရှိကြောင်း သိရသည်။
ထို့ကြောင့် ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့တွင်လည်း ပြည်သူနဲ့ ထိတွေ့ကာ မဲဆွယ်ခွင့်ရမည် မဟုတ်ကြောင်း ကချင်ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး(ခွဲ)မှ အရာရှိဦးထွန်းအောင်ခိုင်က ဆိုသည်။“Stay at Home မှာ မဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့်နဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ Covid-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအမျိုးသားအဆင့် ဗဟိုကော်မတီကထုတ်ပြန်ထားတဲ့(SOP) ဆိုတာရှိတယ် အပိုင်း ၁ မှာပါတယ်။ Stay at Home သတ်မှတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် မဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့်မရှိတော့ဘူး။ အဲတော့ ကချင်ပြည်နယ် မှာ ဖားကန့်က Stay at Home သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ သိရတယ် အဲတော့ (SOP) အရ မဲဆွယ်လို့မရ တော့ဘူး။” ဟု ပြောသည်။
လက်ရှိကချင်ပြည်နယ်တွင် Covid-19 ရောဂါပိုးကူးစက်သူ ၁၃ ဦးရှိနေပြီဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ ၁၃ ဦးအနက် ၉ ဦးသည် ဖားကန့်မြို့မှ ဖြစ်သည့်တွက် စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့မှစကာ ဖားကန့်မြို့ပြည်သူများအား Stay Home သတ်မှတ် လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့မှစကာ မဲဆွယ်ခွင့်ပြုထားသော်လည်း Stay at Home သတ်မှတ်ထားသည့် နေရာများတွင် မဲဆွယ်ခွင့်မရှိတော့သည့်အတွက် အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့်သာ မဲဆွယ်ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ထားကြောင်း ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီ KSPP မှ ဖားကန့်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးလအောင် က ကချင် သတင်းဌာန KNG ကို ပြောသည်။
“မဲဆွယ်ခွင့်ကတော့ ပြောစရာကိုမလိုတော့ဘူး ခုဆိုရင်နားထားတာ ၄ ရက်လောက်ရှိနေပြီ။ ကျနော်တို့ပါတီကတော့ ရောဂါပိုး ၄ယောက်ထပ်တွေ့တဲ့နေ့ကတည်းကနေ လုံးဝကိုနားထားပြီဖြစ်တယ်။”ဟု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဖားကန့်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင့်စိုးက ပြောသည်။ https://burmese.kachinnews.com/202 0/09/22/%e1%80%96%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%80%e1
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း လွိုင်လင်ခရိုင် ကွန်ဟိန်းမြို့နယ်တွင် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ညွှန်ကြားချက်များနှင့် အညီ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (SNDP) က မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိ သည်။ ကွန်ဟိန်းမြို့နယ် ကွန်ဟိန်းမြို့နှင့် ကာလိမြို့တို့တွင် ဆိုင်းဘုတ်အလတ် သုံးခုထောင်ခြင်း၊ စီတန်းလှည့်လည်ခြင်းနှင့် စုဝေးဟောပြောခြင်းတို့ကို စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ လက်ဆေးခြင်း၊ Mask တပ်ခြင်း၊ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် ခြောက်ပေအကွာထိုင်ခြင်း၊ တတ်နိုင်သမျှ ခပ်ခွာခွာနေခြင်း နည်းလမ်းတို့ဖြင့် စုဝေးဟောပြောခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“အခုတော့ မနေ့ကစတင်ပြီးတော့ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး စတင်ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ အခြေအနေ တော်တော်လေး ကောင်းပါ တယ်။ အစီအစဉ် ဖိတ်စာလေး၊ ငါးဆယ်လောက် ဖိတ်ပြီးတော့ ပြည်သူလူထု ဝိုင်းဝန်း အားပေးကြတာပေ့ါ။ လူ ၃၀၀ ဝန်းကျင်လောက် ရှိမယ်ထင်တယ်။ ကိုဗစ်ကာလကတော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ခြောက်ပေခြား၊ လူစုလူဝေး ၅၀ ဦးထက်မကျော်ရ နည်းနည်းအခက်အခဲရှိတာပေ့ါ။ ကျွန်တော်တို့က တတ်နိုင်သလောက် ကာကွယ်ထားတယ်ဗျ။ Mask တွေ တပ်ထားတယ်။ လက်ဆေးဂျယ်တွေ ကာကွယ်ထားတယ်။ မနေ့ကပဲ လှည့်လည်ဟောပြောတယ်။ ကိုဗစ်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့။ နို့မို့ရင် ထပ်ပြီးတော့ လှည့်လည်ချင်သေးတယ်ဗျ။ မနေ့ကတော့ ဝမ်ဟိန်းကျေးရွာမှာ ဆိုင်းဘုတ်ထောင်တယ်။ ကွန်ဟိန်းနဲ့ ကာလိမှာ ရုံးနှစ်ရုံးပဲ ရှိတာပေ့ါ။ အောင်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်တာပေ့ါ။ ကွန်ဟိန်းမြို့နယ်မှာ ပြည်နယ် (၁) (၂)၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း စုစုပေါင်း လေးယောက် ရှိတာပေါ့” ဟု ကွန်ဟိန်းမြို့နယ် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (SNDP) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆန်ခမ်းသြ က ပြောကြားသည်။
ကွန်ဟိန်းမြို့နယ်တွင် တည်ငြိမ်အေးချမ်းနေပြီး နယ်မြေအတွင်း လွတ်လပ်စွာ မဲပေးနိုင်ခွင့်အခြေအနေ ရရှိထားကြောင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အနည်းငယ်ခက်ခဲသော ကျေးရွာများရှိပြီး ကွန်ဟိန်းမြို့နယ် တစ်ခုလုံးတွင် လျှပ်စစ်မီး မရရှိသေး သော ကျေးရွာ ရာခိုင်နှုန်း ၈၀ ခန့် ရှိနေသေးကြောင်း သိရသည်။ https://news-eleven.com/article/193469
ကရင်ပြည်နယ် ဖားအံမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကော့ဒါန်းမယ်ကျေးရွာတွင် ရွာသားတစ်ဦးကို Covid-19 ရောဂါပိုး သံယသရှိသူ အဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက် ထိုနယ်မြေဒေသ၌ ပါတီ၏မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး သွားရောက်ဖြစ်ခဲ့သူ ကရင်အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ-KNDP ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၃ ဦးမှာ စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့က Quarantine ဝင်လိုက်ရသည်ဟု သိရသည်။ စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့က အဆိုပါကျေးရွာများတွင် KNDP မှ ပါတီစည်းရုံးရေးဆင်းခဲ့ကာ လက်ရှိ Covid-19 ရောဂါ သံသယရှိခံရသူ ၎င်းရွာသားမှာ စည်းရုံးရေးဟောပြောပွဲ၌ တက်ရောက်ခြင်းရှိခဲ့သည့်အတွက် စည်းရုံးရေးသွားရောက်ခဲ့ သည့် ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၃ ဦးကို ကပ်ရောဂါဘေးကင်းစေရေးအတွက် Quarantine ဝင်နေရန် စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့က ဖားအံမြို့နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ ဆက်သွယ် အသိပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပါတီဝင်တစ်ဦး က ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
ကွာရန်တင်း(Q) ဝင်နေရသည့် ၎င်းပါတီ၏ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း နန်းလှယဉ်မေက “ကျမတို့ စည်းရုံးရေးသွားတာ ၆ ပေ ခြားထားပါတယ်။ အဲဒီပွဲမှာ အဲဒီလူနဲ့ ကျမတို့နဲ့က ထိတွေ့မှုတော့မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် မြို့နယ် ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေက ကျမတို့ ကွာရန်တင်း(Q) ဝင်ရမယ်ပြောတော့ အားလုံးအဆင်ပြေအောင် ကျမတို့လည်း ဝင်သွားတာပေါ့။ ဒီရောဂါက မမြင်ရဘူးဆိုတော့ ကွာရန်တင်း ဝင်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
ကွာရန်တင်းဝင်နေသည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများမှာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင် ဖားအံမဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ဝင် ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် နန်းစေးအွာ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်အတွက် ဖားအံမဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)မှ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် မည့် နန်းလှယဉ်မေနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အတွက် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် စောမင်းဇော်ဦးတို့ ဖြစ်ကြသည်။ ယခုအချိန်တွင် ပြည်နယ်အစိုးရ တာဝန်ရှိသူများ စီစဉ်ထားသည့် ဖားအံတက္ကသိုလ်အဆောင်၌ ဝါးဆူးရွာသားများနှင့် ကျေးရွာအချို့မှ ဆယ်အိမ်မှူး၊ ရာအိမ်မှူးများ အပါအဝင် ရွာသူရွာသား ၄၇ ဦးမှာလည်း ကိုယ်စားလှယ်လောင်း သုံးဦး နှင့်အတူ ကွာရန်တင်း(Q) ဝင်နေကြသည်ဟုလည်း သိရသည်။ http://kicnews.org/2020/09/%e1%80%95%e1%80%a%e 1%80%90%e1%80%ae%e1%80%85%e1%
ချင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (CNLD) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးငိုင်ဆာခ့်၏ Facebook Page ခေတ္တပိတ်ပင်ကန့်သတ်ခံရကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Facebook အနေဖြင့် CNLD ဥက္ကဋ္ဌ ဦးငိုင်ဆာခ့်၏ Facebook Page ကို စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက် ည ၁၁ နာရီခန့်တွင် ပိတ်ပင်ကန့်သတ် (Unpublished) ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဦးငိုင်ဆာခ့်က ၎င်း၏ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် ရေးသားထား သည်။ အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ Facebook Team ထံ အကြောင်းကြားစာကို စက်တင်ဘာ၂၂ ရက် နံနက် ၁ နာရီကျော်တွင် ပေးပို့ခဲ့ပြီး နံနက် ၈ နာရီခန့်တွင် Facebook က အကြောင်းပြန်ခဲ့ကြောင်းနှင့် “ High Profile Impersonation-High Profile တု ပြခြင်း” ကြောင့် Facebook က ဖယ်ရှားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းပြန်ခဲ့ပါသည်ဟု CNLD ဥက္ကဋ္ဌ ဦးငိုင်ဆာခ့်က ၎င်း၏လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် ရေးသားထားသည်။
ထိုသို့ Facebook အနေဖြင့် ချင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (CNLD) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးငိုင်ဆာခ့်၏ Facebook Page ကို ၁၀ နာရီ ကျော်ကြာ ပိတ်ပြီးနောက် စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက် နံနက် ၉ နာရီနောက်ပိုင်းတွင် Page ပြန်လည်အသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့ ကြောင်း ဦးငိုင်ဆာခ့်က ၎င်း၏ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် ရေးသားထားသည်။ https://news-eleven.com/article/19
မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီဟာ မွန်ပါတီနှစ်ခုကို ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒေသခံတွေရဲ့ မဲကို ပိုမိုရရှိမယ်လို့ ယုံကြည်ထားပါတယ်။ ပါတီကိုထောက်ခံသူတွေကလည်း ဒေသတွင်းပေါင်းစည်းမှုကြောင့် အင်အားကြီး ပါတီတွေကို ကောင်းကောင်း ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မယ်လို့ ယူဆနေကြပါတယ်။ ဒေသတွင်း မွန်တိုင်းရင်းသား အင်အားစုတွေနဲ့ ပေါင်းစည်းထားတဲ့ မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီဟာ လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။
ချောင်းဆုံမြို့နယ် ဒေသခံ မင်းပြည့်ဟန်ထွန်းက မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီဟာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး အခွင့်အရေး တွေကို ဆောင် ရွက်ပေးမယ်လို့ ယုံကြည်ထားသူပါ။ သံဖြူဇရပ်မြို့ခံ ကိုတင်မျိုးအောင်က ပါတီကြီးတွေထက် တိုင်းရင်းသားပါတီတွေက ဒေသအကျိုးကို ပိုပြီးတော့ လိုလိုလားလား လုပ်ကိုင်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ကျိုက်မရောမြို့ခံ ဒေါ်သန်းဌေးကလည်း တိုင်းရင်းသားတွေအရေးကို တိုင်းရင်းသားပါတီကပဲ ဖော်ဆောင်ပေး နိုင်မယ်လို့ ယူဆသူပါ။ မော်လမြိုင်မြို့ခံ မမေဇွန်ဦး ကတော့ ပြည်သူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ့် ပါတီနဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကို ရွေးချယ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထား ပါတယ်။
မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီရဲ့ ချောင်းဆုံမြို့နယ် ပါဝင်တဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော် မွန်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ် ၂ မှာ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင် မယ့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးသန်းနိုင်က ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ဆန္ဒသဘောထားတွေကို လွှတ်တော်ထဲမှာ ထင် ဟပ်နိုင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ သက်ဆိုင်ရာဒေသခံတိုင်းရင်းသားပါတီတွေအနိုင်ရရှိဖို့ ပြင်ဆင် နေကြတာဖြစ်လို့ လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲဟာ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ ပါတီကြီးတွေနဲ့ တိုင်းရင်းသား ပါတီတွေ ယှဉ်ပြိုင်မှု ပြင်းထန်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိပါတယ်။ မွန်နိုင်ငံရေးပါတီနှစ်ခုနဲ့ ပြင်ပမွန်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေ မွန်အမျိုးသားရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေပါဝင်တဲ့ မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီဟာ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ၆၅ ယောက် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မှာပါ။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေထဲမှာ အမျိုးသမီး ၁၇ ယောက်နဲ့ လူငယ် ၁၁ ယောက် ထည့်သွင်းထားတာတွေ့ရ ပါတယ်။ https://www.rfa.org/burmese/news/mup-party-09242020 035917.html
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်တော်မြို့နယ် သရက်တပင်ကျေးရွာမှာ မနေ့က မနက်ပိုင်းက တပ်မတော်စစ်ကြောင်း တစ်ခုရွာထဲ ကိုဝင်လာပြီး အရပ်သား ၁၀ ဦးကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့မနက်မှာတော့ အဲဒီ ၁၀ ဦးကို ရပ်မိရပ်ဖတွေရဲ့ အာမခံနဲ့ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ မိသားစုဝင်တွေနဲ့ ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်တော်မြို့နယ် သရက်တစ်ပင်ကျေးရွာကို စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက် မနေ့က မနက်ပိုင်းက တပ်မတော်စစ်ကြောင်းတစ်ခု ရွာထဲကိုဝင်လာပြီး ရွာသား ၁ဝ ဦးကို ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကို တပ်မတော် က ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့ပြီး ဒီနေ့ နေ့လယ်မှာ ပြန်လွှတ် ပေးလိုက်တာလို့ မိသားစုဝင်တွေနဲ့ ဒေသခံတွေက RFA ကိုပြောပါတယ်။
ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူတွေဟာ အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်ကနေ ၄၀ ကျော်အရွယ်ရှိကြပြီး သရက်တပင်ရွာသား ကျောင်းဆရာ ဦးမောင်မောင်ဦး အပါအဝင် ကိုးဦးနဲ့ စဖိုသားကျေးရွာတစ်ဦး ပါဝင်ပါတယ်။ သူတို့ကို ရွာမှာရှိနေစဉ် တပ်က ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ လုံခြုံရေးအရ အမည်မဖော်လိုတဲ့ ရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးက RFA ကိုပြောပါတယ်။ အခုလို စစ်ကြောင်းဝင်လာရင် အရပ်သားတွေဖမ်းဆီးခံတာ၊ ရိုက်နှက်ခံရတွေဟာ အမြဲလိုလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဒေသခံတွေဟာ စစ်ကြောင်းဝင်လာရင်ကြောက်လန့်ပြီး ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့လည်း သူဆိုပါတယ်။ အဲဒီ ၁၀ ယောက်ကို သရက်တပင် ကျေးရွာနဲ့ တစ်မိုင်လောက်အကွာမှာရှိတဲ့ ၃၇၆ တပ်ရင်းကို မနေ့က ခေါ်ဆောင် သွားတာဖြစ်ပြီး ဒီနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တာပါ။ သူတို့ကိုဖမ်းဆီးထားစဉ် ရိုက်နှက်စစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့တာတွေရှိပြီး ပြန်လွှတ်လာသူတွေဟာလည်း ကြောက်လန့်နေ ကြတယ်လို့ သူတို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ လုံခြုံရေးအရအမည်မဖော်လိုတဲ့ ဒေသခံတစ်ဦးကပြောပါတယ်။
တပ်ဘက်က လုံခြုံရေးအရ AA ဘက်နဲ့ အဆက်သွယ်ရှိနိုင်တယ်လို့ သံသယရှိသူတွေကို မကြာခဏ ခေါ်ယူ စစ်ဆေးတာ တွေရှိကြောင်း၊ ရခိုင်လူမျိုးတွေကို လူမျိုးရေးအရ အငြိုးအတေး ပစ်မှတ်ထားလုပ်ဆောင်တာမျိုး မရှိကြောင်း တပ်မတော် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့က ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက RFA ကို မကြာခဏ ဖြေကြားလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက် လို့ကတော့ တပ်မတော်ဘက်ကို RFA က အကြိမ်ကြိမ် ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ အခု သတင်းထုတ်လွှင့်နေတဲ့အချိန်ထိ ဖုန်းလက်ခံ မဖြေကြားသေးပါဘူး။ RFA က ရှိထားတဲ့စာရင်းတွေအရ ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာ ၂၀၁၉ နှစ်ဆန်းပိုင်းကနေ ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့ အထိ တစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာ တပ်မတော်က ဖမ်းဆီးသွားပြီး စစ်ကြောရေးစခန်းမှာ စစ်ဆေးချိန် သေဆုံး သွားတဲ့အရပ်သား ၃၀ ဦးအထိ ရှိပါတယ်။ https://www.rfa.org/burmese/news/army-released-ten-civilians-0924 2020081117.html
တိုင်းလိုင် (ရှမ်းနီ) အမျိုးသားများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီက မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်တွင် မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုအဖြစ် စက်လှေအစင်း ၅၀ ကျော်ဖြင့် ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက် စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်က လှည့်လည်မှု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရသည့် ရည်ရွယ်ချက်မှာ COVID-19 ကပ်ရောဂါကာလ ဖြစ်သဖြင့် ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ဖြစ်ပြီး ရှမ်းနီတိုင်းရင်းသားအများစု သည် မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်တွင် လုပ်ကိုင်စားသောက်နေထိုင်ကြသည့် တိုင်းရင်းသားအများစုဖြစ်ခြင်းကြောင့် စက်လှေ များဖြင့် မဲဆွယ်စည်းရုံးကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရှမ်းနီလူငယ်တာဝန်ခံ ကိုစိုင်းအောင်မျိုးက ပြောကြားသည်။ အဆိုပါစက်လှေ ဖြင့်လှည့်လည်မှုကို မြစ်ကြီးနားခတ်ချိုဆိပ်မှ မြစ်ကြီးနား ပြည်သူ့အားကစားကွင်း၊ မိုင်းနားကျေးရွာ၊ ခတ်ချိုကျေးရွာတွင် ရပ်နားခဲ့ပြီး ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအက၊ ရိုးရာသိုင်းအကဖြင့် ဖျော်ဖြေမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ရှမ်းနီလူငယ်တာဝန်ခံ ကိုစိုင်းအောင်မျိုးက “စက်လှေတွေကိုသုံးတာက ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေ အသုံးများလို့ဖြစ်ပါ တယ်။ ကျွန်တော်တို့ပါတီက အနိုင်အရှုံးထက်ကို ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကျွန်တော်တို့ ရှမ်းနီတိုင်းရင်းသားတွေ နိုးကြားလာ အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်တာ အမြတ်ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံကို အချစ်တစ်ခုတည်းနဲ့ တည်ဆောက်လို့မရပါဘူး။ တိုင်းရင်းသားပါတီ တွေ လွှတ်တော်မှာရောက်မှ ငြိမ်းချမ်းရေးတွေ၊ ဖက်ဒရယ်တွေ ရမယ်လို့ယူဆပါတယ်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကောင်းနဲ့ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်ကို လျှောက်လှမ်းနိုင်မယ်ဆိုတာ လက်မခံပါဘူး” ဟု ပြောကြားသည်။
တိုင်းလိုင် (ရှမ်းနီ) အမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီသည် ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ရှမ်းတိုင်းရင်းသားနှင့် ဗမာတိုင်းရင်းသားရေးရာ ဝန်ကြီးနေရာအပါအဝင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၃၁ ဦး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းတွင် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးတစ်ဦးအပါအဝင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၁၀ ဦး ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်သည်။ https://news-eleven.com/article/193797
ကလေးသူငယ်များပါ သေဆုံးမှု မြင့်တက်လာပြီးနောက် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျေးရွာများအနီးတွင် ဆက်လက် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် စစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုများ အမြန်ဆုံး အဆုံးသတ်ကြရန် ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကျွမ်းကျင်သူ သောမတ်စ် အင်ဒရူးစ်က စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် တောင်းဆိုလိုက်သည်။
အခြားသူများ အပါအဝင် ကလေးသူငယ်များ သေဆုံးမှုတွင် အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်မှုများကြောင့်လော၊ တမင်ပစ်မှတ်ထား ခြင်းကြောင့်လောဟု အပူတပြင်း မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်လာနေသည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ သောမတ်စ် အင်ဒရူးစ်က ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပြောထားသည်။ “စစ်ရေး တိုက်ခိုက်မှုတွေ အမြန်ဆုံးရပ်ဖို့၊ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် တောင်းဆိုထားတဲ့အတိုင်း (ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ ကာလအတွင်း) အပစ်အခတ် ရပ်စဲမှုတွေ အမြန်ဆုံး လုပ်ဖို့လိုတယ်”ဟုလည်း သူကပြောသည်။ ပြီးခဲ့သည့် သီးတင်း နှစ်ပတ်အကြာက မြေပုံမြို့နယ်တွင် အမြောက်ကျည်ဆန် ကျမှုကြောင့် ငါးနှစ်အရွယ် ကလေးနှစ်ဦး သေဆုံးပြီး အခြားတစ်ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်းလည်း သူ ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန် ပြင်နေသည့်ကာလအတွင်း COVID-19 ကပ်ရောဂါ ကာကွယ် တိုက်ဖျက်ရေး ပြင်းထန်သော စိန်ခေါ်မှုကို ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းအနေဖြင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့မှုများ အများအပြား လုပ်ဆောင်ပေးကြရန် မစ္စတာ အင်ဒရူးစ်က တောင်းဆိုထားသည်။ http://www .mizzimaburmese.com/article/73779
သျှမ်းပြည် အရှေ့ပိုင်း ရွှေသတ္တုတူးဖော်သည့် အနီးတွင်နေထိုင်သည့် တာချီလိတ်ခရိုင် နားဟိုင်းလုံကျေးရွာရှိ နေအိမ်ထဲသို့ ရေများဝင်လာကြောင်း စုံစမ်းသိရသည်။ နားဟိုင်းလုံကျေးရွာ ပတ်ပတ်လည်တွင် ရွှေတူးဖော်မှုများကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ကျေးရွာ၏ ရေမြောင်းများ၊ ချောင်းများကို သက်ဆိုင်ရာမှ လာရောက်ကြည့်ရှူ့ခြင်း၊ နုန်းများဆယ်ခြင်းမပြုလုပ်သဖြင့် ရေများနေအိမ်ထဲသို့ ဝင်လာကြောင်း နားဟိုင်းလုံကျေးရွာ မှ သူနာပြု ဆရာမ နန်းလာ က သျှမ်းသံတော်ဆင့်ကို ပြောသည်။
“ နှစ်တိုင်း ရေကြီးပေမယ့် ဒီနှစ်က မိုးခဏလေးပဲရွာသေးတယ်။ ရေက အိမ်ထဲဝင်လာပြီ။ အရင်က ကျမ အိမ်ထဲ ရေမဝင် ဘူး။ ဒီနှစ်တော့ ရေဝင်တယ်။ မိုးသည်ရင်တော့ ဒီထက် ဆိုးနိုင်တယ်”ဟု နန်းလာ က ဆိုသည်။ နားဟိုင်းလုံ ကျေးရွာ အနီးတွင် ရွှေသတ္တုတူးဖော်မှုကို ၂၀၀၇ ခုနစ်တွင် စတင်တူးဖော်ခဲ့ရာ ဒေသခံပြည်သူများက ခေတ်အဆက်ဆက် ကန့်ကွက် ခဲ့သော်လည်း ယနေ့ချိန်ထိ ရပ်ဆိုင်းခြင်းမရှိခဲ့ပေ။“ တနှစ်ထက်တနှစ် ရေကြီးမှုက ပိုဆိုးလာတယ်။ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန် ကြက် တွေလည်း သေကုန်တယ်။ အိမ်ထဲရေဝင်တော့ ဘာမှ လုပ်လို့မရဘူး” ဟု နန်းလာ က ပြောသည်။
“ ကျမတို့ဆီ ကို ဘယ်အစိုးရက မှလာမကြည့်ဘူး။ သက်ဆိုင်ရာက လာမကြည့်တဲ့အတွက် ရွှေတူးတဲ့ကုမ္ပဏီ တွေ လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်။ ကုမ္ပဏီတွေ က မြောင်းတွေ နုန်းတွေ မဆယ်ပေးတော့ဘူး” ဟု နားဟိုင်းလုံ ဒေသခံ တဦး က ပြောသည်။ လက်ရှိမှာ မိုးရာသီ ဖြစ်သဖြင့် ချောင်းထဲရှိနုန်းများကို ဆယ်ပေးရန် နှင့် မြောင်းများလာရောက် ဖော်ပေးချင်ကြောင်းလည်း နားဟိုင်းလုံ ဒေသခံများက ပြောသည်။ နားဟိုင်းလုံကျေးရွာ တွင် ရွှေတူးဖော်မှု စီမံကိန်းများ ကြောင့် လယ်ယာမြေများ ဧကပေါင်းရာနှင့်ချီ ပျက်စီးခဲ့ပြီး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်း၊ မြစ်ချောင်းများတိမ် ကောခြင်းတို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ရွှေတူးဖော်မှုကို သွားရောက်ကန့်ကွက်ရာတွင်လည်း ဒေသခံအမျိုးသားတဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး၊ ထိုသေဆုံးမှုကြောင့် လက်ရှိအချိန်ထိ တရားမျှတမှု မရရှိခဲ့သေးပေ။ https://burmese.shannews.org/archives/18625
မွန်တိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီကိုသာ မဲပေးဖို့ မွန်လူငယ်ဆုံရပ်အဖွဲ့က စက်တင်ဘာလ (၂၂)ရက်နေ့မှာ ထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြီး တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ လက်ရှိနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်မှာ တစ်ပါတီစနစ် ကြီးစိုးမှုကြောင့် တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံးနေတယ်လို့ မွန်လူငယ်ဆုံရပ်အဖွဲ့က ဆိုထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် လွှတ်တော်အတွင်းမှာ မွန်ပါတီရဲ့ ကိုယ်စားလောင်းတွေ နေရာရမှသာ မွန်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးကို ဆောင်ရွက်နိုင်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ မွန်လူငယ်ဆုံရပ်အကြံပေးက ပြောပါတယ်။
“ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေ အနိုင်ရလာရင် ကိုယ့်ကံကြမ္မာကို ကိုယ်ဖန်တီးခွင့်တွေ ပိုပြီးတော့ များပြားလာမယ်။ တိုင်းရင်း သား အခွင့်အရေးတွေ ပိုပြီး များပြားလာမယ်လို့ ယုံကြည်တယ်”မွန်လူငယ်ဆုံရပ်အကြံပေး ဉာဏ်စိုက်ရာမာန်က ပြောပါတယ်။ မွန်လူငယ်ကွန်ယက်ဟာ မွန်တိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေနဲ့ စုစည်းထားတာဖြစ်လို့ သူတို့ရဲ့ တိုက်တွန်းချက် အတိုင်း ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ရေးဒေသခံ တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ “ သူတို့ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အတိုင်း မွန်လူငယ်တွေက တက်တက်ကြွကြွ လိုက်နာကြတာကို တွေ့ရတယ် သူ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အတိုင်း တစ်သွေးတစ်သံတည်းလို့ ပြောလို့ရပါတယ်” လို့ ရေးဒေသခံ မင်းစိုးသိန်းက ပြောပါတယ်။
မွန်လူငယ်ကွန်ယက်ဟာ ပြည်ပနိုင်ငံတွေအပြင် မွန် ၊ ကရင် ၊ တနင်္သာရီ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ ပဲခူးတိုင်းတို့က မွန်လူငယ်တွေ စုစည်းထားတဲ့ ကွန်ယက် ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာတော့ မွန်ပြည်နယ် ဘီးလူးကျွန်း ချောင်းဆုံတံတားကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတံတားလို့ အမည်ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့အပေါ် သောင်းနဲ့ချီတဲ့ မွန်လူထုက ကန့်ကွက်ကြောင်း အစိုးရအပေါ် ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ https://www.bnionline.net/mm/news-75720
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ (ANP) နှင့် ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (ALD) ၏ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ရုပ်မြင်သံကြားမိန့်ခွန်းများကို ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် (UEC) က ပြင်ဆင်ဖြတ်တောက်ခဲ့ကြောင်း အဆိုပါ ပါတီများမှ တာဝန်ရှိသူများက ပြောသည်။
ANP ပါတီ၏ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးမိန့်ခွန်းတွင် ‘ပြည်တွင်းစစ်’ ဆိုသည့် ‌ဝေါဟာရအစား ‘လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ’ ဟုလည်း ကောင်း၊ ALD မိန့်ခွန်းတွင် ‘ပြည်တွင်းစစ်’၊ ‘စစ်မီး’ စသည့်စကားလုံးများကို ‘ပြည်တွင်းပဋိပက္ခ’ ဟု UEC က ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီး အချို့သောစကားလုံးများကို လုံးဝဖြတ်တောက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ “စစ်ရေးပဋိပက္ခနှင့် ကိုဗစ်နိုင်းတင်းကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွား နေသောကြောင့် ရခိုင်ပြည်သူများ ရွေးကောက်ပွဲကို စိတ်မဝင်စားကြကြောင်း၊၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ANP အနေဖြင့် ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့စည်းခွင့် မရရှိခဲ့ခြင်းမှာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ၏အကျပ်အတည်းကြောင့်” ဆိုသည့် ရေးသားချက်များကို UEC က ဖြတ်တောက်ခဲ့သည်ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ ထိုသို့ ဆင်ဆာဖြတ်တောက်ခြင်းကို မကြိုက်နှစ်သက်သော်လည်း လက်ရှိ အခြေအနေအရ အပြင်ထွက် မဲဆွယ်စည်းရုန်းရန် အခက်အခဲရှိနေသောကြောင့် ရုပ်သံထုတ်လွှင့်မည်အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခဲ့ သည်ဟု ဦးသာထွန်းလှက ပြောသည်။
“ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် အရင် ၂၀၁၀- ၂၀၁၅ ခေတ်ကထက် တင်းကျပ်လာတယ်လို့ မြင်တယ်။ အဲဒီတုန်းကလည်း တစ်ချို့ဟာတွေ ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါးကို မထိခိုက်စေရ ဘာညာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီတုန်းက။ ပြည်သူ့အစိုးရ လက်ထက် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့ ဖြေလျှော့မှုဘက်ကိုမသွားဘဲ ပိုပြီးတင်းကျပ်တဲ့ဘက်ကို ဇောင်းပေးတဲ့ပုံစံမျိုးရှိ တယ်လို့ သုံးသပ်လို့ရတယ်” ဟုလည်း ၎င်းက ပြောသည်။
ALD ပါတီ၏ မဲဆွယ်မိန့်ခွန်းပါ စကားလုံးများ ပြင်ဆင်ခံခဲ့ရခြင်းကို သဘောမတူသော်လည်း ပါတီမူဝါဒများကို ချပြရမည့် အခွင့်အရေးဖြစ်သောကြောင့် မိန့်ခွန်းပြောရန်ဆုံးဖြတ်ထားကြောင်း ပါတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးမျိုးကျော်က ပြော သည်။ “ပါတီတွေရဲ့အာဘော်ကို ဖြတ်တာကတော့ မလုပ်သင့်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လွတ်လပ်စွာထုတ် ဖော်ပြောဆို ခွင့် ရှိရမယ်လေ။ နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့အယူအဆတွေကို ထုတ်ဖော်ခွင့်ပေးရမယ်လို့ မြင်တယ်။ အခုလို ဖြတ်တယ်ဆိုတာက ဟိုခေတ်တုန်းကဆိုတော့ စစ်အစိုးရသုံးနေတဲ့ ပုံစံမျိုးပေါ့ ”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ ANP ပါတီ၏ မဲဆွယ် စည်းရုံးရေးမိန့်ခွန်းကို စက်တင်ဘာ ၂၄ တွင်လည်းကောင်း၊ ALD ပါတီနှင့် ရခိုင့်ဦးဆောင်ပါတီ (AFP) ၏ မိန့်ခွန်းများကို အောက်တိုဘာ ၁ တွင်လည်းကောင်း နိုင်ငံပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားမှ ထုတ်လွှင့်မည်ဟု သိရသည်။ နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ မဲဆွယ် မိန့်ခွန်းများကို နိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံလိုင်းဖြစ်သည့် မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား (MRTV) က စက်တင်ဘာ ၈ မှ နိုဝင်ဘာ ၆ အထိ အလှည့်ကျ ထုတ်လွှင့်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ https://www.myanmar-now.org/mm/news/4555
ကရင်ရိုးရာဒုံးအကကို အမျိုးသားဒြပ်မဲ့ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်အဖြစ် ကုလသမဂ္ဂ၏ ပညာရေး၊ သိပ္ပံနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း(UNESCO)က အသိအမှတ်ပြုရေး တင်သွင်းရန် ကြိုးပမ်းနေကြသော်လည်း ပြင်ဆင်နေဆဲအချိန် တွင် ဘဏ္ဍာရေး မလုံလောက်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း သိရသည်။
ဒုံးကကြိုးကကွက်ဆပ်ကော်မတီတွင် မျက်မှောက်ခေတ်ယဉ်ကျေးမှုဒုံး၊ ကိုလိုနီခေတ်ရှိ (မောင့်ရို့) ဒုံးနှင့် ကျွဲဒုံး စသည့် ဒုံး (၃)မျိုးကို စခန်းသွင်းလေ့ကျင့်ကာ အကောင်အထည်ဖော်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ကာ တစ်ဖွဲ့ ၁၀ သိန်းကျပ်စီသာ အသုံးပြုရသည့်အတွက်ကြောင့် လောက်ငှမှုမရှိကြောင်း ဒုံးဆရာတစ်ဦးက ပြောသည်။“ကုန်ကျစရိတ်က ဒုံးသမားတွေရဲ့ စားသောက်၊ သွားလာ၊ ဆင်ယင်မှုတွေအတွက်ပဲလေ။ အခြားမှာ သုံးဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ပြည်နယ်ဒုံးပြိုင်ပွဲအတွက် ဒုံးတစ်ဖွဲ့ ကိုတောင် သိန်း ၁၈၀ နဲ့ ၂၀၀ အကြားမှာ သုံးရတယ်။”ဟု မျက်မှောက်ခေတ်ဒုံးနှင့် ကိုလိုနီခေတ်(မောင်ရို့)ဒုံးကို ဦးဆောင် သင်ကြားနေသည့် ဒုံးဆရာ စောခနောင်ထွန့်က ပြောသည်။
“အခက်အခဲ အများကြီးရှိတယ်။ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က ကျပ် သိန်း ၂၀၀ ချပေးမယ်လို့ပြောတယ်။ ခု သိန်း ၅၀ ပဲ ချပေး သေးတယ်။ Covid ရောဂါကြောင့်လည်း ကွင်းဆင်းဖို့မလွယ်ဘူး။ ကွင်းဆင်းဖို့လည်း မလောက်ဘူး။ ဒုံးသင်မယ် ဆိုလည်း မလောက်ဘူး။ ရက်ကလည်း နီးလာပြီး။ မမှီမကမ်းဖြစ်မှာ အရမ်း စိုးရိမ်တယ်။”ဟု ကေအိုင်စီသို့ စက်တင် ဘာ ၂၁ ရက် က ပြောသည်။ ကျပ်သိန်း ၆၀၀ ခန့် ကုန်ကျမည်ဟု လျာထားသော ယခုဒုံးအကတွင် ပြည်နယ်အစိုးရအနေဖြင့် ကျပ်သိန်း ၂၀၀ သို့မ ဟုတ် ၃၀၀ အပြည့်အဝ ချပေးရန် အလျင်အမြန်လိုအပ်နေပြီး ကျန်ငွေများအတွက် အခြားသော အလှူရှင်များကို ရှာ သွားရဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒုံးအကပညာရှင် ဆရာစောမြင့်သူက ဆက်ပြောသည်။ http://kicnews.org/2020/09/une sco%e1%80%90%e1%80%84%e1%80 %b9%e1%80%99%e1%80%8a
ပြီးခဲ့တဲ့ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံတွေမှာ စွမ်းအင်ကဏ္ဍကို ဆွေးနွေးဖို့ ခေါင်းစဉ်အတိအကျ ချမှတ်ထားခြင်းမရှိ ပေမယ့် ဒါဟာငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာ ထည့်သွင်းဆွေးနွေးသင့်တယ်လို့ တိုင်းရင်း သားလူမျိုးရေးရာစင်တာ(ENAC)ရဲ့ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာ ပညာမွန်က ပြောပါတယ်။“အခု အကြီးစား စီမံကိန်း တွေရှိတဲ့နေရာက လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဖြစ်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အကယ်၍ ဒီစီမံကိန်းတွေကို ဆက်လက်လုပ် ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင် ဒါက လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါအတွက် ကြောင့်ပဲ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာ ဒီကိစ္စတွေကို ဆွေးနွေးပြီးမှသာ ဒီစီမံကိန်းတွေကို လုပ်ဆောင်သွားဖို့ လိုတာပေါ့နော်။ အကယ်၍ ဘာမှ သဘောတူညီချက်မရပဲနဲ့ ဒီစီမံကိန်း တွေကို ဆက်လက်ပြီး လုပ်ဆောင်သွား မယ်ဆိုရင် ခုဏက ပြောသလို ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိခိုက်နိုင်တာပေါ့နော်။”ဒီပြောဆိုချက်ကို စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်နေ့က အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ “စိန်ခေါ်မှုမြင့်မားနေ သည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားသော စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံ”နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သုတေသနစာတမ်းမိတ်ဆက်ပွဲမှာ ပြောဆိုခဲ့တာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လျှပ်စစ်နဲ့ စွမ်းအင်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းတွေဟာ နိုင်ငံအတွင်းရှိ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ များစွာ ဆက်နွယ် နေပြီးတော့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအပေါ် သက်ရောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ ၎င်းတို့ရဲ့ သုတေသန အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြ ထားပါတယ်။ မြန်မာ့စွမ်းအင်ပင်မ စီမံချက်အရ အကောင်အထည်ဖော်တည်ဆောက်သွားမယ့် အကြီးစားရေအားလျှပ်စစ် စက်ရုံအများစုရဲ့ တည်နေရာတွေဟာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ထိန်းချုပ်နယ်မြေ (သို့) လှုပ်ရှားတဲ့ နယ်မြေတွေမှာ တည်ရှိနေတာပါ။
ကယား(ကရင်နီ)ပြည်နယ်မှာ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား မီဂ္ဂါဝပ် ၄၀၀၀ ကျော်ထုတ်လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ရွာသစ်ရေကာတာ စီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ အစိုးရနဲ့ KNPP တို့အကြား Bilateral Ceasefire Agreement (နှစ်ဘက်အကြား အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတညီချက်) ထဲမှာ သဘောတူညီချက်တစ်ခု အနေနဲ့ အကြီးစားစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေကို ပြည်နယ်အတွင်းမှာ ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု မရှိသေးရင် ရပ်တန့်ထားဖို့ သဘောတူထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီသဘောတူညီချက်အရ သုံးလအတွင်း အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းက ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ သတင်းမီဒီယာ တွေက ဒေသခံတွေနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းဖို့နဲ့ ကွင်းဆင်းလေ့လာခဲ့တယ်လို့ ကရင်နီအမျိးသားတိုးတက်ရေးပါတီ (KNPP)ရဲ့ ဒုဥက္ကဌ ခူးဦးရယ်က အဆိုပါ သုတေသနအစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲမှာ ပြောဆိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စွမ်းအင်စီမံအုပ်ချုပ်မှုဟာ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကို ဦးတည်နေခြင်းထက် နိုင်ငံအတွင်း နှစ် ၇၀ နီးပါဖြစ်ပွား နေတဲ့ ပြည်တွင်းစစ်ကို ပိုပြီးသက်ဆိုးရှည်ရေးကိုသာ ဦးတည်နေတာကို တွေ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဦးတည်တဲ့ လျှပ်စစ်နဲ့ စွမ်းအင် စီမံကိန်းတွေကို ရေးဆွဲချမှတ်အကောင် အထည်ဖော်သင့်တယ်လို့ အစီခံစာ က ဆိုပါတယ်။ https://www.bnionline.net/mm/news-75721
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လတ်တလော ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုနှုန်းတိုးလာသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဘုရားသုံးဆူမြို့နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ ဘုရားသုံးဆူကျေးရွာတို့ ကုန်ပစ္စည်းများအပြန်အလှန်ဖြတ်သန်းနေမှုကို အောက်တိုဘာ ၅ ရက်အထိ ပိတ်ထားလိုက်ကြောင်း ကန်ချနပူရီပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်နေ့ အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ဘုရားသုံးဆူဒေသ နယ်စပ်တလျှောက်ရှိ နှစ်နိုင်ငံမလွယ်ပေါက်များနှင့် တရားမဝင်စစ်ဆေးရေးဂိတ်များမှတဆင့် လူနှင့် မော်တော်ယာဉ် ဝင်ထွက်ပေါက်နေရာ လမ်းကြောင်းအားလုံးကို ပြီးခဲ့သည့် သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေ့က ထိုင်းတို့ စတင်ပိတ်ပင် ထားသော်လည်း နှစ်ဖက်ကုန်စည်များပြတ်လပ်မှုမဖြစ်ပေါ်စေရေး ကုန်ပစ္စည်းများသယ်ဆောင်ရန် နားလည်မှုဖြင့်ခွင့်ပြု ထားခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။ ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံ ဘုရားသုံးဆူမြို့က ကိုဗစ်စောင့်ကြည့်ရေးစင်တာ Quarantine သည် ထိုင်းနိုင်ငံ ဘုရားသုံးဆူကျေးရွာ လူနေရပ်ကွက်နှင့် အလွန်နီးကပ်နေ သဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတဝန်း ရောဂါကူးစက်မူ ရာဂဏန်းအထက် မြင့်တက်လာသောကြောင့် အဆိုးဆုံးဖြစ်လာမည့်အခြေအနေများအတွက် ကြိုတင် ကာကွယ်ရေး လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်းကျန်းမာရေးဌာနကိုအကြောင်းမကြားပဲ နယ်စပ်ကျေးရွာရှိ လူနာများကို သယ်ဆောင်လာခြင်း၊ ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာနိုင်ငံ သားများအား လက်ခံဆေးကုသပေးခြင်းတို့ လုပ်ဆောင်ခွင့်မပြုကြောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းတွင် ဖွင့်ထားသည့် အလုပ်ရုံ များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဈေးဆိုင်များနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ အားလုံး ပိတ်ထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း အမိန့်ထုတ်ပြန် ချက်တွင် ပါရှိသည်။ အမိန့်ကိုချိုးဖောက်သူ (သို့မဟုတ်) ပျက်ကွက်သူမည်သူမဆို ကူးစက်တတ်သောရောဂါများ အက် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၂ ၊ ပြည်သူ့စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအရေးပေါ်အမိန့် ပုဒ်မ (၁၈) B.E. 2558 အရ တစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ် ဖြစ်စေ၊ ဘတ်ငွေတစ်သိန်းထက် မပိုသောငွေဒဏ်ဖြစ်စေ အရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ https://www.bnionli ne.net/mm/news-75733
နေပြည်တော်တွင် ပိုးတွေ့ခဲ့သောလူနာ တည်းခိုခဲ့သည့် မြစ်ကြီးနားရှိ အေးချမ်းသာ အဆင့်မြင့်တည်းခိုခန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး လာရောက်တည်ခိုခဲ့သူ ၂၀ ဦးကို မြစ်ကြီးနားမြို့ရှိ သတ်မှတ်ထားသည့် Quarantine Center တွင် ထားရှိပြီဖြစ်ကြောင်း မြစ်ကြီးနားအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးသန်းဝင်းထံမှ သိရသည်။ အဆိုပါ တည်းခိုခန်းတွင် စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့မှ ၂၀ ရက်နေ့ ထိ လာရောက်တည်းခိုခဲ့သူများကို Quarantine ထားရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။
“ ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မနေ့ကမြို့နယ်ရဲမှူး ကိုယ်တိုင်ဖုန်းဆက်လာပါတယ်။ ၁၆ ရက်နေ့က အင်ဂျန်းယန်က ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ဒုတပ်ကြပ်တစ်ဦးက နေပြည်တော် ရဲတပ်ရင်း (၁၈) ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ အပြောင်းအရွှေ့လုပ်ကြတဲ့ခါမှာ မြစ်ကြီးနားမှာ ၁၆-၁၇ နှစ်ည တည်းခိုခန်းမှာ တည်းသွားကြတယ်။ ၁၈ ရက်နေ့ထွက်သွားကြတယ်။ နေပြည်တော်ရောက်တဲ့ ချိန်မှာ ရဲတပ်ရင်း ၂၀ မှာ Q ဝင်ပြီး ဆေးစစ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဘဲ Positive တွေ့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် အဲသတင်းရတာနဲ့ အေးချမ်းသာတည်းခိုခန်းသွားပြီးတော့ စုံစမ်းထားခြင်းဖြစ်တယ်”ဟု မြစ်ကြီးနားမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးသန်းဝင်း ပြော သည်။
ယင်းတည်းခိုခန်းအား စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ကန့်သတ်နယ်မြေဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပြီး ၁၆ ရက်နေ့မှ ၂၀ ရက်နေ့ တည်းခိုခဲ့သည့် ဧည့်သည် ၇ ဦး အပါအဝင် ဝန်ထမ်း ၇ ဦးအား ယင်းတည်းခိုခန်းတွင် Quarantine ထားရှိပြီး၊ ပိုးတွေ့ လူနာ အား လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည့် ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဝန်ထမ်း ၃ဦးကိုမူ မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်တွင် ထားရှိပြီး အင်ဂျန်းယန် ကားဂိတ်မှ ဝန်ထမ်း ၂ ဦးလည်း Q ထားရှိကြောင်း ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။ https://burmese.kachinnews.com/2020 /09/24/%e1%80%95%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1
နှင်းဆီနီပါတီလို့ လူသိများတဲ့ ညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(UDP) အနေနဲ့ ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်မြင့်ရဲ့ နောက်ကြောင်း ရာဇဝင်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမချပြရင် ပါတီကနေနုတ်ထွက်ပြီး တစ်သီးပုဂ္ဂလအနေနဲ့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ်လို့ ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကချင်ပြည်နယ်၊ ဝိုင်းမော်မြို့နယ်၊ မဲဆန္နနယ်အမှတ်(၁)ကနေ UDP ပါတီကိုယ်စားပြုဝင်ပြိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးဂဲနက်(စ်)က ပြောကြားလိုက်တာပါ။“လူထုတွေကြားထဲမှာ တောင်းဆိုလာရင် ရှင်းပြရမယ့်တာဝန်က ကျနော့်မှာ ရှိတယ်။ ရှင်းပြပေးဖို့ရာတောင်းဆိုပါတယ်။ တိကျခိုင်မာပြီး ပြတ်ပြတ်သားသားမရှင်းပြဘူး ဆိုရင် ထွက်မယ်”လို့ ဦးဂဲနက်(စ်)ကပြောပါတယ်။ ဦးဂဲနက်စ်ဟာUDP ပါတီရဲ့ ကချင်ပြည်နယ် ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ အဖြစ် တာဝန်ယူထားသလို တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေတစ်ဦးဖြစ်ကာ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းက သိမ်းဆည်းခံလယ်ယာ မြေတွေအရေးကို ဆောင်ရွက်ပေးနေသူ ဖြစ်ပါတယ်။
ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သူ ဦးကျော်မြင့်ရဲ့ နောက်ကြောင်းရာဇဝင် အခြေအနေတွေကို ပြည်တွင်းမီဒီယာတခုက ထုတ်ဖော်ရေးသား ဖော်ပြခဲ့အပြီးမှာ အခုလို ဖြစ်ပေါ်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးကျော်မြင့် (ခေါ်) ဦးဇခုန်ဇုန်းဆောင် ခေါင်းဆောင်တဲ့ ညီညွတ်သော ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(UDP)ဟာ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ တစ်နိုင်ငံလုံး မဲဆန္ဒနယ်ပေါင်း ၁၁၃၁ နေရာဝင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပြီး အန်အယ်လ်ဒီပါတီပြီးရင် ဒုတိယမြောက် မဲဆန္ဒနယ် အများဆုံး ဝင်ပြိုင်မယ့်ပါတီဖြစ်ပါတယ်။ http://burmese.dvb.no /archives/412291
ကယားပြည်နယ်အတွင်း Quarantine ဝင်ရောက်သူများ အနေဖြင့် သတ်မှတ်ရက်အပြည့် မနေဘဲ ထွက်ပြေးခြင်းအပါအဝင် ကွာရန်တင်း စင်တာများမှ သတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းချက်များကို မလိုက်နာပါက သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေး ဥပဒေနှင့် အရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်က လားရှိုးမြို့မှ လွိုင်ကော်မြို့သို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီး လွိုင်ကော်မြို့ရှိ community based facility quarantine center တွင်ဝင်ရောက်နေသည့် နွားလဝိုးကျေးရွာအုပ်စု ထီလောခူကျေးရွာမှ အမျိုးသားတစ်ဦးသည် လုံခြုံရေး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း များကို ရန်ပြုပြီး ထွက်ပြေးခဲ့သည့် အတွက် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေး ဥပဒေ၂၆/၂၉ ဖြင့်အရေးယူထား ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ခံရမှုများ ရှိနေသော်လည်း ကယားပြည်နယ်မှာမူ လက်ရှိအချိန်အထိ တစ်ခုတည်းသော ကိုဗစ်ကင်းစင်ပြည်နယ်အဖြစ် ရပ်တည် လျှက်ရှိသည်။ “ ပြည်နယ်အစိုးရက ထုတ်ပြန် လိုက်တာဟုတ်ပါတယ်။ Quarantine မဝင်ကတည်းက ဘာတွေလုပ်ရမယ်၊ ဘာတွေ ဆောင် ရွက်ရမယ် ဆိုတာတွေကို ရှင်းပြပြီးသားဖြစ်တယ်။ အရင်တုန်းကတော့ ကူးစက်နဲ့စွဲပါဆိုပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးကို ညွှန်ကြား ထားတာရှိတယ်။ ဒုတိယလှိုင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကူးစက်နဲ့မစွဲနဲ့တော့ တစ်ပြေးညီ သဘာဝဘေး အန္တရာယ်နဲ့စွဲပါ ဆိုပြီး ပြန်ညွှန်ကြားထားတာပါ။ လုံခြုံရေးကိုလည်း ပိုပြီးတော့ ဆောင်ရွက်ထား ပါတယ်” ဟု လွိုင်ကော်မြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ဦးစီးမှူး ဦးရန်နိုင်ဝင်းက မဇ္ဈိမ သို့ပြောသည်။
ကယားပြည်နယ်အတွင်း အဝင်အထွက်စောင့်ကြည့်နေသည့် ဂိတ် ၁၀ခုခန့်ရှိပြီး လွိုင်ကော်မြို့နယ်အတွင်း စောင့်ကြည့်သည့် ဂိတ် ၃ခုရှိကြောင်း သိရသည်။ ဘီလူးချောင်းအတွင်းတွင်လည်း ရေကင်း ၂၄နာရီစောင့်ကြည့်ပြီး လုံခြုံရေးကို အထူးကြပ်မတ်နေကြောင်း သိရသည်။ http://www.mizzimabu rmese.com/article/73741
၂၈။ ချင်းပြည်နယ်တွင်လွှတ်တော်နေရာစုစုပေါင်း ၃၈ နေရာဝင်ပြိုင်မည့် ညီညွှတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(UDP)အနေဖြင့် ၇၅% အနိုင်ရရှိရန်ယုံကြည်မှုရှိ ဟုဆို
ချင်းပြည်နယ်ရှိ လွှတ်တော်နေရာစုစုပေါင်း ၃၉ နေရာတွင် ၃၈ နေရာဝင်ပြိုင်မည့် UDP Party အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းအနိုင်ရှိရန်ယုံကြည်ကြောင်း UDP ပါတီချင်းပြည်နယ်တာဝန်ခံ မှပြောသည်။“ကျွန်တော်တို့ကတော့ ၇၅% ကတော့ သေချာသလောက်ဖြစ်ပြီ အင်အားက ကျွန်တော်တို့စုဆောင်းပြီးသား အင်အားအရဆိုရင် အုပ်စုတစ်ခုမှာ ဒီလအထိ ၁၅၀ အုပ်စုတစ်ခုမှာရှိပြီးသားဆိုတော့ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကတော့ အောင်မြင်ပြီးသားလို့ ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်ဗျ”ဟု UDP ပါတီချင်းပြည်တာဝန်ခံ ဦးသွန်ခမ်ကပ် မှ ပြောသည်။ UDP ပါတီအနေဖြင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ကိုယ်တိုင် နေရာတိုင်းမသွားခိုင်းပဲ ကျေးရွာတိုင်းတွင်ပါတီရေးရာ ကော်မတီများမှ တစ်အိမ်တက် တစ်အိမ်ဆင်းကွင်းဆင်းပြီး ကြိုးစား နေရသည့်အခြေနေဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
ချင်းပြည်နယ်အတွင်း ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မည့်ပါတီများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ” CNLD က ၃၆နေရာ၊နောက် UDPက ၃၈ နေရာ ပေါ့နော်၊USDPက ၃၆နေရာ၊ NLDကတော့ ၃၉နေရာ၊ အမှန်တော့ UDPက ၃၉ယောက်လုံးတင်တယ်၊ဒါပေမယ့် တစ်ယောက် က သူ့ဟာနဲ့သူ ပြန်နှုတ်ထွက်တယ်၊”ဟု ချင်းပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူး ဦးလင်းကျော်မှ ပြောသည်။ အနိုင်ရရှိပါက UDP လမ်းစဉ်အတိုင်း ပါတီရည်မှန်းချက်အတိုင်း ကတိပေးထားသည့်အတိုင်း အကောင်အထည်ဖော်မည် ဖြဟ်ပြီး ပြည်သူများ၏ အခြေခံဝင်ငွေရရှိရေးလုပ်ဆောင်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်ဟု လည်းသိရသည်။
ညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (United Democratic Party – UDP) သည်နှင်းဆီပွင့်ပုံ ပါတီတံဆိပ်အသုံးပြုသော ကြောင့် နှင်းဆီပါတီဟုလည်း ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ နှင်းဆီပါတီ၏ ဥက္ကဌ မှာကချင်လူမျိုးတိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်ဟောင်း တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးကျော်မြင့် (ခ) မိုက်ကယ်ကျော်မြင့်ဟွာ ဖြစ်သည်။ UDP ပါတီသည် ၂၀၁ဝရွေးကောက်ပွဲနှင့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင်နေရာ ၈၀ ဝန်းကျင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သော်လည်းအနိုင်မရခဲ့ပေ။ https://www.chinworld. org/2020/09/24/ %e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80
မြဝတီနယ်စပ်ရှိ မြန်မာ-ထိုင်း ချစ်ကြည်ရေးတံတား အမှတ် ၂ မှတစ်ဆင့် နေရပ်ပြန် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ ကို စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်နေ့(ယနေ့)မှစ၍ မွန်းလွဲ ၁ နာရီမှ ညနေ ၆ နာရီထိသာ စိစစ်လက်ခံတော့မည်ဟု မြဝတီခရိုင်၊ အုပ်ချုပ် ရေးမှူး ဦးတေဇာအောင်က ပြောသည်။ ယခုလို အချိန်ပြောင်းလဲ စိစစ်လက်ခံရခြင်းမှာ ကိုဗစ် အရေးပေါ်ကာလ နေရပ်ပြန် လာသူ တဖြည်းဖြည်း နည်းလာ ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ထိုင်းမှ နေရပ်ပြန်များကို ပြီးခဲ့သည့် မတ်လအတွင်းက စတင်စိစစ် ဝင်ခွင့်ပြုခဲ့ရာ နေ့စဉ် ထောင်နှင့်ချီအလုပ်သမား များ ပြန်ဝင်လာသော်လည်း ယခု အချိန်တွင် ရာဂဏာန်းမျှသာ ရှိပြီး ပြန်လာသူများကို မြဝတီရှိ Quarantine centre များတွင် အသွားအလာ ကန့်သတ်စောင့်ကြည့် ခြင်းများ ပြုလုပ်လျှက်ရှိကြောင်း ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေး တာဝန်ရှိသူ များထံမှ သိရသည်။
ထိုင်းမှ နေရပ်ပြန်များမှာ မတ် ၂၁ ရက်နေ့မှ စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့ထိ ၆ လ အတွင်း အမျိုးသား ၇၃,၁၃၃ နှင့် အမျိုးသမီး ၄၅,၂၇၉ စုစုပေါင်း ၁၁၈,၄၁၂ ဦး ပြန်လည်လက်ခံထားပြီး ဖြစ်သည်။ http://kicnews.org/2020/09/%e1%80%91% e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80
ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းက တောင်ကုတ်၊ သံတွဲ၊ မာန်အောင် မြို့နယ်တို့က နေရာတချို့မှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (National League for Democracy- NLD)ပါတီ ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေး အတွက် စည်းရုံး လှုံ့ဆော်ထားတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တွေ ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။
တောင်ကုတ်မြို့အတွင်းက နေရာတချို့မှာ ဆိုင်းဘုတ်တွေ ဖျက်ဆီးခံထားရတယ်လို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ ပြောခွင့်ရသူလည်းဖြစ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ ဦးမင်းအောင် က ပြောပါတယ်။ “ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးဆိုင်းဘုတ်တွေ၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရဲ့ ဗီနိုင်းတွေ ၄ နေရာမှာ ဖျက်ဆီးခံထားရတာရှိတယ်၊ မအီမြို့မှာ စဖြစ်တာ၊ နောက်ပြီး ချောင်းသုံးခွရွာ၊ နတ်ကန်ရွာ၊ တန်းလွဲရာမမြို့ စတဲ့နေရာတွေမှာ ဖျက်ဆီးခံရတယ်” လို့ သူက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။ သံတွဲမြို့နယ် ငပလီမှာလည်း NLD ဆိုင်းဘုတ် တစ်ခု ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသလို မာန်အောင်မြို့နယ် သစ်ပုံရွာမှာ NLD အောင်နိုင်ရေး ဆိုင်းဘုတ်ထောင်တာကို ရွာသားတချို့ ကန့်ကွက်မှုတွေ ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ အတွက် ဆိုင်းဘုတ်ကို မထောင်နိုင်ဘဲ ပြန်နုတ်ယူခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲဒီရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်း ရက္ခိုင့်တပ်တော် (Arakan Army – AA) နဲ့ အစိုးရ တပ်မတော်အကြား လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ တွေ ဖြစ်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက် အခုလာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ပါတီဟာ ဒီမြို့နယ်တွေမှာ ဆက်အနိုင်ရရေးအတွက် အရင်ရွေးကောက်ပွဲထက် ပိုခက်ခဲမယ်ဆိုတဲ့ မှန်းဆချက်တွေလည်း ထွက်ပေါ်နေတာပါ။ ရခိုင်ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲ လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ ဦးဆောင်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် ဦးခိုင်ကောင်းစံက အခုလို နိုင်ငံရေးပါတီတခုရဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တွေ တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အပေါ် ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ “နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တွေကို ဖျက်ဆီးတာမျိုးကို ကျွန်တော်တို့ ကန့်ကွက်ပါတယ်၊ ရှုတ်ချပါတယ်၊ ဒါမျိုးကမလုပ်သင့်ပါဘူး၊ ဥပဒေအရလည်း ဒါတွေဟာ ဥပဒေကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန် နေတာပါ” လို့ သူက ပြောပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ဦးမင်းအောင်က တောင်ကုတ်မြို့နယ်အတွင်း ဆိုင်းဘုတ်တွေ ဖျက်ဆီးခံရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ https://www.bbc.com/burme se/burma-54264189
၁။ ရှမျးမွောကျ Howa Bum တောငျပျေါ မွနျမာ စဈတပျ နှငျ့ KIA တိုကျပှဲ ဖွဈပှား
၂။ အစိုးရနှငျ့ မွောကျပိုငျးမဟာမိတျအဖှဲ့ အှနျလိုငျးဆှေးနှေးရနျ လမျးကွောငျးရှာမရဖွဈနေ
၃။ မွဈဆုံစီမံကိနျးကို ရာသကျပနျ ရပျဆိုငျးဖို့ ကနြျောတို့ ကွိုးစားမယျ
၄။ သြှမျး/မွောကျ လားရှိုးမွို့နယျ အတှငျး စဈကွောငျးလှုပျရှားမှု ပိုမြားလာ
၅။ ကယားပွညျနယျ ဝနျကွီးခြုပျဟောငျးအား အဂတိကျောမရှငျသို့ တိုငျကွားထားသျောလညျး အကွောငျးပွနျခွငျး မရှိသေးဟုဆို
၆။ ကြေးရှာနယျနမိတျထိ ရှတေူးဖျောလာမညျကို ဆှမျပရာဘှမျဒသေခံမြားစိုးရိမျ
၇။ တောငျကွီးတှငျ SNLD ပါတီ အောငျနိုငျရေးဆိုငျးဘုတျကို လူငယျတဈစုက ဖကျြဆီးလိုကျသညျ့အပျေါ ခှငျ့လှတျပေးရနျ လာရောကျတောငျးပနျသဖွငျ့ ပါတီက ကအြေေး
၈။ ကိုဗဈရောဂါကွောငျ့ ယခုနှဈ ကယား ‘အဲ့ဒိုပျေါမီ’ ပှဲတျောကို အကဉျြးခြုံး ကငျြးပမညျ
၉။ ပအိုဝျးရေးရာမဲစာရငျးတှငျ ကနျြခဲ့သူမြားကို ပွနျလညျထညျ့သှငျးထား
၁၁။ ဖားကနျ့တှငျ မဲဆှယျစညျးရုံးမှုမြား ရပျနားထား
၁၂။ ကှနျဟိနျးမွို့နယျတှငျ ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာန ညှနျကွားခကျြမြားနှငျ့အညီ SNDP ပါတီ မဲဆှယျစညျးရုံးရေး စတငျ
၁၃။ ပါတီစညျးရုံးရေးသှားခဲ့သညျ့ ပါတီကိုယျစားလှယျလောငျး ၃ ဦး Quarantine ဝငျရ
၁၄။ ခငျြးအမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျပါတီ (CNLD) ဥက်ကဋ်ဌ၏ Facebook Page ခတ်ေတပိတျပငျကနျ့သတျခံရ
၁၅။ မှနျညီညှတျရေးပါတီကို ထောကျခံသူမြား မြှျောလငျ့ခကျြကွီးမား
၁၆။ ဖမျးဆီးသှားတဲ့ ကြောကျတျော အရပျသား ၁၀ ဦး တပျမတျော ပွနျလှတျ
၁၇။ တိုငျးလိုငျ (ရှမျးနီ) အမြိုးသားမြား ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးပါတီက မွဈကွီးနားမွို့နယျတှငျ မဲဆှယျစညျးရုံးမှုအဖွဈ စကျလှေ အစငျး ၅၀ ကြျောဖွငျ့ ဧရာဝတီမွဈကွောငျးတဈလြှောကျ လှညျ့လညျ
၁၈။ ရခိုငျပွညျနယျတှငျ စဈရေးတိုကျခိုကျမှုမြား အမွနျအဆုံးသတျရနျ ကုလ လူ့အခှငျ့အရေး ကြှမျးကငျြသူ တောငျးဆို
၁၉။ နားဟိုငျးလုံ ကြေးရှာ နအေိမျထဲ ရဝေငျပွီး ဒသေခံမြားအခကျကွုံနေ
၂၀။ မှနျပါတီက ကိုယျစားလှယျလောငျးတှကေိုသာ မဲပေးကွဖို့ မှနျလူငယျဆုံရပျ တိုကျတှနျး
၂၁။ ရခိုငျပါတီမြား၏ ရုပျမွငျသံကွားမဲဆှယျမိနျ့ခှနျးမြား ပွငျဆငျဖွတျတောကျခံရ
၂၂။ UNESCO တငျမညျ့ ဒုံးအက ပွငျဆငျစရိတျ ဘတျဂကျြ မလောကျငှသေးဘဲဖွဈနေ
၂၃။ ငွိမျးခမျြးရေးကို ထိခိုကျစနေိုငျတဲ့ စှမျးအငျကဏ်ဍကို ငွိမျးခမျြးရေးဖွဈစဉျမှာ ထညျ့သှငျးဆှေးနှေးရနျလိုဟုဆို
၂၄။ ထိုငျးမွနျမာ ဘုရားသုံးဆူဒသေ၌ ကုနျပစ်စညျးမြားဖွတျသနျးနမှေုကို အောကျတိုဘာ ၅ ရကျနအေ့ထိ ပိတျထား မညျ
၂၅။ ပိုးတှလေူ့နာတညျးခိုခဲ့သော မွဈကွီးနား အေးခမျြးသာတညျးခိုခနျး နှငျ့ဆကျစပျခဲ့သူ ၂၀ ဦးကို Quarantine ထားရှိ
၂၆။ UDP ဥက်ကဋ်ဌ ၏နောကျကွောငျးရာဇဝငျကို ခမြပွပါက ပါတီကိုယျစားလှယျလောငျးနုတျထှကျမညျ
၂၇။ ကယားပွညျနယျရှိ ကှာရနျတငျးစငျတာမြားမှ ရကျမပွညျ့ပဲထှကျပွေးပါက သဘာဝဘေးအန်တရာယျ ဥပဒနှေငျ့ အရေးယူ မညျဟု ဆို
၂၈။ ခငျြးပွညျနယျတှငျလှတျတျောနရောစုစုပေါငျး ၃၈ နရောဝငျပွိုငျမညျ့ ညီညှတျသောဒီမိုကရကျတဈပါတီ(UDP)အနဖွေငျ့ ၇၅% အနိုငျရရှိရနျယုံကွညျမှုရှိဟုဆို
၂၉။ ထိုငျးပွနျ အလုပျသမားမြားကို လကျခံခြိနျ ကနျ့သတျမညျ
၃၀။ ရခိုငျတောငျပိုငျးမှာ NLD ရှေးကောကျပှဲအောငျနိုငျရေး ဆိုငျးဘုတျတခြို့ ဖကျြဆီးခံရ
ရှမျးပွညျမွောကျပိုငျး မူဆယျခရိုငျ Howa Bum တောငျပျေါ မွနျမာစဈတပျ တပျမ (၈၈) စဈကွောငျး နှငျ့ ကခငျြလှတျလပျ ရေးတပျမတျော KIA တပျရငျး (၃၆) တပျဖှဲ့မြားကွား စကျတငျဘာ ၂၄ ကွာသပတေးနေ့ မှနျးလှဲပိုငျးမှ တိုကျပှဲပွနျလညျ ဖွဈပှားလာကွောငျး ဒသေခံမြားဆိုပါသညျ။ တပျမ (၈၈) စဈကွောငျးမြား KIA တပျရငျး (၃၆) စခနျးရှိရာ Howa Bum တောငျပျေါကို “နယျမွရှေငျးလငျးရေး” စဈဆငျသောကွောငျ့ ည ၈ နာရီခြိနျထိ နှဈဖကျတိုကျပှဲ ဖွဈပှားပွီး မွနျမာစဈတပျ၏ လကျနကျကွီး ပဈခတျသံမြား ကွားနရေသညျဟု ဒသေခံမြား ပွောပါသညျ။
“မှနျးလှဲပိုငျး ၄နာရီ မိနဈ ၂၀ ခနျ့ ကနေ KIA တပျရငျး (၃၆) စခနျး Howa Bum တောငျမှာ အခုထပျမံ တိုကျပှဲဖွဈပှား နပေါတယျ။ တပျမ (၈၈) ဖကျက သှား တိုကျခိုကျလို့ တိုကျပှဲ ဖွဈတာပါ။ အခုခြိနျထိ လကျနကျကွီးတှေ ပဈခတျနပေါတယျ”ဟု အမညျမဖျောလိုသူ ဒသေခံတဈဦး ကခငျြသတငျးဌာန KNG ကို ကွာသပတေးနညေ့ ၈ နာရီခနျ့မှာ ပွောပါသညျ။ KIA တပျမဟာ (၆) လကျအောကျ တပျရငျး (၃၆) နယျမွေ မူဆယျခရိုငျ ကွူကုတျ (ပနျဆိုငျး)မွို့နယျခှဲ ဧရိယာအတှငျး တပျမတျော တပျမ (၈၈) နှငျ့ တပျမ (၉၉) စဈကွောငျးမြား “နယျမွရှေငျးလငျးရေး”စဈဆငျနသေောကွောငျ့ ယခုလ စကျတငျဘာ (၁၀)မှ ပွနျလညျ တိုကျပှဲမြားဖွဈပှားနခွေငျးဖွဈကွောငျး ဒသေခံမြား ဆိုပါသညျ။
၎င်းငျး တိုကျပှဲပွနျစခဲ့သညျ့နတှေ့ငျ လူဦးရေ ၃၀၀ ခနျ့ရှိ Man Kawng (မနျကောငျး)ရှာသား အားလုံးသညျ နီးစပျရာ Man Pying (မနျပိနျး) ရှာသို့ စဈရှောငျ ခိုလှုံနရေသညျဟု Man Kawng ရှာလူကွီးက အစောပိုငျးက ကခငျြသတငျးဌာန KNG ကို ပွောပါသညျ။ တပျမတျော၏တဈဖကျသတျ ထိုးစဈ ရပျထားမှုကို စကျတငျဘာ (၃၀) ထိ ရကျတိုး ထားသျောလညျး တပျမ (၈၈)၊ တပျမ (၉၉) နှငျ့ တပျမ (၂၂) တပျဖှဲ့မြားက “နမွေရှေငျးလငျးရေး စဈဆငျလှုရှားမှု” ကို ရှမျးပွညျမွောကျပိုငျး အထူး သဖွငျ့ မွောကျပိုငျးမဟာမိတျ ၄ဖှဲ့ KIA၊ ကိုးကနျ့ MNDAA၊ ရခိုငျ AA နှငျ့ တအာငျး TNLA စခနျးမြားရှိရာ မူဆယျခရိုငျအတှငျး ပွုလုပျနခွေငျးလညျး ဖွဈသညျ။ https://burmese.kac hinnews.com/2020/09/25/%e1%80%9b%e1%80%be%e1 %80%99%e1%80%ba%e1
အစိုးရနှငျ့ မွောကျပိုငျးမဟာမိတျအဖှဲ့ အှနျလိုငျး ဆှေးနှေးပှဲ လုပျနိုငျရနျ လမျးကွောငျးရှာမရဖွဈနသေညျဟု ကခငျြလှတျ မွောကျရေးတပျမတျော KIA ပွနျကွားရေးတာဝနျခံ ဗိုလျမှူးကွီးနျောဘူက ပွောသညျ။“အှနျလိုငျးမီတငျလုပျဖို့ လမျးကွောငျး ရှာနတေဲ့ အခြိနျကာလဖွဈတယျ။ ဘယျတော့လုပျမယျဆိုတာ လုပျမယျဆိုတာ အတိအကြ သတျမှတျတာ မရှိဘူး။
ကြှနျတျောတို့လညျး အှနျလိုငျးမီတငျလုပျဖို့ ကတော့ လိုငျးကိစ်စရော အငျတာနကျကိစ်စရော လောလောဆယျတော့ အဆငျ မပွဘေူးလေ။ အဲတာတှေ ဘယျလိုလုပျမယျဆိုတာ ညှိနှိုငျးပွီးတော့ လမျးကွောငျးရှာနေ တာဖွဈတယျ”ဟု ဗိုလျမှူးကွီး နျောဘူက ပွောသညျ။ အစိုးရနှငျ့ မွောကျပိုငျးမဟာမိတျအဖှဲ့ အှနျလိုငျးဆှေးနှေးပှဲ ကငျြးပမညျဆိုပါက မွောကျပိုငျးမဟာမိတျ လေးဖှဲ့လုံး ပါဝငျရမှာ ဖွဈပွီး လေးဖှဲ့လုံး အငျတာနကျအဆငျပွမှောသာ ဆှေးနှေးလို့ရမညျဟုဆိုသညျ။“KIO တဈဖှဲ့ခငျြးနဲ့ လုပျမှာလညျး မဟုတျဘူး ကြှနျတျောတို့ မွောကျပိုငျးအားလုံးနဲ့ဆိုတော့ ကြှနျတျောတို့ အဆငျပွရေငျလညျး အခွားသော ကြှနျတျောတို့ရဲ့ မဟာမိတျအဖှဲ့တှေ အဆငျမပွရေငျလညျး အဟနျ့အတားဖွဈသှားနိုငျတယျလေ တဈခွားသော အဖှဲ့အစညျး မှာ အဆငျပွရေငျလညျး ကြှနျတျောတို့မှာ လုပျလို့မရလို့ ဖွဈနတေယျလအေဲတာကွောငျ့ လမျးကွောငျးရှာနတေဲ့ အခြိနျကာလ ဖွဈနတော” ဟု ဗိုလျမှူးကွီးနျောဘူက ပွောသညျ။
မွောကျပိုငျးမဟာမိတျအဖှဲ့ဝငျမြားဖွဈသညျ့ KIO သညျ လိုငျဇာတှငျ ရှိနပွေီး ကနျြသညျ့ ပလောငျ(တအနျး)ပွညျနယျ လှတျမွောကျရေးတပျဦး (PSLF/TNLA)၊ ရခိုငျအမြိုးသားအဖှဲ့ခြုပျ(ULA/AA)၊ မွနျမာအမြိုးသားဒီမိုကရေ စီမဟာမိတျတပျ ဖှဲ့(MNDAA) တို့ မညျသညျ့နရောတှငျရှိနပွေီး မညျသို့ ပါဝငျဆှေးနှေးမညျကို မသိရှိသေးကွောငျး ဗိုလျမှူးကွီးနျောဘူက ဆိုသညျ။ အစိုးရငွိမျးခမျြးရေး အကွံပေးပုဂ်ဂိုလျ ဦးလှမောငျရှကေ အစိုးရနှငျ့ မွောကျပိုငျးမဟာမိတျအဖှဲ့တို့ အှနျလိုငျး ဆှေးနှေးပှဲ ပွုလုပျမညျကို တရားဝငျ မသိရှိသေးဘဲ ဆှေးနှေးပှဲ ပွုလုပျမညျဆိုသညျကိုတော့ ကွားသိထားသညျဟု ဆိုသညျ။ မွောကျပိုငျးမဟာမိတျ လေးဖှဲ့တှငျ ကခငျြလှတျလပျရေးတပျဖှဲ့(KIA)၊ ပလောငျ(တအနျး)ပွညျနယျ လှတျမွောကျရေးတပျဦး (PSLF/TNLA)၊ ရခိုငျအမြိုးသားအဖှဲ့ခြုပျ(ULA/AA)၊ မွနျမာအမြိုးသားဒီမိုကရေ စီမဟာမိတျတပျ ဖှဲ့(MNDAA) တို့ ဖွဈသညျ။ http://burmese.monnews.org/2020/09/24/%e1%80%a1%e1%80%85%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80
၂၀၂၀ အထှထှေေ ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပရနျ ရကျပေါငျး ၄၀ ကြျောသာ လိုတော့သျောလညျး တဖကျတှငျ COVID -19 ရောဂါကူးစကျမှုနှုနျး မွငျ့တကျနဆေဲ ဖွဈသဖွငျ့ မဲဆှယျ စညျးရုံးရမညျ့ ကိုယျစားလှယျလောငျးမြားမှာ ကနျြးမာရေးဆိုငျရာ ကနျ့သတျခကျြမြားကွားမှ မဲဆှယျမှုကို ဆောငျရှကျနကွေရသညျ။ ကခငျြပွညျနယျတှငျ အငျအားကွီး ပါတီမြားဖွဈသညျ့ အမြိုးသား ဒီမိုကရစေီ အဖှဲ့ခြုပျပါတီ (NLD)၊ ပွညျထောငျစု ကွံ့ခိုငျ ရေးနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးရေးပါတီ (USDP) တို့ကို အနိုငျယှဉျပွိုငျရနျ ကခငျြပွညျနယျ ပွညျသူ့ပါတီ (KSPP) ကလညျး မဲဆှယျစညျးရုံးမှုမြား လုပျဆောငျနသေညျ။ KSPP သညျ ကခငျြပါတီ ၄ ပါတီ ပူးပေါငျးလိုကျသညျ့ ပါတီကွီးဖွဈပွီး ကခငျြလူထု ထောကျခံမှုလညျး ရှိသညျ့အပွငျ ကခငျြ ပွညျနယျတှငျး ကိုယျစားလှယျ လောငျး နရော ၆၇ နရော၊ ရှမျးတိုငျးရငျးသားရေးရာ ဝနျကွီးနှငျ့ ဗမာတိုငျးရငျးသားရေးရာ ဝနျကွီး ၂ နရောတို့ကို ဝငျပွိုငျမညျ ဖွဈကာ ပွညျနယျ အစိုးရသဈ ဖှဲ့ရာတှငျ ပါဝငျနိုငျရေး အထိ မြှျောမှနျးထားသညျ။
ဖွေ။ ။ မွဈဆုံက လူ့အသကျနဲ့ ဆိုငျတယျ။ ပွညျသူလူထု၊ အထူးသဖွငျ့ ကခငျြပွညျနယျသားတှေ အသကျအန်တရာယျအမြား ကွီး ရှိပါတယျ။ နောကျတနိုငျငံလုံး ဧရာဝတီမွဈတကွောလုံးမှာနကွေတဲ့ ပွညျသူတှလေညျး ဒုက်ခရောကျကွမှာပါ။ ဒါကွောငျ့ မွဈဆုံက ပွညျသူလူထု လုံးဝ မထောကျခံတာ ပွညျနယျသားတှအေပွငျ အားလုံး မထောကျခံတာကို ကနြျောတို့ ပါတီက မထောကျခံနိုငျပါဘူး။ ကနြျောတို့ပါတီကတော့ ပွညျသူ လူထုရဲ့ သဘောဆန်ဒကို အဓိက ထားပါတယျ။ ပွညျသူ့သဘောထား အတိုငျးပဲ ကနြျောတို့ သှားခငျြတယျ။ မွဈဆုံက ပွညျသူလူထုက ဘယျတော့မှလညျး ထောကျခံနိုငျမှာ မဟုတျလို့ ကနြျောတို့
KSPP က အမွဲတမျး မွဈဆုံစီမံကိနျးကို ကနျ့ကှကျသှားပါမယျ။ မွဈဆုံနဲ့ ပတျသကျရငျ ကနြျောတို့က ရှေးကောကျပှဲ နိုငျသညျ ဖွဈစေ၊ မနိုငျသညျဖွဈစေ ကနြျောတို့ ပါတီက အမွဲကနျ့ကှကျသှားမှာပါ။ မူဝါဒ ခမြှတျထားပါတယျ။ ဒေါကျတာ မနမျတူးဂြာသညျ KSPP ၏ ဥက်ကဋ်ဌ အဖွဈ တာဝနျယူထားသညျ့အပွငျ အငျဂနျြးယနျမွို့နယျ၊ ပွညျနယျလှတျတျော မဲဆန်ဒနယျ အမှတျ (၁) မှ ဝငျရောကျ ယှဉျပွိုငျမညျ့ ကိုယျစားလှယျလောငျး တဦး ဖွဈသညျ။ https://burma.irrawaddy.c om/opinion/interview/2020/09/25/230486.html
သြှမျးပွညျ မွောကျပိုငျး လားရှိုးမွို့နယျ မိုငျးယျော ကြေးရှာအတှငျး အစိုးရတပျမတျော စဈကွောငျးမြား လှုပျရှားမှုပိုမြားလာ ကွောငျး စုံစမျးသိရသညျ။ အစိုးရတပျမတျော စဈကွောငျးသညျ သွဂုတျလကုနျ၊ စကျတငျဘာလဆနျးပိုငျးမှ စတငျကာ သြှမျးပွညျမွောကျပိုငျး လားရှိုး၊ကှတျခိုငျ၊မူဆယျ၊နမျ့ခမျးနှငျ့မနျတုံဘကျ စဈအငျအားဖွညျ့ဆညျးမှုမြားရှိခဲ့ကွောငျးသြှမျးမွောကျ လူ့အခှငျ့အရေးစောငျ့ကွညျ့အဖှဲ့၏ အသိုငျးအဝနျးက ပွောပွသညျ။ မွနျမာနိုငျငံတှငျ ၂၀၂၀ ပါတီစုံ ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပရနျ ရကျပေါငျး ၅၀ ကြျောသာလိုတော့သညျ့အခြိနျ ကိုဗဈ-၁၉ ကူးစကျမွနျ ရောဂါလညျး တနထေ့ကျတနေ့ ကူးစကျမှုနှုနျး၊ သဆေုံးမှုနှုနျးမွငျ့တကျလာသညျ။
တခွားပွညျနယျ ဒသေမြားတှငျ ရှေးကောကျပှဲအတှကျ ပါတီအသီးသီးမှ မဲဆှယျစညျးရုံးရေးမြားပွုလုပျနသေကဲ့သို့ သြှမျးမွောကျပိုငျးတှငျလညျး ကိုဗဈ-၁၉ အန်တရာယျနှငျ့ စဈရေးအန်တရာယျကွား စိုးရိမျစိတျဖွငျ့ မဲဆှယျစညျးရုံးရေးဆငျး နကွေ ကွောငျး လှတျတျောကိုယျစားလှယျ အသိုငျးအဝနျး က ပွောသညျ။ လကျရှိမှာ သြှမျးပွညျမွောကျပိုငျး လားရှိုးမွို့နယျအတှငျး တိုကျပှဲ ထိတှမှေု့မြားရှိပွီး၊ စညျးရုံးရေး ဆငျးခြိနျ စဈကွောငျးမြား သှားလာလှုပျရှားမှုကိုလညျး မွငျတှနေ့ရေကွောငျး လားရှိုး အမြိုးသား လှတျတျော ကိုယျစားလှယျ စိုငျးဝမျးလနျြးခမျး က သြှမျးသံတျောဆငျ့ ကိုပွောသညျ။ စိုငျးဝမျးလနျြးခမျးသညျ ၂၀၂၀ ပါတီစုံ ဒီမိုကရစေီ ရှေးကောကျပှဲတှငျ ရှမျးအမြိုးသား ဒီမိုကရစေီ အဖှဲ့ခြုပျ(SNLD) လားရှိုးမွို့ ပွညျသူ့လှတျတျော ကိုယျစားလှယျလောငျး အဖွဈ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျ ဖွဈသညျ။
လကျရှိကာလတှငျ တိုကျပှဲမြားမဖွဈစခေငျြကွောငျး၊ အစိုးရတပျမတျော အနဖွေငျ့ စဈရေးလှုပျရှားမှုကို ရပျတနျ့ပေးစလေိုပွီး၊ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျမြားအနဖွေငျ့ သှားလာလှုပျရှားမှုကို ရပျတနျ့စခေငျြကွာငျးလညျး သြှမျးပွညျတှငျ လှုပျရှားနေ သညျ့ နိုငျငံရေးပါတီမြားက ပွောသညျ။“တိုကျပှဲက ကနြျောတို့မဖွဈစခေငျြဘူး။ ဘယျအဖှဲ့ပဲဖွဈဖွဈ တိုကျပှဲဖွဈမယျ့ အရိပျအယောငျ ရှိရငျ ရှောငျကွဉျဖို့လိုပါတယျ။ တပျမတျော စဈကွောငျးကလညျး ထိုးစဈဆငျမှုတှေ ရပျတနျ့ဖို့လိုပါတယျ” ဟု စိုငျးဝမျးလနျြးခမျး က ပွောသညျ။
လားရှိုးမွို့နယျအတှငျး အစိုးရတပျမတျော နှငျ့ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျ တပျဖှဲ့မြားသညျ အခြိနျမရှေးပဋိပက်ခ ဖွဈပှားနိုငျ သညျ့ အနအေထားဖွဈနကွေောငျး၊ လကျရှိမှာ စဈရေးနှငျ့ ကိုဗဈ-၁၉ အရေးကို စိုးရိမျမှုကွောငျး မဲဆှယျစညျးရုံးရေး မဆငျးနိုငျသေးကွောငျး လားရှိုးမွို့ တအာငျး (ပလောငျ)အမြိုးသား ပါတီ (TNP) ဥက်ကဌ ဦးအောငျမငျး က သြှမျးသံတျောဆငျ့ ကိုပွောသညျ။ သညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/18641
ကယားပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျဟောငျး ဦးအယျလျဖောငျးရှို ဝနျကွီးခြုပျအဖွဈ တာဝနျထမျးဆောငျစဉျက ငှကွေေး သုံးစှဲမှုမြား နှငျ့ပတျသကျ၍ စုံစမျးစဈဆေးပေးရနျ အဂတိ လိုကျစားမှု တိုကျဖကျြရေး ကျောမရှငျထံ စကျတငျ ဘာလ ၈ ရကျနကေ့ တိုငျကွားစာ ပေးပို့ထားပွီဖွဈသျောလညျး စကျတငျဘာ ၂၂ ရကျအထိ အကွောငျးပွနျခွငျးမရှိသေးကွောငျး ပွညျနယျ လှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးသဲရယျက ကပွောသညျ။ ဦးသဲရယျသညျ ကယားပွညျနယျ ဝနျကွီးခြုပျ အပျေါစှပျစှဲပွဈတငျမှု ၌ ကယားပွညျနယျ လှတျတျောမှ ဖှဲ့စညျးပေးထားသညျ့ စုံစမျးစဈဆေးရေး အဖှဲ့တှငျ ဥက်ကဋ်ဌ အဖွဈတာဝနျယူခဲ့သူလညျး ဖွဈ သညျ။
ဦးသဲရယျက “ လကျရှိကနြျောတို့ သိတာကတော့ သိနျး ပေါငျး ၅၀၀၀ ဝနျးကငျြ လောကျ တှရေ့ ပါတယျ။ ဒီလောကျမြားတဲ့ ငှကွေေးကို ဒီတိုငျး လှတျထားမယျဆိုလို့ရှိရငျလညျး ဒီလိုကိစ်စ မြိုးကို လှတျထားတဲ့ လူတှေ လညျး သူတို့မှာ အဂတိလိုကျစား၊ အဂတိ မွောကျတယျလို့ ကနြျောတို့ စှပျစှဲလို့ ရတယျ” ဟု ပွောသညျ။ အဂတိ လိုကျစားမှု တိုကျဖကျြရေး ကျောမရှငျမှ ပွော ရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဦးကြျောစိုးက “ စုံစမျး စဈ ဆေးရေးကိစ်စရပျဖွဈတယျဆိုရငျလညျး တိုငျကွားစာတှကေို လြှို့ဝှကျထားတယျ စုံစမျးစဈ ဆေးရေးစာတှကေို လြှို့ဝှကျထားရပါတယျ ပွီးမှသာ ကနြျောက လုပျငနျးဆောငျရှကျခကျြ ပွီးသှားပွီဆိုတဲ့ အခြိနျမှာ ပွညျသူ လူထုကို အသိ ပေးတဲ့ ကိစ်စကို ထုတျပွနျ ပေးတယျ တခြို့ကိစ်စ တှကေတြော့ တိုငျကွား သူကို အကွောငျးပွနျ ကွားစာလေးတှေ ပို့ပေးပါ တယျ”ဟု မဇ်ဈိမ သတငျး ဌာနကို ပွောသညျ။
ကယားပွညျနယျ စာရငျးစဈခြုပျ၏ အစီရငျခံစာအပျေါ အခွခေံ၍ ပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျအား လှတျတျောတှငျ စှပျစှဲပွဈတငျ ကွောငျး အဆိုတငျသှငျး မဲခှဲဆုံးဖွတျခဲ့ရာ ထောကျခံမဲ ၁၆ မဲ၊ ကနျ့ကှကျမဲ ၄ မဲ ဖွငျ့ လှတျတျောက အတညျပွု ဆုံးဖွတျခဲ့ သညျ့ အတှကျ တာဝနျမှ ရပျနားခံခဲ့ရခွငျး ဖွဈသညျ။ http:// www.mizzimaburmese.com/article/73767
ကခငျြပွညျနယျ ဆှမျပရာဘှမျမွို့နယျ ဖုနျအိနျယာနျ (Hpung Ing Yang) ကြေးရှာတှငျ အစိုးရတရားဝငျခှငျ့ပွုထားသညျ့ ရှတေူးဖျောလုပျကှကျမွနေရောထကျကြျောလှနျပွီး ကြေးရှာ၏ နယျနမိတျအတှငျးထိ ဝငျရောကျတူးဖျောလာမညျကို ဒသေခံ မြားက စိုးရိမျနကွေသညျ။
ပွညျနယျအစိုးရက တရားဝငျခှငျ့ပွုထားသော အသေးစားသတ်တုတူးဖျောခှငျ့ လုပျကှကျမွနေရောထကျကြျောလှနျပွီး ကြေးရှာ၏ နယျနမိတျအတှငျးထိ ရှတေူးဖျောခှငျ့ရရှိရေး လုပျဆောငျနသေောလုပျငနျးရှငျမြားရှိနသေောကွောငျ့ လုံးဝ ကနျ့ကှကျကွောငျး ဒသေခံဖွဈသော ဦး Lajaw La Htoi က ယခုလို ပွောဆိုသညျ။“တဈခြို့လုပျငနျးရှငျမြားက အစိုးရက ခထြားပေးတဲ့ မွနေရောတှမှော မဟုတျဘဲ ကြေးရှားရဲ့ နယျနမိတျအတှငျးမှာ ရှတေူးဖျောဖို့ လုပျဆောငျနတေဲ့ လုပျငနျးရှငျ ရှိနတောတှကေို ကွားသိနရေတယျ။ ပွောခငျြတာက လုပျငနျးရှငျတှေ အနနေဲ့ အစိုးရနဲ့ တရားဝငျလုပျနရေငျလညျး ကနြျောတို့ ဒသေခံတှနေဲ့က တရားဝငျဖွဈမှာမဟုတျဘူး။ ခှငျ့ပွုခကျြမရဘဲ မွကှေကျတိုငျးတာ တာတှလေုပျလာရငျ ဒသေခံ တှနေဲ့ ကွီးမားတဲ့ ပွဿနာတှေ ဖွဈလာမှာဘဲ။ စီမံကိနျး မဝငျအောငျလညျး ဒသေခံတှအေားလုံးက ဆကျလကျ ကနျ့ကှကျ သှားမယျ” ဟု ပွောဆိုသညျ။
ဆှမျပရာဘှမျ မွို့နယျအတှငျး အစိုးရက တရားဝငျခှငျ့ပွုထားသညျ့ လုပျကှကျ ၁၃နရောခထြားပွီး အငျဇာဇှပျအထကျဖကျ ရှိ ဂဖရနျ့ခူး(ဒသေချေါ)အနီးတဝိုကျ၊ အငျဘနျခ အနီးရှိ ဆငျလီဇှပျခူး၊ ဖုနျအိနျခအနီးတဝိုကျ၊ လကျပံခြောငျးဆုံ (ဖုနျငိုငျခ)နှငျ့ ဖုနျကနျြးခ အထကျဘကျတှငျရှိသော ရှငျဒနျ့ခူးတှငျ ၂ နရော၊ အငျဘနျဇှပျဘကျရှိ ဝါးတောမှျော စသောနရောမြားတှငျ ခထြား ကွောငျးသိရသညျ။ ဖုနျအိနျခနှငျ့ ဖုနျကနျြခ မွဈဆုံ ၂ ခု၏ အောကျဘကျခွမျးတှငျ ကြေးရှာနယျနမိတျအဖွဈ သတျမှတျထား ပွီး ရှတေူးဖျောနသေောနရောနှငျ့ လကျရှိကြေးရှာတညျနရောသညျ အထကျဘကျတှငျ ၃ မိုငျခနျ့နှငျ့ အောကျဘကျတှငျ ၂ မိုငျကြျောခနျ့သာ နီးကပျနပွေီ ဖွဈကွောငျး ဒသေခံမြားပွောဆိုခကျြမှ သိရပါသညျ။
ရှတေူးဖျောမှုကွောငျ့ ဒသေခံမြား ဆုံးရှုံးရသောလယျယာမွမြေားအတှကျ လုပျငနျးရှငျမြားဘကျမှ နဈနာကွေးအဖွဈ အမြားဆုံး သိနျး ၂၀ ခနျ့ ပွနျလညျး ပေးခဲ့သညျဟုလညျး သိရသညျ။ အဆိုပါ မွို့နယျမြားတှငျ ရှတေူးဖျောခှငျ့ကို တရားဝငျခြ ထားပေးခွငျးမှာ တရားမဝငျလုပျကိုငျနသေူမြားကိုတရားဝငျ လုပျပိုငျခှငျ့ပေးပွီး နိုငျငံတျောအခှနျပိုမိုရရှိလာအောငျ လုပျထုံး လုပျနညျးအရ ဥပဒဘေောငျအတှငျးမှ ဆောငျရှကျပေးခွငျးဖွဈသညျဟု ရှလေုပျကှကျခထြားပေးမှုနှငျ့ပတျသကျပွီး ပွညျနယျ သဘာဝသယံဇာတဝနျကွီး ဦးဒါရှီလဆိုငျးက ကခငျြသတငျးဌာန KNG ကို ယခငျက ဖွဆေိုခဲ့ဖူးသညျ။ https://burmese .kachinnews.com/2020/09/23/%e1%80%80%e1%8 0%bb%e1 %80%b1%e1%80%b8%e1
၇။ တောငျကွီးတှငျ SNLD ပါတီ အောငျနိုငျရေးဆိုငျးဘုတျကို လူငယျတဈစုက ဖကျြဆီးလိုကျသညျ့အပျေါ ခှငျ့လှတျပေးရနျ လာရောကျတောငျးပနျ သဖွငျ့ ပါတီက ကအြေေး
တောငျကွီးမွို့နယျ ရှညေောငျမွို့ သံတဲတိုကျနယျတှငျ SNLD ပါတီ အောငျနိုငျရေးဆိုငျးဘုတျကို လူငယျတဈစုက ဖကျြဆီး လိုကျသညျ့အပျေါခှငျ့လှတျပေးရနျလာရောကျတောငျးပနျသဖွငျ့ ကအြေေးပေးခဲ့ရကွောငျးတောငျကွီးမွို့နယျ ရှမျးတိုငျးရငျး သားမြားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ SNLD ပါတီထံမှ သတငျးရရှိသညျ။
ဖွဈစဉျမှာ တောငျကွီးမွို့နယျ ရှညေောငျမွို့ အနောကျမွောကျဘကျ သံတဲတိုကျနယျအဝငျရှိ SNLD ပါတီ အောငျနိုငျရေး ဆိုငျးဘုတျကို စကျတငျဘာ ၂၂ ရကျ ညပိုငျးတှငျ လူငယျတဈစုက ဖကျြဆီးခဲ့ခွငျးကွောငျ့ တာဝနျရှိသူမြားက လိုကျလံစုံစမျး ကွညျ့ရာ လူငယျငါးဦးက ကြူးလှနျခဲ့ကွောငျး တောငျကွီးမွို့နယျ SNLD ပါတီတှဲဖကျအတှငျးရေးမှူး ဦးစိုငျးခမျးတီက ပွော ကွားသညျ။“လူငယျက ငါးယောကျဗြ။ ကြှနျတျောအပျေါကို လှမျးအကွောငျးကွားလိုကျတော့ လကျမှတျထိုးပေးမှာပေ့ါ။ မထိုးရသေးဘူးဆိုတာ အပွငျရောကျနလေို့၊ မနကျက ဒီတိုငျးထိုးလိုကျတယျ။ အခု သူတို့ရှာရဲ့ ရာအိမျမှူးတှနေဲ့ ထပျပွီးလုပျရ မှာပေ့ါ။ သံတဲတိုကျ နယျအုပျစု ကြေးရှာပေါငျး ၁၁ ရှာ ရှိတယျ။ ရှာအဝငျ လမျးဆုံမှာပေ့ါ။ အရကျသောကျတာ ညတိုငျးတော့ မတှဘေူ့းဗြ။ အရငျတုနျးက မရှိခဲ့ဘူး။ ဒါပထမဆုံးပေ့ါ။ ဒါကို ဝိုငျးဝနျးပွီး တားဆီးဖို့လိုမယျလို့ ထငျပါတယျ” ဟု ဦးစိုငျးခမျးတီ က ဆိုသညျ။
အဆိုပါ လူငယျအဖှဲ့သညျ နောကျတဈနေ့ နံနကျပိုငျးတှငျ တောငျကွီးမွို့နယျ ရှမျးတိုငျးရငျးသားမြား ဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ ပါတီ တှဲဖကျအတှငျးရေးမှူး ဦးစိုငျးခမျးတီထံ လာရောကျတောငျးပနျခဲ့သဖွငျ့ ဦးစိုငျးခမျးတီမှတဆငျ့ မွို့နယျအလုပျအမှု ဆောငျအဖှဲ့ထံသို့ ဆကျလကျတငျပွခဲ့ရာ တောငျးပနျမှုကို လကျခံခဲ့ပွီး ကအြေေးပေးခဲ့ရခွငျးဖွဈသညျ။ လူငယျငါးဦးတှငျ မောငျတငျကိုထှေးသညျ ဆိုငျးဘုတျကို ခဲဖွငျ့ပေါကျသူဖွဈပွီး နောကျနောငျ ကြူးလှနျမှုမရှိစရေေး ရပျကှကျရာအိမျမှူးမြား ရှမှေ့ောကျတှငျ ကတိခံဝနျလကျမှတျရေးထိုးခွငျး ထပျမံပွုလုပျသှားရမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ https://news-eleven.co m/article/193656
ကိုဗဈရောဂါ ဖွဈပှားမှုကွောငျ့ ကယားတိုငျးရငျးသား မြိုးနှယျစုမြား နှဈစဉျ ရိုးရာမပကျြ စညျကားသိုကျမွိုကျစှာ ကငျြးပလေ့ ရှိသညျ့ (၈) ကွိမျမွောကျ စုပေါငျး အဲ့ဒိုပျေါမီ (ချေါ) ဒီးကူ ပှဲတျောကို ယခုနှဈတှငျ အကဉျြးခြုံးသာ ပွုလုပျသှားမညျ ဖွဈကွောငျး ပှဲတျောကငျြးပရေး ကျောမတီ ဥက်ကဋ်ဌ ခူးဖဲသူးက ပွောသညျ။“ဒီလမှာပေါ့နျော၊ ခါတိုငျးနှဈလိုမြိုး ကြှနျတျောတို့ စညျစညျကားကား သိုကျသိုကျမွိုကျမွိုကျ ကငျြးပနိုငျခွငျးတော့ မရှိတော့ပါဘူး။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ COVID-19 ရောဂါကွောငျ့ပေါ့လေ၊ အကဉျြးခြုံးလောကျပဲ ကငျြးပဖို့ ရှိပါတယျ” ဟု ပွောသညျ။
အဲ့ဒိုပျေါမီ ပှဲတျောကို ယခု စကျတငျဘာလ ၂၅ ရကျနမှေ့ စတငျ၍ ၃၀ ရကျနအေ့ထိ ဖရူဆိုမွို့နယျ တောငျဘကျ လောပလြားလဲ ကြေးရှာတှငျ ကငျြးပရနျ စီစဉျထားပွီး ပှဲကငျြးပရေး ကျောမတီနှငျ့ သကျဆိုငျရာ ရပျမိရပျဖ အပါအဝငျ ကြေးရှာမြားမှ လာရောကျမညျ့ ဒသေခံမြားကို လူဦးရေ အကနျ့အသတျဖွငျ့ ဖိတျကွားသှားမညျ ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ ထို့အပွငျ ယခငျနှဈကကဲ့သို့ ရှမျးပွညျနယျ တောငျပိုငျး၊ ဖယျခုံမွို့နယျ၊ နောငျလိုငျ ကြေးရှာတှငျ (၇) ကွိမျမွောကျ ကငျြးပခဲ့ သညျ့ စုပေါငျး အဲဒိုပျေါမီ ပှဲတျောကဲ့သို့ ယဉျကြေးမှုနှငျ့ဆိုငျသော ရိုးရာပွခနျးမြား ပါဝငျတော့မညျ မဟုတျကွောငျး ခူးဖဲသူးက ပွောသညျ။
အဆိုပါ (၇) ကွိမျမွောကျ ကငျြးပခဲ့သညျ့ စုပေါငျး အဲ့ဒိုပျေါမီ ပှဲတျောကို ကယားပွညျနယျ လှတျတျောဥက်ကဋ်ဌ ဦးလှထှေးနှငျ့ လှတျတျောကိုယျစားလှယျမြား၊ ကရငျနီအမြိုးသား တိုးတကျရေးပါတီ (KNPP) မှ ဦးရှမြေိုးသနျ့တို့ တကျရောကျခဲ့ကွပွီး စညျကားသိုကျမွိုကျစှာ ကငျြးပခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။ တခြိနျက ကယား (ကရငျနီ) လူမြိုးမြား၏ “ဖိုဒီးကရီး” အရှငျသခငျကို ရိုငျးပစြှာ ဆကျဆံခဲ့သော ယှနျးလူမြိုးမြားသညျ ဝမျးပကျြဝမျးလြှောရောဂါ ဖွဈခဲ့ကွပွီး ထိုအခွအေနတှေငျ ကရငျနီ လူမြိုး တို့က “ဒီးကူ” ချေါ ကိုငျးပငျ တဈမြိုး၏ အရှကျဖွငျ့ ကောကျညှငျးကို ထုပျကာ ခညျြနှောငျ ခကျြပွုတျထားပွီး မပုပျမသိုးဘဲ ကွာရှညျ အထားခံနိုငျအောငျ ရိက်ခာအဖွဈ အသုံးပွုကာ ယှနျးလူမြိုးမြားကို နရေ့ောညပါ အဆကျမပွတျ တိုကျထုတျနိုငျခဲ့ သညျ။ ယငျးအတှကျ “ဖိနှိပျမူမှ လှတျမွောကျသညျ့ အထိမျးအမှတျ” အနဖွေငျ့ ဒီးကူပှဲကို နှဈစဉျ ကြေးရှာတိုငျး ကငျြးပခဲ့ကွ ခွငျး ဖွဈသညျ။ http://www.mizzimaburmese.com/article/73782
ကရငျပွညျနယျ၊ ဖားအံမွို့နယျ၊ အောကျကော့ရငျးကြေးရှာအုပျစု၊ မရငျးကုနျးကြေးရှာတှငျနထေိုငျသညျ့ ပအိုဝျးတိုငျးရငျးသား မြားအနဖွေငျ့ ပအိုဝျးရေးရာ မဲစာရငျးတှငျ ကနျြခဲ့သူမြားကို စိစဈပွီးနောကျ ပွနျလညျထညျ့သှငျး ထားပွီးဖွဈသညျဟု ဖားအံမွို့နယျ၊ ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးသောငျးထှနျးက ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။
အဆိုပါ အောကျကော့ရငျးကြေးရှာအုပျစု၊ မရငျးကုနျးကြေးရှာတှငျ နထေိုငျသညျ့ ပအိုဝျးတိုငျးရငျးသားမြားသညျ ပွီးခဲ့သညျ့ ၂၀၁၀ နှငျ့ ၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲတှငျ ပွညျနယျ၊ ပအိုဝျးရေးရာမဲကို ပေးခှငျ့ရသညျကိုတှရေ့ သျောလညျး ယခု ၂၀၂၀ မဲစာရငျးတှငျ မပါသညျ့အတှကျ မွို့နယျကျောမရှငျထံ တငျပွခဲ့သညျဟု ပွညျနယျ၊ ပအိုဝျးတိုငျးရငျးသားလူမြိုးရေးရာ၊ တဈသီးပုဂ်ဂလ ကိုယျစားလှယျလောငျး ခှနျမငျးအောငျ(ခ) မောငျမောငျက ပွောသညျ။“ကနြျော အရငျရှေးကောကျပှဲတှေ တုနျးက ကိုယျစားလှယျလောငျးရဲ့ ကိုယျစားလှယျ လုပျပေးခဲ့ဖူးတယျ။ အဲ့တုနျးက မရငျးရှာက ပအိုဝျးတှေ ရေးရာမဲပေးခဲ့ရဖူး တယျ။ ဒီတကွိမျမှာ အဲ့ရှာကို စညျးရုံးရေး ဆငျးတော့မပါလို့ စိစဈဖို့ တငျပွခဲ့တာပါ”ဟု ခှနျမငျးအောငျက ပွောသညျ။
မရငျးကုနျးကြေးရှာတှငျ ပအိုဝျးတိုငျးရငျးသားရေးရာမဲစာရငျးတှငျ မဲဆန်ဒရှငျ ၅၀ ဦးကြျောရှိသညျဟု ၎င်းငျးက ဆကျပွောသညျ။ ပွီးခဲ့သညျ ၂၀၁၅ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲတှငျ ကရငျပွညျနယျ၊ ပအိုဝျးတိုငျးရငျးသားလူမြိုးရေးရာ မဲဆန်ဒနယျတှငျ မဲပေး ခှငျ့ရှိသူ ၄၅, ၀၁၁ ဦးရှိသညျဟု ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျထုတျပွနျခကျြတှငျ ဖျောပွထားသညျ။ http://kic news.org/2020/09/%e1%80%95%e1%80 %a1%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%9d%e1%80
ခငျြးအမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ (CNLD) ပါတီကို ထောကျခံအားပေးပွီး ဝနျးရံသူမြားသညျကနျြးမာရေးဌာနမှ ထုတျပွနျ သညျ့ စညျးကမျးမြားကို မလိုကျနာကွောငျး ဒသေအခြို့တှငျဝဖေနျမှုမြားကို ကနျြးမာရေးဌာနမှထုတျပွနျသညျ့စညျးကမျး မခြိုးဖောကျဟု (CNLD) ဥက်ကဌမှ ဆိုသညျ။ စကျတငျဘာ(၁၉)ရကျက စဈကိုငျးတိုငျး ကလေးမွို့မှာ ခငျြးအမြိုးသား ဒီမိုကရေ အဖှဲ့ခြုပျ(CNLD) ကို ထောကျခံသညျ့ ခငျြးတိုငျးရငျးသားလူဦးရေ သုံးရာကြျောခနျ့ဖွငျ့မွို့တှငျး လှညျ့မဲဆှယျမှုမှာ ကနျြးမာ ရေးဌာန ထုတျပွနျသညျ့ စညျးကမျးအတိုငျးမဲမဆှယျဟု ကလေးမွို့ ဒသေခံပွညျသူအခြို့ကဝဖေနျခွငျးအပျေါ (CNLD) မှ ဥက်ကဌ ဦးငိုငျဆောချ့က စညျးကမျးမခြိုးဖောကျကွောငျးပွောသညျ။
ခငျြးအမြိုးသား ဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျပါတီ (CNLD) မှ ဥက်ကဌ ဦးငိုငျဆောချ့က “ပါတီတိုငျးက စညျးရုံးရေး လုပျနကွေတာလေ ကျောမရှငျကလညျး ခှငျ့ပွုထားတာဘဲ ကနျပကျလကျလိုမြိုး မငျးတပျမွို့လိုမြိုးမှာကွတော့ ထူးခွားတဲ့ အခွနေကွေောငျ့ ရပျနားထားတယျလေ စညျးကမျးအတိုငျးပဲလုပျနတောပဲလေ။ ထူးခွားမှုလညျး မရှိတဲ့နရောမှာ ပါတီတိုငျးကလညျး လုပျနတေဲ့ အခြိနျမှာ CNLD ခငျြးပါတီကို ကှကျပွီးဝဖေနျနရေငျလညျး မလိုလားတဲ့သူတှေ ဖွဈပါမယျ။ တခွားပါတီ စညျးရုံးရေးဆငျးနေ တာကိုလညျး ကတြျောတို့ ဝဖေနျမနဘေူးလေ”ဟုပွောသညျ။ ခငျြးအမြိုးသား ဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျပါတီ ဥက်ကဌ ဦးငိုငျဆောချ့ သညျ လာမညျ့ နိုဝငျဘာလတှငျ ကငျြးပမညျ့ ရှေးကောကျပှဲတှငျ ပွညျနယျလှတျတျော အမှတျ(၁) မှ ဝငျရောကျ ယှဉျပွိုငျ မညျဖွဈသညျ။
ခငျြးအမြိုးသား ဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျပါတီ (CNLD)မှ ဥက်ကဌ ဦးငိုငျဆောချ့က “မငျးတပျမွို့နဲ့ ကနျပကျလကျမွို့ကိုတော့ ရောဂါ အခွနေကွေောငျ့ စညျးရုံးရေးကိုယာယီရပျနားထားတယျ မတူပီမွို့ကတော့ထူးထူးခွားခွားမရှိတော့ ပါတီအားလုံးတော့သူ့ ဟာနဲ့သူ သှားနကွေတယျ ရပျနားထားတာတော့မရှိဘူး”ဟုပွောသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-75754
ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျက ထုတျပွနျထားသညျ့ လုပျထုံးလုပျနညျး (SOP) အရ Stay Home သတျမှတျထား သညျ့ နရောမြားတှငျ နိုငျငံရေးပါတီမြားအနဖွေငျ့ မဲဆှယျခှငျ့မရှိကွောငျး သိရသညျ။
ထို့ကွောငျ့ ကခငျြပွညျနယျ ဖားကနျ့မွို့တှငျလညျး ပွညျသူနဲ့ ထိတှကေ့ာ မဲဆှယျခှငျ့ရမညျ မဟုတျကွောငျး ကခငျြပွညျနယျ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျရုံး(ခှဲ)မှ အရာရှိဦးထှနျးအောငျခိုငျက ဆိုသညျ။“Stay at Home မှာ မဲဆှယျစညျးရုံးခှငျ့နဲ့ ပတျသကျ ပွီးတော့ Covid-19 ကာကှယျထိနျးခြုပျရေးအမြိုးသားအဆငျ့ ဗဟိုကျောမတီကထုတျပွနျထားတဲ့(SOP) ဆိုတာရှိတယျ အပိုငျး ၁ မှာပါတယျ။ Stay at Home သတျမှတျလိုကျပွီဆိုလို့ရှိရငျ မဲဆှယျစညျးရုံးခှငျ့မရှိတော့ဘူး။ အဲတော့ ကခငျြပွညျနယျ မှာ ဖားကနျ့က Stay at Home သတျမှတျထားတယျလို့ သိရတယျ အဲတော့ (SOP) အရ မဲဆှယျလို့မရ တော့ဘူး။” ဟု ပွောသညျ။
လကျရှိကခငျြပွညျနယျတှငျ Covid-19 ရောဂါပိုးကူးစကျသူ ၁၃ ဦးရှိနပွေီဖွဈပွီး ၎င်းငျးတို့ ၁၃ ဦးအနကျ ၉ ဦးသညျ ဖားကနျ့မွို့မှ ဖွဈသညျ့တှကျ စကျတငျဘာလ ၂၀ ရကျနမှေ့စကာ ဖားကနျ့မွို့ပွညျသူမြားအား Stay Home သတျမှတျ လိုကျပွီဖွဈသညျ။ စကျတငျဘာလ ၈ ရကျနမှေ့စကာ မဲဆှယျခှငျ့ပွုထားသျောလညျး Stay at Home သတျမှတျထားသညျ့ နရောမြားတှငျ မဲဆှယျခှငျ့မရှိတော့သညျ့အတှကျ အှနျလိုငျးမှတဈဆငျ့သာ မဲဆှယျရနျအတှကျပွငျဆငျထားကွောငျး ကခငျြပွညျနယျပွညျသူ့ပါတီ KSPP မှ ဖားကနျ့မွို့နယျ ပွညျသူ့လှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျး ဦးလအောငျ က ကခငျြ သတငျးဌာန KNG ကို ပွောသညျ။
“မဲဆှယျခှငျ့ကတော့ ပွောစရာကိုမလိုတော့ဘူး ခုဆိုရငျနားထားတာ ၄ ရကျလောကျရှိနပွေီ။ ကနြျောတို့ပါတီကတော့ ရောဂါပိုး ၄ယောကျထပျတှတေဲ့နကေ့တညျးကနေ လုံးဝကိုနားထားပွီဖွဈတယျ။”ဟု အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ ဖားကနျ့မွို့နယျ ပွညျသူ့လှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးတငျ့စိုးက ပွောသညျ။ https://burmese.kachinnews.com/202 0/09/22/%e1%80%96%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%80%e1
ရှမျးပွညျနယျတောငျပိုငျး လှိုငျလငျခရိုငျ ကှနျဟိနျးမွို့နယျတှငျ ကနျြးမာရေးနှငျ့ အားကစားဝနျကွီးဌာန ညှနျကွားခကျြမြားနှငျ့ အညီ ရှမျးတိုငျးရငျးသားမြား ဒီမိုကရကျတဈပါတီ (SNDP) က မဲဆှယျစညျးရုံးရေး စတငျဆောငျရှကျခဲ့ကွောငျး သတငျးရရှိ သညျ။ ကှနျဟိနျးမွို့နယျ ကှနျဟိနျးမွို့နှငျ့ ကာလိမွို့တို့တှငျ ဆိုငျးဘုတျအလတျ သုံးခုထောငျခွငျး၊ စီတနျးလှညျ့လညျခွငျးနှငျ့ စုဝေးဟောပွောခွငျးတို့ကို စကျတငျဘာ ၂၁ ရကျတှငျ ဆောငျရှကျခဲ့ပွီး ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာန လမျးညှနျခကျြမြားနှငျ့အညီ လကျဆေးခွငျး၊ Mask တပျခွငျး၊ တဈယောကျနှငျ့ တဈယောကျ ခွောကျပအေကှာထိုငျခွငျး၊ တတျနိုငျသမြှ ခပျခှာခှာနခွေငျး နညျးလမျးတို့ဖွငျ့ စုဝေးဟောပွောခွငျးတို့ကို ဆောငျရှကျခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
“အခုတော့ မနကေ့စတငျပွီးတော့ မဲဆှယျစညျးရုံးရေး စတငျဆောငျရှကျပါတယျ။ အခွအေနေ တျောတျောလေး ကောငျးပါ တယျ။ အစီအစဉျ ဖိတျစာလေး၊ ငါးဆယျလောကျ ဖိတျပွီးတော့ ပွညျသူလူထု ဝိုငျးဝနျး အားပေးကွတာပေ့ါ။ လူ ၃၀၀ ဝနျးကငျြလောကျ ရှိမယျထငျတယျ။ ကိုဗဈကာလကတော့ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ ခွောကျပခွေား၊ လူစုလူဝေး ၅၀ ဦးထကျမကြျောရ နညျးနညျးအခကျအခဲရှိတာပေ့ါ။ ကြှနျတျောတို့က တတျနိုငျသလောကျ ကာကှယျထားတယျဗြ။ Mask တှေ တပျထားတယျ။ လကျဆေးဂယျြတှေ ကာကှယျထားတယျ။ မနကေ့ပဲ လှညျ့လညျဟောပွောတယျ။ ကိုဗဈကွောငျ့မို့လို့ပေါ့။ နို့မို့ရငျ ထပျပွီးတော့ လှညျ့လညျခငျြသေးတယျဗြ။ မနကေ့တော့ ဝမျဟိနျးကြေးရှာမှာ ဆိုငျးဘုတျထောငျတယျ။ ကှနျဟိနျးနဲ့ ကာလိမှာ ရုံးနှဈရုံးပဲ ရှိတာပေ့ါ။ အောငျနိုငျဖို့ မြှျောလငျ့တာပေ့ါ။ ကှနျဟိနျးမွို့နယျမှာ ပွညျနယျ (၁) (၂)၊ ပွညျသူ့လှတျတျော ကိုယျစားလှယျ၊ အမြိုးသားလှတျတျော ကိုယျစားလှယျလောငျး စုစုပေါငျး လေးယောကျ ရှိတာပေါ့” ဟု ကှနျဟိနျးမွို့နယျ ရှမျးတိုငျးရငျးသားမြားဒီမိုကရကျတဈပါတီ (SNDP) ဥက်ကဋ်ဌ ဦးဆနျခမျးသွ က ပွောကွားသညျ။
ကှနျဟိနျးမွို့နယျတှငျ တညျငွိမျအေးခမျြးနပွေီး နယျမွအေတှငျး လှတျလပျစှာ မဲပေးနိုငျခှငျ့အခွအေနေ ရရှိထားကွောငျး၊ လမျးပနျးဆကျသှယျရေး အနညျးငယျခကျခဲသော ကြေးရှာမြားရှိပွီး ကှနျဟိနျးမွို့နယျ တဈခုလုံးတှငျ လြှပျစဈမီး မရရှိသေး သော ကြေးရှာ ရာခိုငျနှုနျး ၈၀ ခနျ့ ရှိနသေေးကွောငျး သိရသညျ။ https://news-eleven.com/article/193469
ကရငျပွညျနယျ ဖားအံမွို့နယျအတှငျးရှိ ကော့ဒါနျးမယျကြေးရှာတှငျ ရှာသားတဈဦးကို Covid-19 ရောဂါပိုး သံယသရှိသူ အဖွဈတှရှေိ့ခဲ့ပွီးနောကျ ထိုနယျမွဒေသေ၌ ပါတီ၏မဲဆှယျစညျးရုံးရေး သှားရောကျဖွဈခဲ့သူ ကရငျအမြိုးသားဒီမိုကရကျတဈ ပါတီ-KNDP ကိုယျစားလှယျလောငျး ၃ ဦးမှာ စကျတငျဘာလ ၂၃ ရကျနကေ့ Quarantine ဝငျလိုကျရသညျဟု သိရသညျ။ စကျတငျဘာလ ၁၉ ရကျနကေ့ အဆိုပါကြေးရှာမြားတှငျ KNDP မှ ပါတီစညျးရုံးရေးဆငျးခဲ့ကာ လကျရှိ Covid-19 ရောဂါ သံသယရှိခံရသူ ၎င်းငျးရှာသားမှာ စညျးရုံးရေးဟောပွောပှဲ၌ တကျရောကျခွငျးရှိခဲ့သညျ့အတှကျ စညျးရုံးရေးသှားရောကျခဲ့ သညျ့ ပါတီကိုယျစားလှယျလောငျး ၃ ဦးကို ကပျရောဂါဘေးကငျးစရေေးအတှကျ Quarantine ဝငျနရေနျ စကျတငျဘာလ ၂၂ ရကျနကေ့ ဖားအံမွို့နယျ ပွညျသူ့ကနျြးမာရေးဦးစီးဌာနမှ ဆကျသှယျ အသိပေးခွငျးဖွဈကွောငျး ပါတီဝငျတဈဦး က ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။
ကှာရနျတငျး(Q) ဝငျနရေသညျ့ ၎င်းငျးပါတီ၏ အမြိုးသားလှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျး နနျးလှယဉျမကေ “ကမြတို့ စညျးရုံးရေးသှားတာ ၆ ပေ ခွားထားပါတယျ။ အဲဒီပှဲမှာ အဲဒီလူနဲ့ ကမြတို့နဲ့က ထိတှမှေု့တော့မရှိဘူး။ ဒါပမေယျ့ မွို့နယျ ကနျြးမာရေးတာဝနျရှိသူတှကေ ကမြတို့ ကှာရနျတငျး(Q) ဝငျရမယျပွောတော့ အားလုံးအဆငျပွအေောငျ ကမြတို့လညျး ဝငျသှားတာပေါ့။ ဒီရောဂါက မမွငျရဘူးဆိုတော့ ကှာရနျတငျး ဝငျတာ အကောငျးဆုံးပါပဲ။”ဟု ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။
ကှာရနျတငျးဝငျနသေညျ့ ကိုယျစားလှယျလောငျးမြားမှာ ပွညျနယျလှတျတျောတှငျ ဖားအံမဲဆန်ဒနယျအမှတျ(၁)မှ ဝငျ ရောကျယှဉျပွိုငျမညျ့ နနျးစေးအှာ၊ အမြိုးသားလှတျတျောအတှကျ ဖားအံမဲဆန်ဒနယျအမှတျ(၆)မှ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျ မညျ့ နနျးလှယဉျမနှေငျ့ ပွညျသူ့လှတျတျောအတှကျ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျ့ စောမငျးဇျောဦးတို့ ဖွဈကွသညျ။ ယခုအခြိနျတှငျ ပွညျနယျအစိုးရ တာဝနျရှိသူမြား စီစဉျထားသညျ့ ဖားအံတက်ကသိုလျအဆောငျ၌ ဝါးဆူးရှာသားမြားနှငျ့ ကြေးရှာအခြို့မှ ဆယျအိမျမှူး၊ ရာအိမျမှူးမြား အပါအဝငျ ရှာသူရှာသား ၄၇ ဦးမှာလညျး ကိုယျစားလှယျလောငျး သုံးဦး နှငျ့အတူ ကှာရနျတငျး(Q) ဝငျနကွေသညျဟုလညျး သိရသညျ။ http://kicnews.org/2020/09/%e1%80%95%e1%80%a%e 1%80%90%e1%80%ae%e1%80%85%e1%
ခငျြးအမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျပါတီ (CNLD) ဥက်ကဋ်ဌ ဦးငိုငျဆာချ့၏ Facebook Page ခတ်ေတပိတျပငျကနျ့သတျခံရကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။
Facebook အနဖွေငျ့ CNLD ဥက်ကဋ်ဌ ဦးငိုငျဆာချ့၏ Facebook Page ကို စကျတငျဘာ ၂၁ ရကျ ည ၁၁ နာရီခနျ့တှငျ ပိတျပငျကနျ့သတျ (Unpublished) ခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး ဦးငိုငျဆာချ့က ၎င်းငျး၏ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာတှငျ ရေးသားထား သညျ။ အဆိုပါကိစ်စနှငျ့ပတျသကျ၍ Facebook Team ထံ အကွောငျးကွားစာကို စကျတငျဘာ၂၂ ရကျ နံနကျ ၁ နာရီကြျောတှငျ ပေးပို့ခဲ့ပွီး နံနကျ ၈ နာရီခနျ့တှငျ Facebook က အကွောငျးပွနျခဲ့ကွောငျးနှငျ့ “ High Profile Impersonation-High Profile တု ပွခွငျး” ကွောငျ့ Facebook က ဖယျရှားခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး အကွောငျးပွနျခဲ့ပါသညျဟု CNLD ဥက်ကဋ်ဌ ဦးငိုငျဆာချ့က ၎င်းငျး၏လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာတှငျ ရေးသားထားသညျ။
ထိုသို့ Facebook အနဖွေငျ့ ခငျြးအမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျပါတီ (CNLD) ဥက်ကဋ်ဌ ဦးငိုငျဆာချ့၏ Facebook Page ကို ၁၀ နာရီ ကြျောကွာ ပိတျပွီးနောကျ စကျတငျဘာ ၂၂ ရကျ နံနကျ ၉ နာရီနောကျပိုငျးတှငျ Page ပွနျလညျအသုံးပွုခှငျ့ပေးခဲ့ ကွောငျး ဦးငိုငျဆာချ့က ၎င်းငျး၏ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာတှငျ ရေးသားထားသညျ။ https://news-eleven.com/article/19
မှနျညီညှတျရေးပါတီဟာ မှနျပါတီနှဈခုကို ပူးပေါငျးဖှဲ့စညျးထားတာ ဖွဈတဲ့အတှကျ လာမယျ့ ရှေးကောကျပှဲမှာ ဒသေခံတှရေဲ့ မဲကို ပိုမိုရရှိမယျလို့ ယုံကွညျထားပါတယျ။ ပါတီကိုထောကျခံသူတှကေလညျး ဒသေတှငျးပေါငျးစညျးမှုကွောငျ့ အငျအားကွီး ပါတီတှကေို ကောငျးကောငျး ယှဉျပွိုငျနိုငျမယျလို့ ယူဆနကွေပါတယျ။ ဒသေတှငျး မှနျတိုငျးရငျးသား အငျအားစုတှနေဲ့ ပေါငျးစညျးထားတဲ့ မှနျညီညှတျရေးပါတီဟာ လာမယျ့ ရှေးကောကျပှဲအတှကျ အဆငျသငျ့ဖွဈနပေါပွီ။
ခြောငျးဆုံမွို့နယျ ဒသေခံ မငျးပွညျ့ဟနျထှနျးက မှနျညီညှတျရေးပါတီဟာ တိုငျးရငျးသားလူမြိုး အခှငျ့အရေး တှကေို ဆောငျ ရှကျပေးမယျလို့ ယုံကွညျထားသူပါ။ သံဖွူဇရပျမွို့ခံ ကိုတငျမြိုးအောငျက ပါတီကွီးတှထေကျ တိုငျးရငျးသားပါတီတှကေ ဒသေအကြိုးကို ပိုပွီးတော့ လိုလိုလားလား လုပျကိုငျမယျလို့ ယူဆပါတယျ။ ကြိုကျမရောမွို့ခံ ဒျေါသနျးဌေးကလညျး တိုငျးရငျးသားတှအေရေးကို တိုငျးရငျးသားပါတီကပဲ ဖျောဆောငျပေး နိုငျမယျလို့ ယူဆသူပါ။ မျောလမွိုငျမွို့ခံ မမဇှေနျဦး ကတော့ ပွညျသူတှရေဲ့ လိုအပျခကျြကို ဖွညျ့ဆညျးပေးနိုငျမယျ့ ပါတီနဲ့ ကိုယျစားလှယျလောငျးကို ရှေးခယျြဖို့ ဆုံးဖွတျထား ပါတယျ။
မှနျညီညှတျရေးပါတီရဲ့ ခြောငျးဆုံမွို့နယျ ပါဝငျတဲ့ အမြိုးသားလှတျတျော မှနျပွညျနယျမဲဆန်ဒနယျ ၂ မှာ ဝငျရောကျ ယှဉျပွိုငျ မယျ့ ကိုယျစားလှယျလောငျး ဦးသနျးနိုငျက ဒသေခံတိုငျးရငျးသားတှရေဲ့ ဆန်ဒသဘောထားတှကေို လှတျတျောထဲမှာ ထငျ ဟပျနိုငျဖို့ ဆုံးဖွတျထားပါတယျ။ တိုငျးရငျးသားဒသေတှမှော သကျဆိုငျရာဒသေခံတိုငျးရငျးသားပါတီတှအေနိုငျရရှိဖို့ ပွငျဆငျ နကွေတာဖွဈလို့ လာမယျ့ ရှေးကောကျပှဲဟာ တိုငျးရငျးသားဒသေတှမှော ပါတီကွီးတှနေဲ့ တိုငျးရငျးသား ပါတီတှေ ယှဉျပွိုငျမှု ပွငျးထနျနိုငျခွရှေိတယျလို့ သုံးသပျမှုတှလေညျးရှိပါတယျ။ မှနျနိုငျငံရေးပါတီနှဈခုနဲ့ ပွငျပမှနျနိုငျငံရေးအငျအားစုတှေ မှနျအမြိုးသားရေးတကျကွှလှုပျရှားသူတှပေါဝငျတဲ့ မှနျညီညှတျရေးပါတီဟာ ရှေးကောကျပှဲမှာ ၆၅ ယောကျ ဝငျရောကျ ယှဉျပွိုငျမှာပါ။ ကိုယျစားလှယျလောငျးတှထေဲမှာ အမြိုးသမီး ၁၇ ယောကျနဲ့ လူငယျ ၁၁ ယောကျ ထညျ့သှငျးထားတာတှရေ့ ပါတယျ။ https://www.rfa.org/burmese/news/mup-party-09242020035917.html
ရခိုငျပွညျနယျ ကြောကျတျောမွို့နယျ သရကျတပငျကြေးရှာမှာ မနကေ့ မနကျပိုငျးက တပျမတျောစဈကွောငျး တဈခုရှာထဲ ကိုဝငျလာပွီး အရပျသား ၁၀ ဦးကို ဖမျးဆီးချေါဆောငျသှားခဲ့ပါတယျ။ ဒီနမေ့နကျမှာတော့ အဲဒီ ၁၀ ဦးကို ရပျမိရပျဖတှရေဲ့ အာမခံနဲ့ပွနျလှတျပေးလိုကျတယျလို့ မိသားစုဝငျတှနေဲ့ ဒသေခံတှကေပွောပါတယျ။ ရခိုငျပွညျနယျ ကြောကျတျောမွို့နယျ သရကျတဈပငျကြေးရှာကို စကျတငျဘာလ ၂၃ ရကျ မနကေ့ မနကျပိုငျးက တပျမတျောစဈကွောငျးတဈခု ရှာထဲကိုဝငျလာပွီး ရှာသား ၁ဝ ဦးကို ဖမျးဆီးသှားခဲ့ပါတယျ။ သူတို့ကို တပျမတျော က ဖမျးဆီးစဈဆေးမေးမွနျးခဲ့ပွီး ဒီနေ့ နလေ့ယျမှာ ပွနျလှတျ ပေးလိုကျတာလို့ မိသားစုဝငျတှနေဲ့ ဒသေခံတှကေ RFA ကိုပွောပါတယျ။
ဖမျးဆီးခံခဲ့ရသူတှဟော အသကျ ၁၆ နှဈအရှယျကနေ ၄၀ ကြျောအရှယျရှိကွပွီး သရကျတပငျရှာသား ကြောငျးဆရာ ဦးမောငျမောငျဦး အပါအဝငျ ကိုးဦးနဲ့ စဖိုသားကြေးရှာတဈဦး ပါဝငျပါတယျ။ သူတို့ကို ရှာမှာရှိနစေဉျ တပျက ဖမျးဆီး ချေါဆောငျသှားတာဖွဈတယျလို့ လုံခွုံရေးအရ အမညျမဖျောလိုတဲ့ ရပျမိရပျဖတဈဦးက RFA ကိုပွောပါတယျ။ အခုလို စဈကွောငျးဝငျလာရငျ အရပျသားတှဖေမျးဆီးခံတာ၊ ရိုကျနှကျခံရတှဟော အမွဲလိုလိုဖွဈနတေဲ့အတှကျ ဒသေခံတှဟော စဈကွောငျးဝငျလာရငျကွောကျလနျ့ပွီး ထှကျပွေးနရေတယျလို့လညျး သူဆိုပါတယျ။ အဲဒီ ၁၀ ယောကျကို သရကျတပငျ ကြေးရှာနဲ့ တဈမိုငျလောကျအကှာမှာရှိတဲ့ ၃၇၆ တပျရငျးကို မနကေ့ ချေါဆောငျ သှားတာဖွဈပွီး ဒီနေ့ နလေ့ယျပိုငျးမှာပဲပွနျလှတျပေးလိုကျတာပါ။ သူတို့ကိုဖမျးဆီးထားစဉျ ရိုကျနှကျစဈဆေးမေးမွနျးခဲ့တာတှရှေိပွီး ပွနျလှတျလာသူတှဟောလညျး ကွောကျလနျ့နေ ကွတယျလို့ သူတို့နဲ့တှဆေုံ့ခဲ့တဲ့ လုံခွုံရေးအရအမညျမဖျောလိုတဲ့ ဒသေခံတဈဦးကပွောပါတယျ။
တပျဘကျက လုံခွုံရေးအရ AA ဘကျနဲ့ အဆကျသှယျရှိနိုငျတယျလို့ သံသယရှိသူတှကေို မကွာခဏ ချေါယူ စဈဆေးတာ တှရှေိကွောငျး၊ ရခိုငျလူမြိုးတှကေို လူမြိုးရေးအရ အငွိုးအတေး ပဈမှတျထားလုပျဆောငျတာမြိုး မရှိကွောငျး တပျမတျော သတငျးမှနျပွနျကွားရေးအဖှဲ့က ဗိုလျခြုပျဇျောမငျးထှနျးက RFA ကို မကွာခဏ ဖွကွေားလရှေိ့ပါတယျ။ ဒီသတငျးနဲ့ပတျသကျ လို့ကတော့ တပျမတျောဘကျကို RFA က အကွိမျကွိမျ ဆကျသှယျခဲ့ပမေဲ့ အခု သတငျးထုတျလှငျ့နတေဲ့အခြိနျထိ ဖုနျးလကျခံ မဖွကွေားသေးပါဘူး။ RFA က ရှိထားတဲ့စာရငျးတှအေရ ရခိုငျမွောကျပိုငျးမှာ ၂၀၁၉ နှဈဆနျးပိုငျးကနေ ပွီးခဲ့တဲ့ သွဂုတျလ ၈ ရကျနေ့ အထိ တဈနှဈကြျောကာလအတှငျးမှာ တပျမတျောက ဖမျးဆီးသှားပွီး စဈကွောရေးစခနျးမှာ စဈဆေးခြိနျ သဆေုံး သှားတဲ့အရပျသား ၃၀ ဦးအထိ ရှိပါတယျ။ https://www.rfa.org/burmes e/news/army-released-ten-civilians-0924 2020081117.html
တိုငျးလိုငျ (ရှမျးနီ) အမြိုးသားမြား ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးပါတီက မွဈကွီးနားမွို့နယျတှငျ မဲဆှယျစညျးရုံးမှုအဖွဈ စကျလှအေစငျး ၅၀ ကြျောဖွငျ့ ဧရာဝတီမွဈကွောငျးတဈလြှောကျ စကျတငျဘာ ၂၄ ရကျက လှညျ့လညျမှု ပွုလုပျခဲ့သညျ။ ထိုသို့ပွုလုပျရသညျ့ ရညျရှယျခကျြမှာ COVID-19 ကပျရောဂါကာလ ဖွဈသဖွငျ့ ရောဂါထိနျးခြုပျရေးအတှကျဖွဈပွီး ရှမျးနီတိုငျးရငျးသားအမြားစု သညျ မွဈကွောငျးတဈလြှောကျတှငျ လုပျကိုငျစားသောကျနထေိုငျကွသညျ့ တိုငျးရငျးသားအမြားစုဖွဈခွငျးကွောငျ့ စကျလှေ မြားဖွငျ့ မဲဆှယျစညျးရုံးကွခွငျးဖွဈကွောငျး ရှမျးနီလူငယျတာဝနျခံ ကိုစိုငျးအောငျမြိုးက ပွောကွားသညျ။ အဆိုပါစကျလှေ ဖွငျ့လှညျ့လညျမှုကို မွဈကွီးနားခတျခြိုဆိပျမှ မွဈကွီးနား ပွညျသူ့အားကစားကှငျး၊ မိုငျးနားကြေးရှာ၊ ခတျခြိုကြေးရှာတှငျ ရပျနားခဲ့ပွီး ရိုးရာယဉျကြေးမှုအက၊ ရိုးရာသိုငျးအကဖွငျ့ ဖြျောဖွမှေုမြား ပွုလုပျခဲ့သညျ။
ရှမျးနီလူငယျတာဝနျခံ ကိုစိုငျးအောငျမြိုးက “စကျလှတှေကေိုသုံးတာက ကြှနျတျောတို့တိုငျးရငျးသားတှေ အသုံးမြားလို့ဖွဈပါ တယျ။ ကြှနျတျောတို့ပါတီက အနိုငျအရှုံးထကျကို ရှေးကောကျပှဲမှာ ကြှနျတျောတို့ ရှမျးနီတိုငျးရငျးသားတှေ နိုးကွားလာ အောငျ လုပျဆောငျနိုငျတာ အမွတျဖွဈပါတယျ။ နိုငျငံကို အခဈြတဈခုတညျးနဲ့ တညျဆောကျလို့မရပါဘူး။ တိုငျးရငျးသားပါတီ တှေ လှတျတျောမှာရောကျမှ ငွိမျးခမျြးရေးတှေ၊ ဖကျဒရယျတှေ ရမယျလို့ယူဆပါတယျ။ တဈဦးတဈယောကျကောငျးနဲ့ ဖကျဒရယျဒီမိုကရစေီပနျးတိုငျကို လြှောကျလှမျးနိုငျမယျဆိုတာ လကျမခံပါဘူး” ဟု ပွောကွားသညျ။
တိုငျးလိုငျ (ရှမျးနီ) အမြိုးသား ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးပါတီသညျ ၂၀၂၀ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲတှငျ ကခငျြပွညျနယျအတှငျး ရှမျးတိုငျးရငျးသားနှငျ့ ဗမာတိုငျးရငျးသားရေးရာ ဝနျကွီးနရောအပါအဝငျ လှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျး ၃၁ ဦး၊ စဈကိုငျးတိုငျးတှငျ ရှမျးတိုငျးရငျးသားရေးရာဝနျကွီးတဈဦးအပါအဝငျ လှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျး ၁၀ ဦး ဝငျရောကျ ယှဉျပွိုငျမညျဖွဈသညျ။ https://news-eleven.com /articl e/193797
ကလေးသူငယျမြားပါ သဆေုံးမှု မွငျ့တကျလာပွီးနောကျ ရခိုငျပွညျနယျ၊ ကြေးရှာမြားအနီးတှငျ ဆကျလကျ ဖွဈပျေါနသေညျ့ စဈရေးတိုကျခိုကျမှုမြား အမွနျဆုံး အဆုံးသတျကွရနျ ကုလသမဂ်ဂ လူ့အခှငျ့အရေး ကြှမျးကငျြသူ သောမတျဈ အငျဒရူးဈက စကျတငျဘာလ ၂၂ ရကျနတှေ့ငျ တောငျးဆိုလိုကျသညျ။
အခွားသူမြား အပါအဝငျ ကလေးသူငယျမြား သဆေုံးမှုတှငျ အပွနျအလှနျ ပဈခတျမှုမြားကွောငျ့လော၊ တမငျပဈမှတျထား ခွငျးကွောငျ့လောဟု အပူတပွငျး မေးခှနျးထုတျစရာ ဖွဈလာနသေညျဟု မွနျမာနိုငျငံ လူ့အခှငျ့အရေး အခွအေနဆေိုငျရာ ကုလသမဂ်ဂ အထူးကိုယျစားလှယျ မစ်စတာ သောမတျဈ အငျဒရူးဈက ထုတျပွနျခကျြတှငျ ပွောထားသညျ။ “စဈရေး တိုကျခိုကျမှုတှေ အမွနျဆုံးရပျဖို့၊ ကုလသမဂ်ဂ အထှထှေေ အတှငျးရေးမှူးခြုပျ တောငျးဆိုထားတဲ့အတိုငျး (ကိုဗဈကပျရောဂါ ကာလအတှငျး) အပဈအခတျ ရပျစဲမှုတှေ အမွနျဆုံး လုပျဖို့လိုတယျ”ဟုလညျး သူကပွောသညျ။ ပွီးခဲ့သညျ့ သီးတငျး နှဈပတျအကွာက မွပေုံမွို့နယျတှငျ အမွောကျကညျြဆနျ ကမြှုကွောငျ့ ငါးနှဈအရှယျ ကလေးနှဈဦး သဆေုံးပွီး အခွားတဈဦး ဒဏျရာရခဲ့ကွောငျးလညျး သူ ဆိုသညျ။
မွနျမာနိုငျငံသညျ ရှေးကောကျပှဲကငျြးပရနျ ပွငျနသေညျ့ကာလအတှငျး COVID-19 ကပျရောဂါ ကာကှယျ တိုကျဖကျြရေး ပွငျးထနျသော စိနျချေါမှုကို ရငျဆိုငျနရေကွောငျး၊ ထို့ကွောငျ့ နိုငျငံတကာ အသိုငျးအဝိုငျးအနဖွေငျ့ ပွညျသူ့ကနျြးမာရေး ဆိုငျရာ ထောကျပံ့မှုမြား အမြားအပွား လုပျဆောငျပေးကွရနျ မစ်စတာ အငျဒရူးဈက တောငျးဆိုထားသညျ။ http://www .mizzimaburmese.com/article/73779
သြှမျးပွညျ အရှပေို့ငျး ရှသေတ်တုတူးဖျောသညျ့ အနီးတှငျနထေိုငျသညျ့ တာခြီလိတျခရိုငျ နားဟိုငျးလုံကြေးရှာရှိ နအေိမျထဲသို့ ရမြေားဝငျလာကွောငျး စုံစမျးသိရသညျ။ နားဟိုငျးလုံကြေးရှာ ပတျပတျလညျတှငျ ရှတေူးဖျောမှုမြားကို ပွုလုပျခဲ့ပွီး ကြေးရှာ၏ ရမွေောငျးမြား၊ ခြောငျးမြားကို သကျဆိုငျရာမှ လာရောကျကွညျ့ရှူ့ခွငျး၊ နုနျးမြားဆယျခွငျးမပွုလုပျသဖွငျ့ ရမြေားနအေိမျထဲသို့ ဝငျလာကွောငျး နားဟိုငျးလုံကြေးရှာ မှ သူနာပွု ဆရာမ နနျးလာ က သြှမျးသံတျောဆငျ့ကို ပွောသညျ။
“ နှဈတိုငျး ရကွေီးပမေယျ့ ဒီနှဈက မိုးခဏလေးပဲရှာသေးတယျ။ ရကေ အိမျထဲဝငျလာပွီ။ အရငျက ကမြ အိမျထဲ ရမေဝငျ ဘူး။ ဒီနှဈတော့ ရဝေငျတယျ။ မိုးသညျရငျတော့ ဒီထကျ ဆိုးနိုငျတယျ”ဟု နနျးလာ က ဆိုသညျ။ နားဟိုငျးလုံ ကြေးရှာ အနီးတှငျ ရှသေတ်တုတူးဖျောမှုကို ၂၀၀၇ ခုနဈတှငျ စတငျတူးဖျောခဲ့ရာ ဒသေခံပွညျသူမြားက ခတျေအဆကျဆကျ ကနျ့ကှကျ ခဲ့သျောလညျး ယနခြေိ့နျထိ ရပျဆိုငျးခွငျးမရှိခဲ့ပေ။“ တနှဈထကျတနှဈ ရကွေီးမှုက ပိုဆိုးလာတယျ။ အိမျမှေးတိရိစ်ဆာနျ ကွကျ တှလေညျး သကေုနျတယျ။ အိမျထဲရဝေငျတော့ ဘာမှ လုပျလို့မရဘူး” ဟု နနျးလာ က ပွောသညျ။
“ ကမြတို့ဆီ ကို ဘယျအစိုးရက မှလာမကွညျ့ဘူး။ သကျဆိုငျရာက လာမကွညျ့တဲ့အတှကျ ရှတေူးတဲ့ကုမ်ပဏီ တှေ လုပျခငျြတိုငျးလုပျဆိုတဲ့သဘောဖွဈနတေယျ။ ကုမ်ပဏီတှေ က မွောငျးတှေ နုနျးတှေ မဆယျပေးတော့ဘူး” ဟု နားဟိုငျးလုံ ဒသေခံ တဦး က ပွောသညျ။ လကျရှိမှာ မိုးရာသီ ဖွဈသဖွငျ့ ခြောငျးထဲရှိနုနျးမြားကို ဆယျပေးရနျ နှငျ့ မွောငျးမြားလာရောကျ ဖျောပေးခငျြကွောငျးလညျး နားဟိုငျးလုံ ဒသေခံမြားက ပွောသညျ။ နားဟိုငျးလုံကြေးရှာ တှငျ ရှတေူးဖျောမှု စီမံကိနျးမြား ကွောငျ့ လယျယာမွမြေား ဧကပေါငျးရာနှငျ့ခြီ ပကျြစီးခဲ့ပွီး၊ သဘာဝပတျဝနျးကငျြ ထိခိုကျပကျြစီးခွငျး၊ မွဈခြောငျးမြားတိမျ ကောခွငျးတို့ဖွဈခဲ့သညျ။ ထို့ပွငျ ရှတေူးဖျောမှုကို သှားရောကျကနျ့ကှကျရာတှငျလညျး ဒသေခံအမြိုးသားတဦး သဆေုံးခဲ့ပွီး၊ ထိုသဆေုံးမှုကွောငျ့ လကျရှိအခြိနျထိ တရားမြှတမှု မရရှိခဲ့သေးပေ။ http s://burmese.shannews.org/archives/18625
မှနျတိုငျးရငျးသားတှအေနနေဲ့ လာမယျ့ ရှေးကောကျပှဲမှာ မှနျညီညှတျရေးပါတီကိုသာ မဲပေးဖို့ မှနျလူငယျဆုံရပျအဖှဲ့က စကျတငျဘာလ (၂၂)ရကျနမှေ့ာ ထုတျပွနျခကျြထုတျပွီး တိုကျတှနျးလိုကျပါတယျ။ လကျရှိနိုငျငံရေးဖွဈစဉျမှာ တဈပါတီစနဈ ကွီးစိုးမှုကွောငျ့ တိုငျးရငျးသားတှရေဲ့ အခှငျ့အရေးတှေ ဆုံးရှုံးနတေယျလို့ မှနျလူငယျဆုံရပျအဖှဲ့က ဆိုထားပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ လှတျတျောအတှငျးမှာ မှနျပါတီရဲ့ ကိုယျစားလောငျးတှေ နရောရမှသာ မှနျတိုငျးရငျးသားတှရေဲ့ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျ ရေးကို ဆောငျရှကျနိုငျမှာ ဖွဈတယျလို့ မှနျလူငယျဆုံရပျအကွံပေးက ပွောပါတယျ။
“ တိုငျးရငျးသားပါတီတှေ အနိုငျရလာရငျ ကိုယျ့ကံကွမ်မာကို ကိုယျဖနျတီးခှငျ့တှေ ပိုပွီးတော့ မြားပွားလာမယျ။ တိုငျးရငျး သား အခှငျ့အရေးတှေ ပိုပွီး မြားပွားလာမယျလို့ ယုံကွညျတယျ”မှနျလူငယျဆုံရပျအကွံပေး ဉာဏျစိုကျရာမာနျက ပွောပါတယျ။ မှနျလူငယျကှနျယကျဟာ မှနျတိုငျးရငျးသားလူငယျတှနေဲ့ စုစညျးထားတာဖွဈလို့ သူတို့ရဲ့ တိုကျတှနျးခကျြ အတိုငျး ဆောငျရှကျသှားမယျလို့ ရေးဒသေခံ တဈဦးက ပွောပါတယျ။ “ သူတို့ရဲ့ ထုတျပွနျခကျြအတိုငျး မှနျလူငယျတှကေ တကျတကျကွှကွှ လိုကျနာကွတာကို တှရေ့တယျ သူ့ရဲ့ထုတျပွနျခကျြအတိုငျး တဈသှေးတဈသံတညျးလို့ ပွောလို့ရပါတယျ” လို့ ရေးဒသေခံ မငျးစိုးသိနျးက ပွောပါတယျ။
မှနျလူငယျကှနျယကျဟာ ပွညျပနိုငျငံတှအေပွငျ မှနျ ၊ ကရငျ ၊ တနင်ျသာရီ ၊ ရနျကုနျတိုငျးနဲ့ ပဲခူးတိုငျးတို့က မှနျလူငယျတှေ စုစညျးထားတဲ့ ကှနျယကျ ဖွဈပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှဈမှာတော့ မှနျပွညျနယျ ဘီးလူးကြှနျး ခြောငျးဆုံတံတားကို ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးတံတားလို့ အမညျပွောငျးလဲခဲ့တဲ့အပျေါ သောငျးနဲ့ခြီတဲ့ မှနျလူထုက ကနျ့ကှကျကွောငျး အစိုးရအပျေါ ဆန်ဒပွခဲ့ပါတယျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-75720
ရခိုငျအမြိုးသားပါတီ (ANP) နှငျ့ ရခိုငျဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျပါတီ (ALD) ၏ မဲဆှယျစညျးရုံးရေး ရုပျမွငျသံကွားမိနျ့ခှနျးမြားကို ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ (UEC) က ပွငျဆငျဖွတျတောကျခဲ့ကွောငျး အဆိုပါ ပါတီမြားမှ တာဝနျရှိသူမြားက ပွောသညျ။
ANP ပါတီ၏ မဲဆှယျစညျးရုံးရေးမိနျ့ခှနျးတှငျ ‘ပွညျတှငျးစဈ’ ဆိုသညျ့ ‌ဝေါဟာရအစား ‘လကျနကျကိုငျပဋိပက်ခ’ ဟုလညျး ကောငျး၊ ALD မိနျ့ခှနျးတှငျ ‘ပွညျတှငျးစဈ’၊ ‘စဈမီး’ စသညျ့စကားလုံးမြားကို ‘ပွညျတှငျးပဋိပက်ခ’ ဟု UEC က ပွငျဆငျခဲ့ပွီး အခြို့သောစကားလုံးမြားကို လုံးဝဖွတျတောကျခဲ့သညျဟု ဆိုသညျ။ “စဈရေးပဋိပက်ခနှငျ့ ကိုဗဈနိုငျးတငျးကပျရောဂါ ဖွဈပှား နသေောကွောငျ့ ရခိုငျပွညျသူမြား ရှေးကောကျပှဲကို စိတျမဝငျစားကွကွောငျး၊၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲတှငျ ANP အနဖွေငျ့ ပွညျနယျအစိုးရဖှဲ့စညျးခှငျ့ မရရှိခဲ့ခွငျးမှာ ၂၀၀၈ ဖှဲ့စညျးပုံ၏အကပျြအတညျးကွောငျ့” ဆိုသညျ့ ရေးသားခကျြမြားကို UEC က ဖွတျတောကျခဲ့သညျဟု ၎င်းငျးက ပွောသညျ။ ထိုသို့ ဆငျဆာဖွတျတောကျခွငျးကို မကွိုကျနှဈသကျသျောလညျး လကျရှိ အခွအေနအေရ အပွငျထှကျ မဲဆှယျစညျးရုနျးရနျ အခကျအခဲရှိနသေောကွောငျ့ ရုပျသံထုတျလှငျ့မညျအစီအစဉျတှငျ ပါဝငျခဲ့ သညျဟု ဦးသာထှနျးလှက ပွောသညျ။
“ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောရရငျ အရငျ ၂၀၁၀- ၂၀၁၅ ခတျေကထကျ တငျးကပျြလာတယျလို့ မွငျတယျ။ အဲဒီတုနျးကလညျး တဈခြို့ဟာတှေ ဒို့တာဝနျအရေးသုံးပါးကို မထိခိုကျစရေ ဘာညာပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲဒီတုနျးက။ ပွညျသူ့အစိုးရ လကျထကျ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအနနေဲ့ ဖွလြှေော့မှုဘကျကိုမသှားဘဲ ပိုပွီးတငျးကပျြတဲ့ဘကျကို ဇောငျးပေးတဲ့ပုံစံမြိုးရှိ တယျလို့ သုံးသပျလို့ရတယျ” ဟုလညျး ၎င်းငျးက ပွောသညျ။
ALD ပါတီ၏ မဲဆှယျမိနျ့ခှနျးပါ စကားလုံးမြား ပွငျဆငျခံခဲ့ရခွငျးကို သဘောမတူသျောလညျး ပါတီမူဝါဒမြားကို ခပြွရမညျ့ အခှငျ့အရေးဖွဈသောကွောငျ့ မိနျ့ခှနျးပွောရနျဆုံးဖွတျထားကွောငျး ပါတီအထှထှေအေတှငျးရေးမှူး ဦးမြိုးကြျောက ပွော သညျ။ “ပါတီတှရေဲ့အာဘျောကို ဖွတျတာကတော့ မလုပျသငျ့ဘူး။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ လှတျလပျစှာထုတျ ဖျောပွောဆို ခှငျ့ ရှိရမယျလေ။ နိုငျငံရေးပါတီဖွဈတဲ့အတှကျ သူတို့ရဲ့အယူအဆတှကေို ထုတျဖျောခှငျ့ပေးရမယျလို့ မွငျတယျ။ အခုလို ဖွတျတယျဆိုတာက ဟိုခတျေတုနျးကဆိုတော့ စဈအစိုးရသုံးနတေဲ့ ပုံစံမြိုးပေါ့ ”ဟု ၎င်းငျးက ဆိုသညျ။ ANP ပါတီ၏ မဲဆှယျ စညျးရုံးရေးမိနျ့ခှနျးကို စကျတငျဘာ ၂၄ တှငျလညျးကောငျး၊ ALD ပါတီနှငျ့ ရခိုငျ့ဦးဆောငျပါတီ (AFP) ၏ မိနျ့ခှနျးမြားကို အောကျတိုဘာ ၁ တှငျလညျးကောငျး နိုငျငံပိုငျရုပျမွငျသံကွားမှ ထုတျလှငျ့မညျဟု သိရသညျ။ နိုငျငံရေးပါတီမြား၏ မဲဆှယျ မိနျ့ခှနျးမြားကို နိုငျငံပိုငျရုပျသံလိုငျးဖွဈသညျ့ မွနျမာ့အသံနှငျ့ရုပျမွငျသံကွား (MRTV) က စကျတငျဘာ ၈ မှ နိုဝငျဘာ ၆ အထိ အလှညျ့ကြ ထုတျလှငျ့ပေးမညျဖွဈသညျ။ https://www.myanmar-now.org/mm/news/4555
ကရငျရိုးရာဒုံးအကကို အမြိုးသားဒွပျမဲ့ယဉျကြေးမှု အမှအေနှဈအဖွဈ ကုလသမဂ်ဂ၏ ပညာရေး၊ သိပ်ပံနှငျ့ ယဉျကြေးမှု ဆိုငျရာအဖှဲ့အစညျး(UNESCO)က အသိအမှတျပွုရေး တငျသှငျးရနျ ကွိုးပမျးနကွေသျောလညျး ပွငျဆငျနဆေဲအခြိနျ တှငျ ဘဏ်ဍာရေး မလုံလောကျမှုမြားနှငျ့ ရငျဆိုငျနရေကွောငျး သိရသညျ။
ဒုံးကကွိုးကကှကျဆပျကျောမတီတှငျ မကျြမှောကျခတျေယဉျကြေးမှုဒုံး၊ ကိုလိုနီခတျေရှိ (မောငျ့ရို့) ဒုံးနှငျ့ ကြှဲဒုံး စသညျ့ ဒုံး (၃)မြိုးကို စခနျးသှငျးလကေ့ငျြ့ကာ အကောငျအထညျဖျောရမညျဖွဈပွီး ဆပျကျောမတီဖှဲ့ကာ တဈဖှဲ့ ၁၀ သိနျးကပျြစီသာ အသုံးပွုရသညျ့အတှကျကွောငျ့ လောကျငှမှုမရှိကွောငျး ဒုံးဆရာတဈဦးက ပွောသညျ။“ကုနျကစြရိတျက ဒုံးသမားတှရေဲ့ စားသောကျ၊ သှားလာ၊ ဆငျယငျမှုတှအေတှကျပဲလေ။ အခွားမှာ သုံးဖို့မဟုတျပါဘူး။ ပွညျနယျဒုံးပွိုငျပှဲအတှကျ ဒုံးတဈဖှဲ့ ကိုတောငျ သိနျး ၁၈၀ နဲ့ ၂၀၀ အကွားမှာ သုံးရတယျ။”ဟု မကျြမှော ကျခတျေဒုံးနှငျ့ ကိုလိုနီခတျေ(မောငျရို့)ဒုံးကို ဦးဆောငျ သငျကွားနသေညျ့ ဒုံးဆရာ စောခနောငျထှနျ့က ပွောသညျ။
“အခကျအခဲ အမြားကွီးရှိတယျ။ ပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့က ကပျြ သိနျး ၂၀၀ ခပြေးမယျလို့ပွောတယျ။ ခု သိနျး ၅၀ ပဲ ခပြေး သေးတယျ။ Covid ရောဂါကွောငျ့လညျး ကှငျးဆငျးဖို့မလှယျဘူး။ ကှငျးဆငျးဖို့လညျး မလောကျဘူး။ ဒုံးသငျမယျ ဆိုလညျး မလောကျဘူး။ ရကျကလညျး နီးလာပွီး။ မမှီမကမျးဖွဈမှာ အရမျး စိုးရိမျတယျ။”ဟု ကအေိုငျစီသို့ စကျတငျ ဘာ ၂၁ ရကျ က ပွောသညျ။ ကပျြသိနျး ၆၀၀ ခနျ့ ကုနျကမြညျဟု လြာထားသော ယခုဒုံးအကတှငျ ပွညျနယျအစိုးရအနဖွေငျ့ ကပျြသိနျး ၂၀၀ သို့မ ဟုတျ ၃၀၀ အပွညျ့အဝ ခပြေးရနျ အလငျြအမွနျလိုအပျနပွေီး ကနျြငှမြေားအတှကျ အခွားသော အလှူရှငျမြားကို ရှာ သှားရဦးမညျဖွဈကွောငျး ဒုံးအကပညာရှငျ ဆရာစောမွငျ့သူက ဆကျပွောသညျ။ http://kicnews.org/202 0/09/une sco%e1%80%90%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%99%e1%80%8a
ပွီးခဲ့တဲ့ ပွညျထောငျစုငွိမျးခမျြးရေးညီလာခံတှမှော စှမျးအငျကဏ်ဍကို ဆှေးနှေးဖို့ ခေါငျးစဉျအတိအကြ ခမြှတျထားခွငျးမရှိ ပမေယျ့ ဒါဟာငွိမျးခမျြးရေးကို ထိခိုကျစနေိုငျတဲ့အတှကျ ငွိမျးခမျြးရေးဖွဈစဉျမှာ ထညျ့သှငျးဆှေးနှေးသငျ့တယျလို့ တိုငျးရငျး သားလူမြိုးရေးရာစငျတာ(ENAC)ရဲ့ အမှုဆောငျဒါရိုကျတာ ဒေါကျတာ ပညာမှနျက ပွောပါတယျ။“အခု အကွီးစား စီမံကိနျး တှရှေိတဲ့နရောက လကျနကျကိုငျပဋိပက်ခဖွဈတဲ့နရောဖွဈတဲ့အတှကျကွောငျ့ အကယျ၍ ဒီစီမံကိနျးတှကေို ဆကျလကျလုပျ ဆောငျသှားမယျဆိုရငျ ဒါက လကျနကျကိုငျပဋိပက်ခဖွဈနိုငျတယျ။ ဒါအတှကျ ကွောငျ့ပဲ ငွိမျးခမျြးရေးဖွဈစဉျမှာ ဒီကိစ်စတှကေို ဆှေးနှေးပွီးမှသာ ဒီစီမံကိနျးတှကေို လုပျဆောငျသှားဖို့ လိုတာပေါ့နျော။ အကယျ၍ ဘာမှ သဘောတူညီခကျြမရပဲနဲ့ ဒီစီမံကိနျး တှကေို ဆကျလကျပွီး လုပျဆောငျသှား မယျဆိုရငျ ခုဏက ပွောသလို ကနြျောတို့ မွနျမာပွညျရဲ့ ငွိမျးခမျြးရေးကို ထိခိုကျနိုငျတာပေါ့နျော။”ဒီပွောဆိုခကျြကို စကျတငျဘာ ၂၂ ရကျနကေ့ အှနျလိုငျးပျေါမှာ ပွုလုပျခဲ့တဲ့ “စိနျချေါမှုမွငျ့မားနေ သညျ့ မွနျမာနိုငျငံ၏ ဗဟိုခြုပျကိုငျထားသော စှမျးအငျစီမံခနျ့ခှဲမှုပုံစံ”နဲ့ ပတျသကျတဲ့ သုတသေနစာတမျးမိတျဆကျပှဲမှာ ပွောဆိုခဲ့တာပါ။
မွနျမာနိုငျငံရဲ့ လြှပျစဈနဲ့ စှမျးအငျဆိုငျရာစီမံကိနျးတှဟော နိုငျငံအတှငျးရှိ လကျနကျကိုငျပဋိပက်ခတှနေဲ့ မြားစှာ ဆကျနှယျ နပွေီးတော့ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေးအပျေါ သကျရောကျမှုတှရှေိနတေယျလို့ ၎င်းငျးတို့ရဲ့ သုတသေန အစီရငျခံစာမှာ ဖျောပွ ထားပါတယျ။ မွနျမာ့စှမျးအငျပငျမ စီမံခကျြအရ အကောငျအထညျဖျောတညျဆောကျသှားမယျ့ အကွီးစားရအေားလြှပျစဈ စကျရုံအမြားစုရဲ့ တညျနရောတှဟော တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျးတှရေဲ့ ထိနျးခြုပျနယျမွေ (သို့) လှုပျရှားတဲ့ နယျမွတှေမှော တညျရှိနတောပါ။
ကယား(ကရငျနီ)ပွညျနယျမှာ လြှပျစဈဓါတျအား မီဂ်ဂါဝပျ ၄၀၀၀ ကြျောထုတျလုပျဖို့ရညျရှယျထားတဲ့ ရှာသဈရကောတာ စီမံကိနျးနဲ့ ပတျသကျပွီး ၂၀၁၂ ခုနှဈမှာ အစိုးရနဲ့ KNPP တို့အကွား Bilateral Ceasefire Agreement (နှဈဘကျအကွား အပဈအခတျရပျစဲရေး သဘောတညီခကျြ) ထဲမှာ သဘောတူညီခကျြတဈခု အနနေဲ့ အကွီးစားစီမံကိနျးလုပျငနျးတှကေို ပွညျနယျအတှငျးမှာ ဒသေတညျငွိမျအေးခမျြးမှုနဲ့ တရားဥပဒစေိုးမိုးမှု မရှိသေးရငျ ရပျတနျ့ထားဖို့ သဘောတူထားတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဒီသဘောတူညီခကျြအရ သုံးလအတှငျး အရပျဖကျအဖှဲ့အစညျးက ကိုယျစားလှယျတှနေဲ့ သတငျးမီဒီယာ တှကေ ဒသေခံတှနေဲ့ တှဆေုံ့မေးမွနျးဖို့နဲ့ ကှငျးဆငျးလလေ့ာခဲ့တယျလို့ ကရငျနီအမြိးသားတိုးတကျရေးပါတီ (KNPP)ရဲ့ ဒုဥက်ကဌ ခူးဦးရယျက အဆိုပါ သုတသေနအစီရငျခံစာ မိတျဆကျပှဲမှာ ပွောဆိုပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံရဲ့ စှမျးအငျစီမံအုပျခြုပျမှုဟာ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေးကို ဦးတညျနခွေငျးထကျ နိုငျငံအတှငျး နှဈ ၇၀ နီးပါဖွဈပှား နတေဲ့ ပွညျတှငျးစဈကို ပိုပွီးသကျဆိုးရှညျရေးကိုသာ ဦးတညျနတောကို တှရေ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ပွညျတှငျး ငွိမျးခမျြးရေးကို ဦးတညျတဲ့ လြှပျစဈနဲ့ စှမျးအငျ စီမံကိနျးတှကေို ရေးဆှဲခမြှတျအကောငျ အထညျဖျောသငျ့တယျလို့ အစီခံစာ က ဆိုပါတယျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-75721
မွနျမာနိုငျငံအတှငျး လတျတလော ကိုဗဈရောဂါကူးစကျမှုနှုနျးတိုးလာသဖွငျ့ မွနျမာနိုငျငံ ဘုရားသုံးဆူမွို့နှငျ့ ထိုငျးနိုငျငံ ဘုရားသုံးဆူကြေးရှာတို့ ကုနျပစ်စညျးမြားအပွနျအလှနျဖွတျသနျးနမှေုကို အောကျတိုဘာ ၅ ရကျအထိ ပိတျထားလိုကျကွောငျး ကနျခနြပူရီပွညျနယျအုပျခြုပျရေးမှူးက စကျတငျဘာ ၂၂ ရကျနေ့ အမိနျ့ထုတျပွနျခဲ့သညျ။
ဘုရားသုံးဆူဒသေ နယျစပျတလြှောကျရှိ နှဈနိုငျငံမလှယျပေါကျမြားနှငျ့ တရားမဝငျစဈဆေးရေးဂိတျမြားမှတဆငျ့ လူနှငျ့ မျောတျောယာဉျ ဝငျထှကျပေါကျနရော လမျးကွောငျးအားလုံးကို ပွီးခဲ့သညျ့ သွဂုတျလ ၂၈ ရကျနကေ့ ထိုငျးတို့ စတငျပိတျပငျ ထားသျောလညျး နှဈဖကျကုနျစညျမြားပွတျလပျမှုမဖွဈပျေါစရေေး ကုနျပစ်စညျးမြားသယျဆောငျရနျ နားလညျမှုဖွငျ့ခှငျ့ပွု ထားခဲ့ကွောငျး စုံစမျးသိရှိရသညျ။ ထို့အပွငျ မွနျမာနိုငျငံ ဘုရားသုံးဆူမွို့က ကိုဗဈစောငျ့ကွညျ့ရေးစငျတာ Quarantine သညျ ထိုငျးနိုငျငံ ဘုရားသုံးဆူကြေးရှာ လူနရေပျကှကျနှငျ့ အလှနျနီးကပျနေ သဖွငျ့ မွနျမာနိုငျငံတဝနျး ရောဂါကူးစကျမူ ရာဂဏနျးအထကျ မွငျ့တကျလာသောကွောငျ့ အဆိုးဆုံးဖွဈလာမညျ့အခွအေနမြေားအတှကျ ကွိုတငျ ကာကှယျရေး လုပျဆောငျခွငျးဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
ထိုငျးကနျြးမာရေးဌာနကိုအကွောငျးမကွားပဲ နယျစပျကြေးရှာရှိ လူနာမြားကို သယျဆောငျလာခွငျး၊ ရှပွေ့ောငျးမွနျမာနိုငျငံ သားမြားအား လကျခံဆေးကုသပေးခွငျးတို့ လုပျဆောငျခှငျ့မပွုကွောငျး၊ ထိုငျးနိုငျငံဘကျခွမျးတှငျ ဖှငျ့ထားသညျ့ အလုပျရုံ မြား၊ စီးပှားရေးလုပျငနျးမြား၊ ဈေးဆိုငျမြားနှငျ့ ခရီးသှားလုပျငနျးမြား အားလုံး ပိတျထားရမညျဖွဈကွောငျး အမိနျ့ထုတျပွနျ ခကျြတှငျ ပါရှိသညျ။ အမိနျ့ကိုခြိုးဖောကျသူ (သို့မဟုတျ) ပကျြကှကျသူမညျသူမဆို ကူးစကျတတျသောရောဂါမြား အကျ ဥပဒေ ပုဒျမ ၅၂ ၊ ပွညျသူ့စီမံခနျ့ခှဲမှုဆိုငျရာအရေးပျေါအမိနျ့ ပုဒျမ (၁၈) B.E. 2558 အရ တဈနှဈထကျမပိုသော ထောငျဒဏျ ဖွဈစေ၊ ဘတျငှတေဈသိနျးထကျ မပိုသောငှဒေဏျဖွဈစေ အရေးယူမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ https://www.bnionli ne.net/mm/news-75733
နပွေညျတျောတှငျ ပိုးတှခေဲ့သောလူနာ တညျးခိုခဲ့သညျ့ မွဈကွီးနားရှိ အေးခမျြးသာ အဆငျ့မွငျ့တညျးခိုခနျးနှငျ့ပတျသကျပွီး လာရောကျတညျခိုခဲ့သူ ၂၀ ဦးကို မွဈကွီးနားမွို့ရှိ သတျမှတျထားသညျ့ Quarantine Center တှငျ ထားရှိပွီဖွဈကွောငျး မွဈကွီးနားအုပျခြုပျရေးမှူး ဦးသနျးဝငျးထံမှ သိရသညျ။ အဆိုပါ တညျးခိုခနျးတှငျ စကျတငျဘာလ ၁၆ ရကျနမှေ့ ၂၀ ရကျနေ့ ထိ လာရောကျတညျးခိုခဲ့သူမြားကို Quarantine ထားရှိခွငျးဖွဈကွောငျး ဆိုသညျ။
“ ဒီဖွဈစဉျနဲ့ပတျသကျပွီး မနကေ့မွို့နယျရဲမှူး ကိုယျတိုငျဖုနျးဆကျလာပါတယျ။ ၁၆ ရကျနကေ့ အငျဂနျြးယနျက ရဲတပျဖှဲ့ဝငျ ဒုတပျကွပျတဈဦးက နပွေညျတျော ရဲတပျရငျး (၁၈) ပွောငျးရှတေ့ာဝနျထမျးဆောငျဖို့ အပွောငျးအရှလေု့ပျကွတဲ့ခါမှာ မွဈကွီးနားမှာ ၁၆-၁၇ နှဈည တညျးခိုခနျးမှာ တညျးသှားကွတယျ။ ၁၈ ရကျနထှေ့ကျသှားကွတယျ။ နပွေညျတျောရောကျတဲ့ ခြိနျမှာ ရဲတပျရငျး ၂၀ မှာ Q ဝငျပွီး ဆေးစဈလိုကျတဲ့ခြိနျမှာဘဲ Positive တှသှေ့ားတာဖွဈတဲ့အတှကျ အဲသတငျးရတာနဲ့ အေးခမျြးသာတညျးခိုခနျးသှားပွီးတော့ စုံစမျးထားခွငျးဖွဈတယျ”ဟု မွဈကွီးနားမွို့နယျ အုပျခြုပျရေးမှူး ဦးသနျးဝငျး ပွော သညျ။
ယငျးတညျးခိုခနျးအား စကျတငျဘာလ ၂၃ ရကျနတှေ့ငျ ကနျ့သတျနယျမွဖွေဈသတျမှတျလိုကျပွီး ၁၆ ရကျနမှေ့ ၂၀ ရကျနေ့ တညျးခိုခဲ့သညျ့ ဧညျ့သညျ ၇ ဦး အပါအဝငျ ဝနျထမျး ၇ ဦးအား ယငျးတညျးခိုခနျးတှငျ Quarantine ထားရှိပွီး၊ ပိုးတှေ့ လူနာ အား လိုကျလံပို့ဆောငျပေးခဲ့သညျ့ ခရိုငျရဲတပျဖှဲ့မှ ဝနျထမျး ၃ဦးကိုမူ မွဈကွီးနားတက်ကသိုလျတှငျ ထားရှိပွီး အငျဂနျြးယနျ ကားဂိတျမှ ဝနျထမျး ၂ ဦးလညျး Q ထားရှိကွောငျး ၎င်းငျးက ဆကျပွောသညျ။ https://burmese.kachinnews.com/2020 /09/24/%e1%80%95%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1
နှငျးဆီနီပါတီလို့ လူသိမြားတဲ့ ညီညှတျသောဒီမိုကရကျတဈပါတီ(UDP) အနနေဲ့ ပါတီဥက်ကဋ်ဌ ဦးကြျောမွငျ့ရဲ့ နောကျကွောငျး ရာဇဝငျကို ရှငျးရှငျးလငျးလငျးမခပြွရငျ ပါတီကနနေုတျထှကျပွီး တဈသီးပုဂ်ဂလအနနေဲ့ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမယျလို့ ပါတီ ကိုယျစားလှယျလောငျး တဈဦးက ပွောပါတယျ။
၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲမှာ ကခငျြပွညျနယျ၊ ဝိုငျးမျောမွို့နယျ၊ မဲဆန်နနယျအမှတျ(၁)ကနေ UDP ပါတီကိုယျစားပွုဝငျပွိုငျဖို့ ပွငျဆငျနတေဲ့ ကိုယျစားလှယျလောငျး ဦးဂဲနကျ(ဈ)က ပွောကွားလိုကျတာပါ။“လူထုတှကွေားထဲမှာ တောငျးဆိုလာရငျ ရှငျးပွရမယျ့တာဝနျက ကနြေျာ့မှာ ရှိတယျ။ ရှငျးပွပေးဖို့ရာတောငျးဆိုပါတယျ။ တိကခြိုငျမာပွီး ပွတျပွတျသားသားမရှငျးပွဘူး ဆိုရငျ ထှကျမယျ”လို့ ဦးဂဲနကျ(ဈ)ကပွောပါတယျ။ ဦးဂဲနကျဈဟာUDP ပါတီရဲ့ ကခငျြပွညျနယျ ပွနျကွားရေးတာဝနျခံ အဖွဈ တာဝနျယူထားသလို တရားလှတျတျောရှနေ့တေဈဦးဖွဈကာ ကခငျြပွညျနယျအတှငျးက သိမျးဆညျးခံလယျယာ မွတှေအေရေးကို ဆောငျရှကျပေးနသေူ ဖွဈပါတယျ။
ပါတီဥက်ကဋ်ဌ ဖွဈသူ ဦးကြျောမွငျ့ရဲ့ နောကျကွောငျးရာဇဝငျ အခွအေနတှေကေို ပွညျတှငျးမီဒီယာတခုက ထုတျဖျောရေးသား ဖျောပွခဲ့အပွီးမှာ အခုလို ဖွဈပျေါလာတာ ဖွဈပါတယျ။ ဦးကြျောမွငျ့ (ချေါ) ဦးဇခုနျဇုနျးဆောငျ ခေါငျးဆောငျတဲ့ ညီညှတျသော ဒီမိုကရကျတဈပါတီ(UDP)ဟာ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲမှာ တဈနိုငျငံလုံး မဲဆန်ဒနယျပေါငျး ၁၁၃၁ နရောဝငျပွိုငျမှာဖွဈပွီး အနျအယျလျဒီပါတီပွီးရငျ ဒုတိယမွောကျ မဲဆန်ဒနယျ အမြားဆုံး ဝငျပွိုငျမယျ့ပါတီဖွဈပါတယျ။ http://burmese.dvb.no /archives/412291
ကယားပွညျနယျအတှငျး Quarantine ဝငျရောကျသူမြား အနဖွေငျ့ သတျမှတျရကျအပွညျ့ မနဘေဲ ထှကျပွေးခွငျးအပါအဝငျ ကှာရနျတငျး စငျတာမြားမှ သတျမှတျထားသော စညျးကမျးခကျြမြားကို မလိုကျနာပါက သဘာဝ ဘေးအန်တရာယျဆိုငျရာ စီမံခနျ့ခှဲရေး ဥပဒနှေငျ့ အရေးယူသှားမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ စကျတငျဘာလ ၂၁ ရကျက လားရှိုးမွို့မှ လှိုငျကျောမွို့သို့ ပွနျလညျဝငျရောကျလာပွီး လှိုငျကျောမွို့ရှိ community based facility quarantine center တှငျဝငျရောကျနသေညျ့ နှားလဝိုးကြေးရှာအုပျစု ထီလောခူကြေးရှာမှ အမြိုးသားတဈဦးသညျ လုံခွုံရေး ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြားနှငျ့ ကနျြးမာရေးဝနျထမျး မြားကို ရနျပွုပွီး ထှကျပွေးခဲ့သညျ့ အတှကျ သဘာဝဘေးအန်တရာယျဆိုငျရာ စီမံခနျ့ခှဲရေး ဥပဒေ၂၆/၂၉ ဖွငျ့အရေးယူထား ကွောငျး သိရသညျ။
မွနျမာနိုငျငံရှိ တိုငျးဒသေကွီးနှငျ့ ပွညျနယျမြားတှငျ ကိုဗဈ-၁၉ ကူးစကျခံရမှုမြား ရှိနသေျောလညျး ကယားပွညျနယျမှာမူ လကျရှိအခြိနျအထိ တဈခုတညျးသော ကိုဗဈကငျးစငျပွညျနယျအဖွဈ ရပျတညျ လြှကျရှိသညျ။ “ ပွညျနယျအစိုးရက ထုတျပွနျ လိုကျတာဟုတျပါတယျ။ Quarantine မဝငျကတညျးက ဘာတှလေုပျရမယျ၊ ဘာတှေ ဆောငျ ရှကျရမယျ ဆိုတာတှကေို ရှငျးပွပွီးသားဖွဈတယျ။ အရငျတုနျးကတော့ ကူးစကျနဲ့စှဲပါဆိုပွီး တဈနိုငျငံလုံးကို ညှနျကွား ထားတာရှိတယျ။ ဒုတိယလှိုငျးဖွဈတဲ့အခြိနျမှာကူးစကျနဲ့မစှဲနဲ့တော့ တဈပွေးညီ သဘာဝဘေး အန်တရာယျနဲ့စှဲပါ ဆိုပွီး ပွနျညှနျကွားထားတာပါ။ လုံခွုံရေးကိုလညျး ပိုပွီးတော့ ဆောငျရှကျထား ပါတယျ” ဟု လှိုငျကျောမွို့နယျ အထှထှေအေုပျခြုပျရေးဦးစီးဌာန ဦးစီးမှူး ဦးရနျနိုငျဝငျးက မဇ်ဈိမ သို့ပွောသညျ။
ကယားပွညျနယျအတှငျး အဝငျအထှကျစောငျ့ကွညျ့နသေညျ့ ဂိတျ ၁၀ခုခနျ့ရှိပွီး လှိုငျကျောမွို့နယျအတှငျး စောငျ့ကွညျ့သညျ့ ဂိတျ ၃ခုရှိကွောငျး သိရသညျ။ ဘီလူးခြောငျးအတှငျးတှငျလညျး ရကေငျး ၂၄နာရီစောငျ့ကွညျ့ပွီး လုံခွုံရေးကို အထူးကွပျမတျနကွေောငျး သိရသညျ။ http://www.mizzimaburmese.com/article/73741
၂၈။ ခငျြးပွညျနယျတှငျလှတျတျောနရောစုစုပေါငျး ၃၈ နရောဝငျပွိုငျမညျ့ ညီညှတျသောဒီမိုကရကျတဈပါတီ(UDP)အနဖွေငျ့ ၇၅% အနိုငျရ ရှိရနျယုံကွညျမှုရှိဟုဆို
ခငျြးပွညျနယျရှိ လှတျတျောနရောစုစုပေါငျး ၃၉ နရောတှငျ ၃၈ နရောဝငျပွိုငျမညျ့ UDP Party အနဖွေငျ့ ရှေးကောကျပှဲတှငျ ၇၅ ရာခိုငျနှုနျးအနိုငျရှိရနျယုံကွညျကွောငျး UDP ပါတီခငျြးပွညျနယျတာဝနျခံ မှပွောသညျ။“ကြှနျတျောတို့ကတော့ ၇၅% ကတော့ သခြောသလောကျဖွဈပွီ အငျအားက ကြှနျတျောတို့စုဆောငျးပွီးသား အငျအားအရဆိုရငျ အုပျစုတဈခုမှာ ဒီလအထိ ၁၅၀ အုပျစုတဈခုမှာရှိပွီးသားဆိုတော့ ၇၅ ရာခိုငျနှုနျးကတော့ အောငျမွငျပွီးသားလို့ ကြှနျတျောတို့ယူဆပါတယျဗြ”ဟု UDP ပါတီခငျြးပွညျတာဝနျခံ ဦးသှနျခမျကပျ မှ ပွောသညျ။ UDP ပါတီအနဖွေငျ့ ကိုယျစားလှယျလောငျးမြား ကိုယျတိုငျ နရောတိုငျးမသှားခိုငျးပဲ ကြေးရှာတိုငျးတှငျပါတီရေးရာ ကျောမတီမြားမှ တဈအိမျတကျ တဈအိမျဆငျးကှငျးဆငျးပွီး ကွိုးစား နရေသညျ့အခွနေဖွေဈကွောငျးလညျး သိရသညျ။
ခငျြးပွညျနယျအတှငျး ရှေးကောကျပှဲဝငျပွိုငျမညျ့ပါတီမြားနှငျ့ပတျသကျပွီး ” CNLD က ၃၆နရော၊နောကျ UDPက ၃၈ နရော ပေါ့နျော၊USDPက ၃၆နရော၊ NLDကတော့ ၃၉နရော၊ အမှနျတော့ UDPက ၃၉ယောကျလုံးတငျတယျ၊ဒါပမေယျ့ တဈယောကျ က သူ့ဟာနဲ့သူ ပွနျနှုတျထှကျတယျ၊”ဟု ခငျြးပွညျနယျရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ အတှငျးရေးမှူး ဦးလငျးကြျောမှ ပွောသညျ။ အနိုငျရရှိပါက UDP လမျးစဉျအတိုငျး ပါတီရညျမှနျးခကျြအတိုငျး ကတိပေးထားသညျ့အတိုငျး အကောငျအထညျဖျောမညျ ဖွဟျပွီး ပွညျသူမြား၏ အခွခေံဝငျငှရေရှိရေးလုပျဆောငျရနျ အဆငျသငျ့ဖွဈနသေညျဟု လညျးသိရသညျ။
ညီညှတျသောဒီမိုကရကျတဈပါတီ (United Democratic Party – UDP) သညျနှငျးဆီပှငျ့ပုံ ပါတီတံဆိပျအသုံးပွုသော ကွောငျ့ နှငျးဆီပါတီဟုလညျး ချေါဝျေါကွသညျ။ နှငျးဆီပါတီ၏ ဥက်ကဌ မှာကခငျြလူမြိုးတိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျဟောငျး တဈဦးဖွဈသူ ဦးကြျောမွငျ့ (ခ) မိုကျကယျကြျောမွငျ့ဟှာ ဖွဈသညျ။ UDP ပါတီသညျ ၂၀၁ဝရှေးကောကျပှဲနှငျ့ ၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲတှငျနရော ၈၀ ဝနျးကငျြယှဉျပွိုငျခဲ့သျောလညျးအနိုငျမရခဲ့ပေ။ https://www.chinworld.org/2020/09/24/ %e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80
မွဝတီနယျစပျရှိ မွနျမာ-ထိုငျး ခဈြကွညျရေးတံတား အမှတျ ၂ မှတဈဆငျ့ နရေပျပွနျ ရှပွေ့ောငျးအလုပျသမားမြား ကို စကျတငျဘာ ၂၃ ရကျနေ့(ယနေ့)မှစ၍ မှနျးလှဲ ၁ နာရီမှ ညနေ ၆ နာရီထိသာ စိစဈလကျခံတော့မညျဟု မွဝတီခရိုငျ၊ အုပျခြုပျ ရေးမှူး ဦးတဇောအောငျက ပွောသညျ။ ယခုလို အခြိနျပွောငျးလဲ စိစဈလကျခံရခွငျးမှာ ကိုဗဈ အရေးပျေါကာလ နရေပျပွနျ လာသူ တဖွညျးဖွညျး နညျးလာ ခွငျးကွောငျ့ ဖွဈသညျဟု ၎င်းငျးက ပွောသညျ။
ထိုငျးမှ နရေပျပွနျမြားကို ပွီးခဲ့သညျ့ မတျလအတှငျးက စတငျစိစဈ ဝငျခှငျ့ပွုခဲ့ရာ နစေ့ဉျ ထောငျနှငျ့ခြီအလုပျသမား မြား ပွနျဝငျလာသျောလညျး ယခု အခြိနျတှငျ ရာဂဏာနျးမြှသာ ရှိပွီး ပွနျလာသူမြားကို မွဝတီရှိ Quarantine centre မြားတှငျ အသှားအလာ ကနျ့သတျစောငျ့ကွညျ့ ခွငျးမြား ပွုလုပျလြှကျရှိကွောငျး ခရိုငျအုပျခြုပျရေး တာဝနျရှိသူ မြားထံမှ သိရသညျ။
ထိုငျးမှ နရေပျပွနျမြားမှာ မတျ ၂၁ ရကျနမှေ့ စကျတငျဘာ ၂၁ ရကျနထေိ့ ၆ လ အတှငျး အမြိုးသား ၇၃,၁၃၃ နှငျ့ အမြိုးသမီး ၄၅,၂၇၉ စုစုပေါငျး ၁၁၈,၄၁၂ ဦး ပွနျလညျလကျခံထားပွီး ဖွဈသညျ။ http://kicnews.org/2020/09/%e1%80%91% e1%80%ad%e1%80%af%e1%80 %84%e1%80%b9%e1%80
ရခိုငျပွညျနယျတောငျပိုငျးက တောငျကုတျ၊ သံတှဲ၊ မာနျအောငျ မွို့နယျတို့က နရောတခြို့မှာ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ (National League for Democracy- NLD)ပါတီ ရှေးကောကျပှဲ အောငျနိုငျရေး အတှကျ စညျးရုံး လှုံ့ဆျောထားတဲ့ ဆိုငျးဘုတျတှေ ဖကျြဆီးခံခဲ့ရပါတယျ။
တောငျကုတျမွို့အတှငျးက နရောတခြို့မှာ ဆိုငျးဘုတျတှေ ဖကျြဆီးခံထားရတယျလို့ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီ အဖှဲ့ခြုပျရဲ့ ရခိုငျပွညျနယျဆိုငျရာ ပွောခှငျ့ရသူလညျးဖွဈ၊ ရခိုငျပွညျနယျ လှတျတျောကိုယျစားလှယျ တယောကျလညျးဖွဈတဲ့ ဦးမငျးအောငျ က ပွောပါတယျ။ “ရှေးကောကျပှဲအောငျနိုငျရေးဆိုငျးဘုတျတှေ၊ ကိုယျစားလှယျလောငျးတှရေဲ့ ဗီနိုငျးတှေ ၄ နရောမှာ ဖကျြဆီးခံထားရတာရှိတယျ၊ မအီမွို့မှာ စဖွဈတာ၊ နောကျပွီး ခြောငျးသုံးခှရှာ၊ နတျကနျရှာ၊ တနျးလှဲရာမမွို့ စတဲ့နရောတှမှော ဖကျြဆီးခံရတယျ” လို့ သူက ဘီဘီစီကို ပွောပါတယျ။ သံတှဲမွို့နယျ ငပလီမှာလညျး NLD ဆိုငျးဘုတျ တဈခု ဖကျြဆီးခံခဲ့ရသလို မာနျအောငျမွို့နယျ သဈပုံရှာမှာ NLD အောငျနိုငျရေး ဆိုငျးဘုတျထောငျတာကို ရှာသားတခြို့ ကနျ့ကှကျမှုတှေ ပျေါပေါကျခဲ့တဲ့ အတှကျ ဆိုငျးဘုတျကို မထောငျနိုငျဘဲ ပွနျနုတျယူခဲ့ရတယျလို့ သိရပါတယျ။
အဲဒီရှေးကောကျပှဲနောကျပိုငျး ရက်ခိုငျ့တပျတျော (Arakan Army – AA) နဲ့ အစိုးရ တပျမတျောအကွား လကျနကျကိုငျပဋိပက်ခ တှေ ဖွဈလာခဲ့ပွီးတဲ့နောကျ အခုလာမယျ့ ရှေးကောကျပှဲမှာ NLD ပါတီဟာ ဒီမွို့နယျတှမှော ဆကျအနိုငျရရေးအတှကျ အရငျရှေးကောကျပှဲထကျ ပိုခကျခဲမယျဆိုတဲ့ မှနျးဆခကျြတှလေညျး ထှကျပျေါနတောပါ။ ရခိုငျပွညျနယျ ရှေးကောကျပှဲ လလေ့ာစောငျ့ကွညျ့ရေးအဖှဲ့ ဦးဆောငျကျောမတီ အဖှဲ့ဝငျ ဦးခိုငျကောငျးစံက အခုလို နိုငျငံရေးပါတီတခုရဲ့ ဆိုငျးဘုတျတှေ တိုကျခိုကျကွတဲ့အပျေါ ဝဖေနျပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။ “နိုငျငံရေးပါတီတှရေဲ့ ဆိုငျးဘုတျတှကေို ဖကျြဆီးတာမြိုးကို ကြှနျတျောတို့ ကနျ့ကှကျပါတယျ၊ ရှုတျခပြါတယျ၊ ဒါမြိုးကမလုပျသငျ့ပါဘူး၊ ဥပဒအေရလညျး ဒါတှဟော ဥပဒကေို ဖောကျဖကျြကြူးလှနျ နတောပါ” လို့ သူက ပွောပါတယျ။
အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျက ဦးမငျးအောငျက တောငျကုတျမွို့နယျအတှငျး ဆိုငျးဘုတျတှေ ဖကျြဆီးခံရတာနဲ့ ပတျသကျပွီး အရေးယူဆောငျရှကျပေးဖို့ ရဲစခနျးမှာ အမှုဖှငျ့ထားတယျလို့ ပွောပါတယျ။ https://www.bbc.com/burme se/burma-54264189